ဆေးဝါးဗေဒ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤစာမျက်နှာတွင် ရေးသားထားသော ဆေးဝါးများအကြောင်းသည် သူနာပြု၊ ဆေးမှူး၊ ဆေးခန်းလက်ထောက်၊ လူထု-ကျန်းမာရေး-လုပ်သားများ အတွက်နှင့် ဆရာဝန်မှ ဆေးညွှန်းလိုက်သဖြင့် သုံးစွဲရသူများ ဆေးအကြောင်း သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဆေးဝါး-သုတေသနများ စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်နေရာ ပိုမိုသိရှိလာသည်များအား ပြင်ဆင်-နုတ်ပယ်-ဖြည့်စွက်မှု ပြုလုပ်နေပါမည်။
Medicine mostly အသုံးများ ဆေးဝါးများ[ပြင်ဆင်ရန်]
Medical abbreviations အတိုကောက်စာလုံးများ[ပြင်ဆင်ရန်]
OD = တနေ့ ၁ ကြိမ် သောက်ရန်
BD = တနေ့ ၂ ကြိမ် သောက်ရန်
TDS = တနေ့ ၃ ကြိမ် သောက်ရန်
QID = တနေ့ ၄ ကြိမ် သောက်ရန်
HS = ညအိပ်ရာဝင်ချိန်တွင် သောက်ရန်
PC = အစာနှင့်တွဲဖက် သောက်ရန်
CM = နက်ဖြန်မနက် သောက်ရန်
Stat = ချက်ချင်း သောက်ရန်
=== ဆေးအမျိုးအစားများ ===bolta
1 Acebutolol (ဘီတာ-ဘလော့ကား) အုပ်စုဝင်ဆေး၊ သွေးတိုး၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ 200-1,200 mg OD/BD; Children = 20 mg BD/TDS
2 Acetylsalicylic acid, Aspirin, Barbiturate, Buspro, Sodium Salicylate, NSAID (စတီရွိုက်) မပါသည့် အနာ-အကိုက်-အဖျား-အရောင် ကျဆေးအုပ်စု၊ (ရူမက်တစ်)ခေါ် လေးဘက်နာရောဂါ၊ သွေးခဲပြီး သွေးကြော ပိတ်ခြင်း၊ Adults 325-500-650-1000 mg TDS/QID, Children 160-240-320-325-480 mg QID
3 Achromycin Tetracycline ပိုးများစွာကို နိုင်သည့် ပဋိဇီဝဆေး၊ နူမိုးနီးယား
4 Aciloc Ranitidine = Histamine-2 blockers
5 Acivir DT, Acyclovir, Cyclovir, Aciclovir ရေယုံဆေး၊ 1000 mg (therapy of herpes); Acyclovir 15 mg/kg (mucocutaneous herpes); Acyclovir 30 mg/kg (CNS herpes); Acyclovir 800 mg3times daily (herpes suppression for immunocompromised patient) 200 mg5times daily or 800 mg TDS မွေးလမ်းရေယုံ၊ 200-400 mg5times daily ရေယုံကြောင့် မျက်ကြည်လွှာရောင်ခြင်း၊ Cortisone မပေးရ၊ 200-800 mg x5times daily x 7-14 days (အက်ဖ်သပ်စ်-အာလ်ဆာ)၊ 400 mg3times/day or 200 mg5times/day x 7-10 days မွေးလမ်းရေယုံ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ပျို့၊ အန်၊ ဝမ်းချုပ်
6 Acne Lotion 10 (Alcohol and Sulfur), Acnesol ဝက်ခြံ၊ အရေပြားအဆီပြန်ခြင်း လိမ်းဆေး
7 Acriflavine ဆေးဝါရည်။ အနာထဲ ထည့်ဆေး။ အဝတ်အစားတွေကို ဝါစေတယ်။ မျက်စိထဲ မဝင်စေရ။
8 Adefovir, Dipivoxil Tablets (Adfovir) လူကြီးများအတွက် အသဲရောင်-အသားဝါ(ဘီ) ရောဂါအတွက်ဆေး
9 Adelphane (Reserpine + Dihydrallazine) သွေးတိုး၊ Up to 500 mcg x2weeks and reduced to 250 mcg daily ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = နှာခေါင်းပိတ်ခြင်း၊ အားယုတ်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျ၊ ခေါင်းကိုက်၊ Adelphine-Esidrex ဆီးသွားစေသည့်ဆေးနှင့် ရောထားသော သွေးတိုးကျဆေး
10 Adrenalin (Epinephrine) (အနာဖလက်တစ်-ရှော့ခ်) အတွက် အသက်ကယ်ထိုးဆေး၊ (အလာဂျီ)ရခြင်း၊ ပန်းနာ၊ ရုတ်တရက် နှလုံးခုန်ရပ်ခြင်း၊ မျက်စိ ရေတိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ လေပြွန်ကျဉ်းခြင်း၊ ထုံဆေးပေးစဉ် သွေးထွက် နည်းစေရန်ရောထိုးနိုင်သည်၊ (0.01 mg/kg) 1 to 10 mg IV-S/C 1:10,000 solutin may be repeated at5min interval ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = အန်၊ မူးဝေ၊ ချွေးထွက်၊ အစာအိမ်မကောင်း၊ ဂနာမငြိမ်၊ ရင်တုံ
11 AKT41 capsule of Rifampicin 450 mg,2tablets of Pyrazinamide 750 mg and 1 tablet of Ethambutol 800 mg plus Isoniazid (INH) 300 mg ၄ မျိုးတွဲ တီဘီဆေး
12 Albendazole, Albenza, Albazole, Albendol, Albex, Mebendazole သန်ချဆေး
a Filariasis Albendazole 400 mg stat + Ivermectin 200 μg/kg; 400 mg BD x3weeks ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ
b Giardiasis Albendazole 400 mg daily x5days (ဂိုင်ယာဒီးယား)ပိုးဝင်၍ ဝမ်းပျက်ခြင်း
c Hookworm (Ankylostomiasis) Albendazole 400 mg BD x3consecutive days + Ferrous sulfate 200 mg TDS x3months ချိတ်သန်ကောင်
d Neurocysticercosis Albendazole 400 mg BD for Children 15 mg/kg BD x 8-30 days အာရုံကြောစနစ်ထဲရောက်သည့် သန်ကောင်
e Pinworms (Enterobius vermicularis) Albendazole Adult and above2years = 400 mg HS Children above2years = 200 mg HS often repeated after2weeks; Children below2years ½ dose စအိုယားစေသည့် ပင်အပ်ပုံ သန်ကောင်
f Roundworm Albendazole 400 mg stat or for 2-3 days; Children below2years ½ dose သန်လုံးကောင်
g Threadworm (Seat worm, Strongyloides) Albendazole Adult = 400 mg OD/BD x3days; Children below2years ½ dose အရေပြားကတဆင့်ဝင်သည့် သန်ကောင်
h Tapeworm (Echinococcosis, Hydatid disease, Hydatid cyst) Albendazole Adults and children 400 mg BD PC x 28 days repeat in 14 days တိပ်ပြားပုံ သန်ကောင်
i Whipworm (Trichuriasis) Albendazole Adult and above2years = 400 mg tablet BD or HS x3consecutive days; Children below2years ½ dose ကျာပွတ်နှင့်တူသော ဝမ်းပျက် စေသည့် သန်ကောင်
j ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ ဆံပင်ကြွတ်၊ အစာအိမ်အောင့်၊ ကိုယ်ဝန်ရှိနေစဉ် မပေးသင့်
13 Alconefrin Phenylephrine Nasal Drops နှာခေါင်းပိတ်ခြင်းအတွက် ထည့်ဆေး
14 Aldactone Spironolactone, Potassium-sparing Diuretics ပိုတက်စီယံမလျှော့နည်းစေသည့် ဆီးသွား စေသည့်ဆေး၊ သွေးတိုး၊ နှလုံးရောဂါအတွက်သုံးသည်။ 25-100-400 mg
15 Alerid Cold Tablets (Cetirizine dihydrochloride5mg + Phenylpropanolamine 25 mg + Paracetamol 500 mg) (အင်တီဟစ်တမင်း) အုပ်စုဝင်ဆေး၊ အအေးမိခြင်း၊ ဆိုင်းနပ်စ်၊ နှာစေးချောင်းဆိုး၊ Adult = 1 BD; Children = ½ of adult dose ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ခေါင်းကိုက်၊ အာခေါင်ခြောက်၊ အိပ်ချင်၊ အစာအိမ်အောင့်
16 Alfacalcidiol (Calciferol) 1.4 ug/kg daily ဗီတာမင်(ဒီ)၊ အရိုးကြီးထွားစေရန်
17 Alfit (Protein Hydrolysate + Vitamin B 1 + B2+ B6+ Niacinamide + Iron Choline Citrate + Magnesium Chloride) သွေးအားကောင်းရန်နှင့် ဗီတာမင်များ
18 Allegra H1-receptor antagonist အလာဂျီရခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ တနေ့ ၁ ပြား
19 Allopurinol, Zyloprim, Zyloric (ဂေါက်)၊ အဆစ်နာ။ Initially 100-200-300-600 mg daily; Maintain 200-600; 15 mg/kg OD
20 Alpha-Glucosidase inhibitors (Acarbose, Miglitol, Voglibose) ဆီးချိုစားဆေး
21 Alpink-Z (Ferrous Sulphate + Folic acid + Vitamin B12 + Elemental Zinc) ဇင့်(သွတ်ဓာတ်) ပါသော သွေးအားကောင်းစေရန်ဆေး
22 Alprazolam, Altrex, Xanax, Alprest-0.25, Alzolam, Praxal, Zolan, Alprocontin စိတ်ပူပန်ခြင်း၊ Anxiety သက်သာစေရန်ဆေး၊ 0.25 mg BD or TDS; 0.5 mg every3days; တနေ့လျင်4mg ထက်ပိုမပေးရ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = စိတ်ထိုင်းမှိုင်း၊ သွေးဖိအားကျ၊ ဝမ်းပျက်၊ မှတ်ဉာဏ်လျှော့
23 Alteplase 0.75 mg/kg နှလုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ (Attack, Stroke) ရခြင်း
24 Aluminium Hydroxide and Oxide လေနာရောဂါအတွက်ဆေး 250-1500 mg TDS;
25 Amcold syrup (Cetirizine hydrochloride5mg + Ambroxol hydrochloride 60 mg) 5-10 ml OD or BD အအေးမိခြင်း၊ အလာဂျီ၊
26 Amicip, Amikacin sulphate 15 mg/kg တဝက်တပျက် တည်ဆောက်ထားသည့် ပဋိဇီဝဆေး၊ နှလုံးအတွင်းသား-ဦးနှောက်မြှေး-သည်းခြေအိတ်-မွေးလမ်း-အရိုး-အဆစ်-သွေးထဲ ပိုးဝင်ခြင်း၊ မီးလောင်နာ၊5mg/kg BD IV/IM; 15 mg/kg/day in2or3equally divided doses every 8 or 12 hours. Maximum daily dose 500 mg TDS ပြင်းထံသော ပိုးဝင်ခြင်းများ၊ Total dose over 10 days not to exceed 15 g မွေးစကလေးပိုးဝင်ခြင်း၊ = 10 mg/kg followed by 7.5 mg/kg BD ကျောက်ကပ်အလုပ် မလုပ်တော့ခြင်း၊ Amikacin (5 mg/kg BD IV/IM) (7.5 mg/kg BD IV) နှလုံးအလုပ် မလုပ်တော့ခြင်း၊ ဝမ်းတွင်းမြှေး-အသက်ရှူလမ်း-ဆီးလမ်းရောင်ခြင်း၊ Amikacin 15 mg/kg သွေးပြန်ကြောရောင်ခြင်း၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ် ထိခိုက်၊ ခေါင်းကိုက်၊ နားထိခိုက်၊ Amikacin 15 mg/kg
27 Amiloride (hydrochloride) ဆီးသွားစေသည့်ဆေး၊ = one 5-10 mg tablet daily
28 Aminophylline, Theophylline, Etophylate အသက်ရှူလမ်းကျဉ်းခြင်း၊ ပန်းနာ၊ ထိုးဆေး-စားဆေး၊ 250-500 mg (4-5 mg/kg) IV slowly, 100-300 mg TDS/QID Orally ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ ခေါင်းကိုက်၊ ဗိုက်အောင့်၊ အအိပ်ပျက်
29 Amitriptyline (HCl), Nortriptyline, Desipramine စိတ်ကျရောဂါ၊ နာတာရှည်နာကျင်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း အမျိုးမျိုး၊ 25-50 mg HS and 10-150 mg HS; 0.285-0.429 mg/kg QID IM; Amitriptyline 150-250 mg (max 300 mg) ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = အိပ်ချင်၊ ဝမ်းချုပ်၊ သွေးဖိအားကျ၊ အာခေါင်ခြောက်၊ အလေးချိန်တက်၊ မျက်စိကြည့်မကောင်း
30 Amlodipine (Besylate), Norvasc (Calcium channel-blocking agent) သွေးတိုး၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း၊ 2.5- 5-10 mg QID; Maximum dose: 10 mg/24hr;
31 Amodiaquine ငှက်ဖျားရောဂါဆေး၊ အခြားဆေးများနှင့် တွဲပေးရသည်။
32 Amphotericin B Antifungal Drugs မှိုအတွက်ဆေး၊ 0.3 mg/kg/day to 0.7 mg/kg/day, though infections caused by Aspergillus and Mucor are often treated with 1–1.5 mg/kg daily. Combined treatment with flucytosine is beneficial in cryptococcal meningitis and possibly systemic candidiasis.
33 Amphotericin B (ဖန်းဂပ်စ်)ခေါ် မှို ရောဂါဆေး၊ 40-80-100 mg QID
34 Ampicillin ပနယ်စလင်အုပ်စုဝင် ပဋိဇီဝဆေး၊ Penicillin နှင့် သတ္တိတူသော်လည်း Ampicillin, Amoxicillin တို့သည် Gram-negative bacteria တို့အား ပိုမိုထိရောက်သည်။ pneumonia, meningitis, bacteremia, or endocarditis ဖြစ်လျှင် IV ပေးပါ။ Amoxicillin စားဆေးအဖြစ် သိပ်မဆိုးသော ပိုးဝင်ခြင်းများ exacerbations of chronic bronchitis, sinusitis, or otitis, prophylaxis for endocarditis လူစုလူဝေးမှရသော နူမိုးနီးယား = 80–90 mg/kg/d in two doses ၃ ရက်။ ရောဂါလက္ခဏာ ပျောက်သွားစေကာမူ ဆေးပါတ်လည်အောင် ပေးရမည်။ အစာနှင့်နီးသည်ဖြစ်စေ ဝေးသည်ဖြစ်စေ ပေးနိုင်သည်။ Ampicillin = 100 mg/kg
a. Ampicillin 500 mg QID x5days (GE) အစာလမ်း (အူ) ရောင်ခြင်း၊ လူကြီး = 250-500 mg TDS or 500 mg BD or 750 mg BD x 7-14 days; ကလေး 125-250 mg TDS
b. ဆိုင်းနပ်စ်၊ အာသီး-လည်ပင်း-လေပြွန်-အသံပြွန်-ဆီးလမ်း-အရေပြား-သဲခြေလမ်း-နှလုံးသားရောင်ခြင်း၊ နားပြည်ယိုခြင်း၊ နားကိုက်ခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ 750 mg BD
c. နူမိုးနီးယား၊ ဒေါင့်သန်းရောဂါ၊ 500 mg QID x 7-10 days
d. အကိုက်အခဲပျောက် ဆေးများကြောင့်ဖြစ်သော အစာအိမ်လေနာ၊ 1 Gm x 10-14 days followed by Omeprazole 20 mg or Rabeparzole 20 mg, Lansoprazole 15-30 mg, Pantoprazole 40 mg 30 minutes before meals OD (or) Ranitidine and Nizatidine 300 mg, Famotidine 40 mg and Cimetidine 800 mg HS x 4-8 weeks
e. (ဂနိုရီးယား)3Gm stat + Probenecid တွဲပေးသည်။
f. သွားပိုးဝင်၍ ပြည်တည်ခြင်း၊ သွားမနုတ်မီ ၁ နာရီ3Gm TDS
g. ပြင်းထံသော အသက်ရှူလမ်း ပိုးဝင်ခြင်း၊3Gm BD
h. Ampicillin (250-500 mg QID Orally) (500-1,000 mg QID IV/IM) (18.75 mg/kg QID Orally/IV/IM); Children ½ of the adult dose x 7-14 days နားအလည်ပိုင်း (အင်ဖက်ရှင်)၊ (ဆိုင်းနပ်စ်)၊ ဆီးလမ်း-ကျောက်ကပ်-နှလုံးသား-အာသီး-လေပြွန်-သည်းခြေလမ်း ရောင်ခြင်း၊ သွေးထဲ ပိုးရောက်ခြင်း၊ အရေပြားအနာ
i. Ampicillin + Gentamicin 3-week course of IV (မင်နင်ဂျိုက်တစ်) ဦးနှောက်မြှေးရောင်
j. Ampicillin 1 Gm QID + Gentamycin 1 mg/kg TDS IV x 21 days ကျောက်ကပ်ပြွန် ရောင်ခြင်း
k. Ampicillin 1-2 Gm QID + Gentamycin2mg/kg TDS + Metronidazole 500 mg IV TDS ဝမ်းတွင်မြှေးရောင်ခြင်း
l. Ampicillin 500 mg IV QID or Ciprofloxacin 250 mg IV BD ခွဲစိတ်ပြီးဖြစ်သော သဲခြေအိတ် ရောင်ခြင်း
m. Ampicillin2Gm + 1 Gm of Probenecid နှင့်တွဲပေးပါ၊ (ဂနိုးရီးယား)
n. Ampicillin2Gm IV QID အသက်ရှူလမ်း အောက်ပိုင်းရောင်ခြင်း
o. Ampicillin 1 Gm QID + Gentamycin 1 mg/kg TDS IV x 21 days အရိုးအတွင်းရောင်ခြင်း၊ နားပြည်ယိုခြင်း၊ မွေးလမ်းရောင်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ပြွန်ရောင်ခြင်း
p. Ampicillin 1-2 Gm QID x2weeks (500-1,000 mg QID IV/IM) (18.75 mg/kg QID Oral/IV/IM) တိုက်ဖွိုက်
q. ကိုယ်ဝန်တားဆေး Methotrexate, Sulfa drugs, Tetracycline တို့နှင့် တွဲဖက် မပေးသင့်။
r. ဆိုးကျိုးများ၊ ဝမ်းပျက်၊ ခေါင်းမူး၊ ရင်ဘတ်ပူ၊ အိပ်မရ၊ ပျိူ့၊ ယား၊ အန်၊ ဗိုက်နာ၊ အနီရောင်အင်ပြင်ထွက်။ အသက်ရှူခက်ခြင်း၊ မျက်နှာ-နှုပ်ခမ်း-လျှာ-လည်ပင်းရောင်၊ ကိုယ်ပူ၊ ချမ်းတုံ၊ မူးဝေ၊ ယားယံ၊ အိပ်မပျော်၊ စိတ်မကြည်၊ ဗိုက်အောင့်၊ သွေးယို၊ ဆီးနည်း၊ တက်ခြင်း၊ မွေးလမ်း အဖြူဆင်းခြင်း၊ မှက်ခရု၊
35. Analgin, Analgesin, Dipyrone NSAID အနာ-အကိုက်-အဖျားသက်သောဆေး၊ 500-1000 mg QID Orally, 0.8 to 1.6 g IM/IV ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = (ရှော့ခ်)၊ အရေပြားနီ၊ သွေးဖိအားကျ၊ ဆီးနီ
36.	Angizem, Diltiazem (HCl) နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း၊ သွေးတိုး၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း၍ ရင်ဘတ်နာခြင်း၊ 60-120-360 mg BD; 30-60 mg TDS; Maximum dose: 480 mg/day
37.	Anidulafungin (Eraxis) 100 mg
38.	Antacids လေနာရောဂါ ဆေးများ၊ အစာအိမ် အက်စစ်ဓာတ်ပျယ်ဆေးများ၊ (Aluminum carbonate, Aluminum hydroxide, Calcium carbonate, Calcium phosphate, Magnesium aluminosilicate, Magnesium carbonate, Magnesium glycinate, Magnesium hydroxide, Magnesium oxide, Magnesium trisilicate, Sodium bicarbonate)
39.	Anti-Emetics အအန်ပျောက်ဆေးများ Anti-Emetics အအန်ပျောက်ဆေးများ
a.	Antihistamines (Cyclizine, Cinnarizine, Meclozine Hydrochloride, Promethazine) အင်တီဟစ်တမင်း ခေါ်အာလာဂျီဖြစ်ခြင်းအတွက် အသုံးများသည့်ဆေးများ၊
b	Phenothiazines (Prochlorperazine, Trifluoperazine, Levomepromazine) စိတ်ငြိမ်ဆေး၊ အလွန်အန်ခြင်း၊ ကြို့ထိုးခြင်းတို့အတွက်ဆေးများ၊ အန်ခြင်းအားသက်သာစေသည်သာမက Compazine (Prochlorperazine) ကို IV ထိုးပါက မိုင်ဂရင်း အမူး-အကိုက် ရောဂါကိုတားဆီးနိုင်သည်။ ပါးစပ်ကသာမက စအိုကလည်း ပေးနိုင်သည်။
c.	Metoclopramide အစာအိမ်ထဲကအစာကို မြန်မြန်အောက်သို့ ပို့ပေးသည့်အတွက် အစာတင်းနေ၍ အန်ချင်သည်ကို သက်သာစေသည်။ စားဆေး၊ ထိုးဆေး၊ စအိုက ပေးနိုင်သည်။
d.	Meclizine = Antivert (12.5 mg – 25 mg – 50 mg), Dramamine, Gravol, Gravamin, and Vertirosan တို့အစား meclizine ကိုပေးနိုင်သည်။ ထိရောက်မှုတူပြီး မကောင်းကျိုးနဲသည်။ Emesafene = meclizine 1/3 + pyridoxine 2/3
e.	Domperidone အစာစားပြီး အန်ချင်သည့်ရောဂါအတွက် ပေးသည်။ အချို့က မိခင်နို့ထွက်များစေရန် သုံးသော်လည်း မသုံးရန်အကြံပြုထားသည်။
f.	Serotonin antagonists (5HT3) (Dolasteron, Granisetron, Ondansetron) စားဆေး၊ ကပ်ဆေး၊ ထိုးဆေး၊ ကင်ဆာအတွက်ပေးရသည့် ဆေးများကြောင့်အန်ချင်စိတ်ကို သက်သာစေသည်။
g.	Dexamethasone စတီရွိုက်ဆေး၊ ရောင်ခြင်း-နီမြန်းခြင်း၊ အလာဂျီဖြစ်ခြင်း၊ ပန်းနာ၊ ကင်ဆာတို့အတွက် သုံးသည့်ဆေး။
h.	Hyoscine hydrobromide (Scopolamine hydrobromide) အသက်ရှူလမ်းမှထွက်သည့် စစ်ထုတ်ရည်အား တားဆီးသည့်ထိုးဆေး၊ မေ့ဆေးပေး၍ ခွဲစိတ်အပြီးပန်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်ပေးသည်။ ခွဲစိတ်ခြင်းမပြုမီပေးရသည်။
i.	Nabilone ကင်ဆာအတွက်ပေးသည့်ဆေးကြောင့်အန်ခြင်း၊ တနေ့ ၂-၃ကြိမ်၊ အစာနှင့်နီးသည်ဖြစ်စေ ဝေးသည်ဖြစ်စေ ပေးနိုင်သည်။
j.	Aprepitant ကင်ဆာအတွက်ပေးသည့်ဆေးကြောင့် အန်ခြင်းအတွက် ၁ နာရီကြိုပေးရသည်။
k.	Morning sickness ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အန်ခြင်း။ B-Natal TheraPops နှင့် B-Natal Lozenges တို့သည် ဗီတာမင် ဘီ-၆ ပါသည့်ဆေးများဖြစ်ပြီး၊ Psi Bands Acupressure ကို လက်ကောက်ဝတ်မှာ ပတ်ထားနိုင်သည်။ Bands Organic Morning Wellness Tea နှင့် Organic Heartburn Relieving Tea QueaseEASE နှင့် Essential Oil Therapy တို့မှာလည်း ခေတ်သုံးဆေးများ ဖြစ်သည်။
l.	Hyperemesis Gravidarum ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အလွန်အကြွံအန်ခြင်း။ Promethazine, Prochlorperazine and Metoclopramide တို့ကို ပေးနိုင်သည်။ Pyridoxine ဗီတာမင် ဘီ ၆၊ doxylamine 10 mg နှင့် pyridoxine (B6) 10 mg ရောပေးသင့်သည်။ Promethazine 12.5-25 mg ကို ၄ နာရီခြား၎င်း၊ Prochlorperazine 25 mg ကို စအိုမှ ၁၂ နာရီခြား ပေးနိုင်သည်။ Meclizine, Dimenhydrinate, Metoclopramide တို့ကိုလည်း ပေးနိုင်သည်။ Corticosteroids (methylprednisolone 16 mg စားဆေး or intravenously every 8 hours) ကို နောက်ဆုံးအဖြစ် ပေးနိုင်သည်။ ချင်း Ginger capsules of 250 mg taken4timesaday သည်လည်း ကောင်းသည်။
m.	ခွဲစိတ်ကုရာတွင် မေ့ဆေးကြောင့် ပျို့-အန်ခြင်း၊ A Serotonin antagonist နှင့် phenothiazine or dexamethasone ရောထားသည့် ဆေးသည် 90% ကောင်းသည်။ phenothiazines, metoclopramide, 5HT3 antagonists, antihistamines and dexamethasone) တို့ကို ကာကွယ်ရန်ပေးသည်။
n.	Motion sickness ခရီးသွားစဉ် ပျို့-အန်ခြင်း၊ Hyoscine, Cyclizine, cinnarizine, promethazine တို့ကိုပေးနိုင်သည်။ Dramamine အသုံးအများဆုံးဆေးကို အသက် ၂ နှစ် အထက်ပေးနိုင်သည်။ ကိုယ်တိုင်ကားမောင်သူအား မပေးရ။ အရက်နှင့်မတွဲရ။ အခြားအိပ်ချင်စေသည့်ဆေးများ (အအေးမိ သက်သာဆေး၊ ဘိန်းပါသည့်ဆေး၊ အိပ်ဆေး၊ စိတ်ငြိမ်ဆေး၊ အတက်သက်သာဆေး၊) များနှင့် တွဲမပေးသင့်ပါ။ ခရီးမထွက်မီ နာရီဝက်၊ ၁ နာရီကြိုတင် သောက်ရမည်။ အချို့ဆေးက ၄ နာရီခံပြီး အချို့က ၂၄ နာရီခံသည်။ ဆေးကို ရေတဖန်ခွက် အပြည့်ဖြင့် သောက်ပါ။ နားကြောင့်ဖြစ်ရသည့် ခေါင်းမူးရောဂါ အတွက် ဆေးကို တနေ့လျင် ၄-၆ ကြိမ် သောက်ရသည်။
40.	Anusol Ointment, Pilex Ointment, Germoloids Ointment: လိပ်ခေါင်းရောဂါ ထည့်ဆေးများ။
41.	Aquazide (Hydrochlorothiazide), Esidrex, Thiazide 12.5-25-50-100 mg daily ဆီးသွားစေသည့် သွေးတိုးကျဆေး၊ ကိုယ်ရောင်ခြင်းအတွက်ဆေး၊
42.	Artemisinin-based combination therapy (ACT) ငှက်ဖျားအပြင်းစားအတွက် (အာတီမစ်စင်နင်) ပါသည့် ဆေးအတွဲများ၊
(1) Artemether + Lumefantrine, Adult (14 years and above) = 0h - 8h - 24h - 36h - 48h - 60h =4-4-4-4-4– 4
(2) Artesunate (50 mg) + Amodiaquine (153 mg) Day 1 - Day2- Day3- Day 1 - Day2- Day3=4-4-4-4-4– 4
(3) Artesunate (50 mg) + Mefloquine (250 mg) Day 1 - Day2- Day3- Day 1 - Day2- Day3=4-4-4-0-4– 2
(4) Artemether (20 mg)-Lumefantrine (120 mg) Artesunate (50 mg) + Sulfadoxine-pyrimethamine (500/25) Day 1 - Day2- Day3- Day 1 - Day2- Day3=4-4-4-3-0- 0
43.	Ascorbic Acid (Vitamin C) 100-500 mg daily ဗီတာမင် စီနည်းသည့် (စကာဗေ)ရောဂါအတွက်ဆေး၊
44.	Aspirin (Barbiturate), Sodium Salicylate, Acetylsalicylic acid, NSAID အနာ-အကိုက်-အဖျား-အရောင်၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အရိုးတီဘီ၊ ဂေါက်၊ Adults 325-500-650-1000 mg TDS/QID, Children2to4years 160-240-320-325-480 mg QID; သွေးခဲသဖြင့် သွေးကြောပိတ်ခြင်းအတွက် Adults 81-162.5-325-1000 mgaday or every other day; Aspirin 0.6-0.9 Gm4hourly ရက်တို ရူမက်တစ်အဖျား၊ Aspirin 10-15 mg/kg QID နှလုံးရောဂါ (Attack, Stroke) ရခြင်း၊ Aspirin 300-600 mg QID Oral
45.	Atecard-D, Tenoclor, Tenorid (Atenolol 50 mg + Chlorthalidone 25 mg) OD; (Atenolol 100 mg + Chlorthalidone 25 mg) (ဘီတာ-ဘလော့ကား) အုပ်စု၊ သွေးတိုး၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊
46.	Atenolol = (ဘီတာ-ဘလော့ကား) အုပ်စု၊ သွေးတိုး၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ ရုတ်တရက် နှလုံးရောဂါ ထခြင်း၊ 50 mg 10 minutes after the last (IV) dose followed by another 50 mg 12 hours later. Then, 100 mg OD or 50 mg BD for another6to9days or until discharge from the hospital နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါ၊ သွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ သွေးခုန်နှုန်းမမှန်ခြင်း၊ 50 mg OD သွေးတိုးကျဆေး၊ = 50 mg, 100 mg; နှလုံးရောဂါ (Attack, Stroke) ရခြင်း၊5mg IV or 50-100 mg Oral Daily
47.	Atovaquone-proguanil (Malarone) ငှက်ဖျားကုသရန်-ကာကွယ်ရန်ဆေး၊ Chloroquine နှင့်တွဲပေးရသည်။ Proguanil (HCl) 100 mg;5mg/kg daily for children ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ပါးစပ်အနာဖြစ်၊ အရေပြားနီ၊ ဆံပင်ကြွတ်။
48.	Atropine Sulphate လေနာ၊ မျက်စိထဲခပ်ပါက သူငယ်အိမ် ကျယ်စေသည်၊ နှလုံးခုန်နှေးသည်ကို ကုနိုင်သည်၊ ပိုးသတ်ဆေး အဆိပ်သင့်ခြင်းအတွက် ထိုးပေးနိုင်သည်၊ ချွဲထွက်နည်းစေရန် မေ့ဆေးမပေးမီ ထိုးပေးရသည်။ နှလုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ (Attack, Stroke) ရခြင်း၊ 300 to 1200 mcg IV/IM/SC every4to6hours; 0.5 to 1.0 mg IM/IV အာခေါင်ခြောက်စေသည်။
49.	Augmentin (Amoxicillin, 250 mg, 500 mg, or 875 mg, plus 125 mg of Clavulanic acid); Augmentin XR (Amoxicillin 1 g plus 62.5 mg of Clavulanic acid); Unasyn (Ampicillin 1 g plus Sulbactam 0.5 g, and Ampicillin3g plus Sulbactam 1 g); and Zosyn (Piperacillin3g plus Tazobactam 0.375 g, and Piperacillin4g plus Tazobactam 0.5 g) 30 mg/kg ရက်တိုနားယောင်ခြင်း၊ 500 mg TDS
50.	Avil (Aventis) = Pheniramine Maleate (အင်တီဟစ်တမင်း) အုပ်စုဝင်ဆေး၊ အအေးမိခြင်း၊ ဆိုင်းနပ်စ်၊ နှာစေး-ချောင်းဆိုး၊ ပျား-အင်းဆက်ကိုက်၊ (အလာဂျီ)၊ အရေပြားယားခြင်း၊ ကားမူးခြင်း၊ 15-30-50 mg BD/TDS ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = အိပ်ချင်း၊ မူး၊ ဗိုက်နာ၊
51.	Avomine, Phenergan (Promethazine) 25 mg HS or BD/TDS (အင်တီဟစ်တမင်း) အုပ်စုဝင် အအန် အယား ပျောက်ဆေး၊ 10 -25 mg4hourly; 0.75 mg/kg BD အင်းဆက်ကိုက်ခြင်း၊ ခရီးသွားစဉ် ခေါင်းမူး၊
52.	Azithromycin, Azithrol, Azithral, Aziwok, Zithromax, Zmax, Zathrin, Erythromycin, Clarithromycin (မက်ခရိုလိုက်အုပ်စု) ပဋိဇီဝဆေး၊ အစာမစားမီ ၁ နာရီ၊ စားပြီး ၂ နာရီ ပေးပါ၊ Azithromycin (Zithromax) 500 mg as loading dose, then 250 mg/d for4days; နာပြည်ယို၊ အာသီးရောင်၊ လေပြွန်ရောင်၊ နူမိုးနီးယား၊ ဆိုင်းနပ်စ် ရောဂါ။ STD ရောဂါတွေအတွက်လည်း ပေးနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂနိုမဟုတ်တာကို ပိုသုံးတယ်။
a.	Azithromycin (Zithromax) 1 g as single dose for C trachomatis infection
b.	Azithromycin (250-500 mg Daily Orally) (7.5-20 mg/kg Orally) နာတာရှည် လေပြွန်ရောင်၊ (လိုင်မ်) ရောဂါ၊ လိင်မှတဆင့် ကူးစက်ရောဂါများ၊ နှလုံးအတွင်းသား- အရိုးအဆစ် အစာခြေလမ်း ရောင်ခြင်း၊ နားပြည်ယိုခြင်း၊ နှလုံးအလုပ်မနိုင်ခြင်း၊ သာမန်တိုက်ဖွိုက်၊ သားအိမ်အဝရောင်ခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်း အောက်ပိုင်း-အထက်ပိုင်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ အရေပြားပိုးဝင်ခြင်း၊ နားပြည်ယိုခြင်း၊
c.	Azithromycin 1 Gm asasingle dose ဆီးလမ်းပိုး၊ ရှန်ကာရွိုက်၊
d.	Azythromycin 20 mg/kg stat ဂိုနိုးရီးယားကြောင့် မျက်စိနာခြင်း၊
e.	Azithromycin 500 mg on day 1 and 250 mg on days 2-5 (ကလာမိုင်ဒီးယား)ကြောင့် ဆီးပြွန်အဝ-သားအိမ်အဝရောင်ခြင်း၊ ရက်တို ဆိုင်းနပ်စ်၊ နူမိုးနီးယား၊ အာသီး-လည်ချောင်းနာ၊
f.	Azithromycin is in the prevention of cystic fibrosis exacerbation
g.	ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ အရေပြားနီ၊ အစာအိမ်အောင့်၊ ဝမ်းပျက်၊ ခေါင်းကိုက်၊ မူး၊ လေတက်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်-နို့တိုက်မိခင်များအား သတိဖြင့်ပေးပါ၊
53.	Aztreonam (Azactam) 50 mg/kg
54.	Bacitracin (12500.000 IU/g TDS Topical) ပိုးသေးစေသည့်လိမ်းဆေး၊
55.	BCG Vaccine vial of 10 doses (0.05 ml) for infants under one month old and (0.10 ml) for infant 1 to 12 months, to be reconstituted with sodium chloride intradermal injection TB ကာကွယ်ဆေး၊
56.	Beclometasone ပန်းနာနှင့် အသက်ရှူလမ်းပိတ်ရောဂါ ရှူဆေး၊ = inhalation (aerosol) = 50 micrograms per dose; 250 micrograms per dose
57.	Becosules capsules (B-complex forte with vitamin) ဗီတာမင်ဘီအုပ်စုဆေး၊
58.	Benadryl (အင်တီဟစ်တမင်း) အုပ်စုဝင်ဆေး၊ အအေးမိခြင်း၊ (အလာဂျီ)၊ တနေ့ အများဆုံး 300 mg ပေးပါ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ခေါင်းကိုက်၊ အာခေါင်ခြောက်၊ အိပ်ချင်၊ အစာအိမ်အောင့်၊
59.	Bencid (Probenecid) 250-500-1000 mg BD x 1 week ဂေါက်ရောဂါအတွက်ဆေး၊
60.	Bendrofluazide 0.03-0.385 mg/kg daily သွေးတိုးအတွက် ဆီးသွားစေသည့်ဆေး၊
61.	Benzamycin (Erythromycin + Benzoyl peroxide) ဝက်ခြံအတွက်ဆေး၊
62.	Benzarthine penicillin G ဗက်တီရီးယားအတွက် (ဘီတာလက်တင်) အုပ်စုဝင်(ပနယ်စလင်) ပဋိဇီဝဆေး၊
a.	Benzathine Penicillin G 2.4 million units weekly x3weeks ရူမက်တစ်ရောဂါ၊ အာသီးရောင်၊ လည်ချောင်းနာ၊
b.	အာရုံကြော ဆစ်ဖလစ်၊
c.	Penicillin V 200,000-250,000 units BD or Sulfasoxazole 1 Gm daily or Erythromycin 250 mg BD
d.	Benzathine penicillin G 2.4 million units IM onceaweek x3weeks ရက်တို ရူမက်တစ်ရောဂါ ကာကွယ်ရန်၊ ဆစ်ဖလစ် ပဌမအဆင့်၊ ဒုတိယအဆင့် (အရေပြား၊ ဦးနှောက်မြှေး၊)၊ တတိယအဆင့် (အရေပြား၊ မျက်စိ၊ အရိုး၊ အစာလမ်း၊ အသက်ရှူလမ်း၊ နှလုံး၊)။
63.	Benzoic acid + Salicylic acid (ဖန်းဂပ်စ်)ခေါ် မှိုရောဂါလိမ်းဆေး၊ = ointment or cream, 6% + 3%;
64.	Benzoyl Peroxide (Benzac) Gel ဝက်ခြံအတွက်ဆေး၊ အရေပြားခြောက်ခြင်းအတွက် လိမ်းဆေး၊
65.	Benzyl benzoate 25% ဝဲပျောက်လိမ်းဆေး၊
66.	Benzylpenicillin (Na or K) ဗက်တီရီးယားအတွက် (ဘီတာလက်တင်) အုပ်စုဝင် (ပနယ်စလင်) ထိုးဆေး၊
67.	Besylate, Amlodipine သွေးတိုးဆေး၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါဆေး၊ 2.5-5-10 mg daily
68.	Beta blockers = Acebutolol, Atenolol, Betabloc Forte, Betacap, Ciplar, Inderal, Metoprolol, Propanolol (ဘီတာ-ဘလော့ကား) = Adrinaline ကိုတားဆီးမှုလုပ်သည့်ဆေး။ နှလုံးတင်းအားလျှော့စေသည်။ နှလုံးခုန်နှုန်းလျှော့သည်။ သွေးကြောများ၏ ကြုံ့နိုင်စွမ်းနည်းစေသည်။ နှလုံးက အောက်စီဂျင် လိုအပ်မှုအား လျှော့ချပေးသည်။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ နှလုံးခုံနှုန်းမမှန်သည့်ရောဂါ၊ သွေးတိုး။ (မိုင်ဂရင်း) ခေါင်းကိုက်-ခေါင်းမူးရောဂါ၊ Stage fright အကြောက်ရောဂါ။
69.	Betadine (Povidone Iodine Ointment5%) (အိုင်အိုဒင်း) ပါတဲ့ဆေး။ အရေပြားမှာ ပိုးဝင်တာ၊ အနာပေါက်တာ၊ ဒဏ်ရာရတာ၊ မီးလောင်နာ၊ ခွဲစိတ်ပြီးအနာ၊ အနာထဲကိုပါ ထည့်ပေးနိုင်တယ်။
70.	Betamethasone (Diprolene) Cream 0.05% BD အရေပြားအနာ နာတာရှည်ဖြစ်ခြင်း၊ နှင်းကူနာ၊ Betamethasone (ကော်တီဇုံး) ပါတဲ့ဆေး။ နာတာရှည် ပျောက်နိုင်ခဲတဲ့ နှင်းကူနာ Eczema လို အနာတွေ အတွက်ဆေး။ ရိုးရိုး အနာ-ဒဏ်ရာတွေကို မထည့်ရပါ။
71.	Betapen-VK, (Phenoxymethyl Penicillin Potassium), (Phenoxymethyl Penicillin K), Penicillin V ပနယ်စလင် စားဆေး၊ ပြည်တည်နာ၊ နူမိုးနီးယား၊ အရေပြားနာ၊ အသက်ရှူလမ်း-အာသီးရောင်၊ လည်ချောင်းနာ၊ နားပြည်ယို၊ ဆုံဆို ့နာ၊ လေးဘက်နာ၊ ဂနိုရီးယား၊ အရိုး-အဆစ်ရောင်၊ 250-500 mg QID; 12.5 mg/kg QID;
72.	Betnovate, Betnelan, Betnesol, Walacort အလာဂျီကြောင့် အရေပြားရောင်ခြင်း၊ နှင်းကူနာ၊ ယားခြင်း၊
73.	Bioclox (Cloxacilin) ဗက်တီရီးယားအတွက် (ဘီတာလက်တင်)အုပ်စုဝင်ဆေး၊
74.	Biodoxyl, Biodoxi, Vivocycline, Doxycycline, Tetracycline အသက်ရှူ-ဆီးလမ်းပိုး၊ နူမိုးနီးယား၊ မျက်ခမ်းစပ်၊ ကာလဝမ်း၊ = 200 mg followed by 100 mg;
75.	Bisacodyl, Dulcolax ဝမ်းနုပ်ဆေး၊ Suppositories 10 mg CM, Tablets 5-10 mg HS
76.	Bismuth Subsalicylate 530 mg QID အူသိမ်အစပိုင်းဖြစ်သည့်လေနာ၊
77.	Bluebion-Forte = Thiamine + Riboflavin + Pyridoxine + Cyanocobalmin + Nicotinamide + Calcium Pantothenate ဗီတာမင် ဘီအုပ်စု၊
78.	Boric acid Antiseptic ပိုးသန့်ဆေး၊ မွေးလမ်းကြောင်းတွင် Yeast ပိုးဝင်ခြင်းကို သန့်ပေးနိုင်သည်။
79.	Brufen, Ibuprofen, Emflam, Ibugesic (စတီရွိုက်)မပါသည့် အနာ-အကိုက်-အဖျား-အရောင်ကျဆေး၊ Adult = 1.2 to 1.8 Gm in divided dose; Children 20-30 mg/kg in divided dose
80.	Bupivacaine, Sensorcaine ခါးထဲထိုးရသည့် ထုံဆေး၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = အာရုံကြောစနစ် ထိခိုက်နိုင်၊ သွေးဖိအားကျစေနိုင်၊ ဝမ်းပျက်စေနိုင်၊ Most experience to date is with single doses of Bupivacaine Hydrochloride up to 225 mg with epinephrine 1:200,000 and 175 mg without epinephrine
a.	Spinals operations on genitalia, perineum = Hyperbaric Bupivacaine2ml or Plain Bupivacaine3ml;
b.	Operations on legs = Hyperbaric Bupivacaine 3-3.5 ml or Plain Bupivacaine 3-3.5 ml;
c.	Hernia, hysterectomy = Hyperbaric Bupivacaine 3-4 ml; Plain Bupivacaine 3-4 ml
81.	Burnol Plus Antiseptic Cream (Aminacrine, Cetrimide, Thymol, Emulsion Base) မီးလောင်နာ၊ အနာဒဏ်ရာ၊ ပွန်းပဲ့တာတွေအတွက် သုံးနိုင်တယ်။
82.	Buscopan, Hyospan အစာအိမ်-အူ-သားအိမ်-ဆီးလမ်းကြောင်း-သည်းခြေလမ်းတို့နာခြင်း၊ ရာသီဆင်းချိန် နာခြင်း၊ အိပ်ရာထဲဆီးသွားခြင်း၊ 10-20 mg TDS, 20 mg IV/IM ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = မျက်စိအမြင် ထိခိုက်နိုင်၊ အာခေါင်ခြောက်၊ ဆီးအိမ်တင်း၊
83.	Butazolidin (စတီရွိုက်)မပါသည့် အနာ-အကိုက်-အဖျား-အရောင်ကျဆေး အုပ်စု၊
84.	Butoconazole 2% cream ကျား-မ ဆီးပြွန်ရောင်ခြင်း၊ မွေးလမ်းကြောင်း-သားအိမ်ရောင်ခြင်း၊
85.	Caladryl Lotion, Calamox, Calamine ယားခြင်း၊ နာခြင်း၊ အကောင်ကိုက်ခံရခြင်း၊ နေလောင်ခြင်း၊ အရေပြား ကြမ်းနေခြင်းတို့အတွက်လိမ်းဆေး၊
86.	Calciferol, Alfacalcidiol, Calcitrol (ကယ်လ်စီယမ်)နည်းခြင်း၊ ဗီတာမင် D နည်းခြင်း၊ သွား-အရိုး ကြီးထွား သန်မာစေရန်ဆေး၊ 1.4 ug/kg daily ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = မူး၊ အားယုတ်၊ ဝမ်းပျက်၊ ပျို့-အန်၊ ဝမ်းပျက်၊
87.	Calcium and Magnesium Carbonates = အက်စစ်ဓာတ်ပျယ်ဆေး၊ ကယ်လ်စီယမ်နည်းခြင်း၊ 1,250 - 1,500 mg OD/TDS;
88.	Calcium Gluconate ကယ်လ်စီယမ်နည်းခြင်း၊ သွား-အရိုး ကြီးထွားသန်မာစေရန်ဆေး၊ သွေးခဲစေရန်ကူသည်၊ Osteoporosis ခေါ် အရိုးပါးသည့်ရောဂါကာကွယ်ရန်၊ 0.5 to 1.0 Gm TDS. 0.4 to 2.0 Gm daily; IV slowly
89.	Calcium lactate = Calax 300 mg (ကယ်လ်စီယမ်)နည်းခြင်း၊ သွား-အရိုး ကြီးထွား သန်မာစေရန်၊
90.	Calmis = Calamine Lotion ယားခြင်း၊ နာခြင်း၊ အကောင်ကိုက်ခံရခြင်း၊ အရေပြားကြမ်း၊ နေလောင်ခြင်း၊
91.	Carbamazepine, Mazetol, Tegrital = 100-300 mg TDS ရက်တို နားကိုက်၊ အတက်ရောဂါ-ဝက်ရူးပြန် ရောဂါ၊ Start with 100 mg BD and 200 mg BD/TDS/QID ကြောက်စိတ်အတွက်ဆေး၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = အစာအိမ်အောင့်၊ အာခေါင်ခြောက်၊ မူးဝေ၊ အရေပြားနီ၊ ဆံပင်ကြွတ်၊ ခေါင်းကိုက်၊ ကိုယ်ပူ၊
92.	Carbapenems (Imipenem, Meropenem) (ကာဘာပင်နင်) အုပ်စု၊ တစ်ရှူးများ သေ၍ပုတ်ခြင်း၊ ပိုးဝင်ခြင်း၊ နူမိုးနီးယား-အဆုပ်ခဲခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်နှင့် ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ အုပ်စုခွဲ ၂ မျိုးရှိသည်။
93.	Carbimazole (NeoMercazole tablets) = Anti-thyroid substance 10 mg to 60 mg daily according to the severity of the disorder လည်ပင်းကြီးဟော်မုန်းများသည့်ရောဂါအတွက်ဆေး 10 mg to 60 mg daily according to the severity of the disorder. The dose should be gradually reduced to the smallest amount which will control the disease. Daily dosage should be divided.
94.	Caspofungin (Cancidas) 50 mg;
95.	Cefaclor (250-750 mg TDS Orally) (7 mg/kg TDS Orally) အရေပြားအနာ၊ နူမိုးနီးယား၊ မွေးလမ်း-အသက်ရှူလမ်း-ဆီးလမ်းရောင်ခြင်း၊ Cefaclor 20-40 mg/kg/day နားကိုက်ခြင်း၊ ရက်တို ဆိုင်းနပ်စ်၊ အာသီးရောင်ခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ Cefaclor (Ceclor) 20–30 mg/kg; Only Cefaclor, Cefuroxime Axetil, and Cefprozil can be given orally.
96.	Cefadroxil အာသီး-အာခေါင်ရောင်၊ အရေပြားနာ၊ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း၊ ဆီးလမ်း- အသက်ရှူလမ်းရောင်၊ Organophosphorous ပိုးသတ်ဆေး အဆိပ်သင့်ခြင်း၊ (500-1,000 mg BD) (12.5 mg/kg BD) ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = အရေပြားနီ၊ အစာအိမ်အောင့်၊ မူးဝေ၊ အာခေါင်ခြောက်၊
97.	Cefalexin, Cephaxin (Cephalosporin) အသက်ရှူလမ်း-မွေးလမ်း-ဆီးလမ်းရောင်၊ လိင်မှတဆင့် ကူးစက် ရောဂါ၊ အရိုး-အဆစ်ရောင်၊ Adult 1-2 Gm in divided dose increase up to6Gm, Children 25-100 mg/kg in divided dose Maximum4Gm daily ဆီးအိမ်ရောင်ခြင်း = 250-500 mg QID
98.	Cefamandole (Na) (500-2,000 mg TDS IM/IV) (33.33 mg/kg TDS IV/IM) အာခေါင်-အသက်ရှူလမ်း ရောင်ခြင်း၊ အရေပြားအနာ၊ ခွဲစိတ်လူနာများ၊ အရိုး-အဆစ်-သဲခြေလမ်း-သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊
99.	Cefazolin 50 mg/kg အသက်ရှူလမ်း-ယောက်ျားဆီးကြိတ်၊ သွေးထဲပိုး ဝင်ခြင်း၊ သဲခြေလမ်း-မွေးလမ်း ရောင်ခြင်း၊ မျက်ကြည်လွှာရောင်ခြင်း၊ 1-2 Gm IV ခွဲစိတ်လူနာများအား ရောဂါပိုး မဝင်စေရန် ကြိုတင်ပေးမည့် ဆေး၊ (500-2,000 TDS IV/IM) (25 mg/kg TDS IV/IM); Cefazolin: Adult 1 g IV q8h; Pediatric 50-100 mg/kg/d IV divided q8h = အရေပြားနာ၊ အနာဒဏ်ရာများ၊ နှလုံး အတွင်းသား ရောင်ခြင်း၊ နူမိုးနီးယား၊ အရိုးအတွင်းရောင်ခြင်း၊ အစာဆိပ်သင့်ခြင်း၊ သွားအတု-အရိုးတု စသည်တို့ ရောင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းရောင်ခြင်း၊
100.	Cefditoren (Spectracef) 400 mg twice daily; Cefdinir, cefditoren pivoxil, and cefpodoxime proxetil are the best third-generation oral agents against pneumococci and S aureus.
101.	Cefepime (HCl) (ကက်ဖလိုစပိုရင်) စတုတ္ထမျိုးဆက်၊ နူမိုးနီယား၊ အရေပြားအနာ၊ ကျောက်ကပ်-ဆီးလမ်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ (နူထိုဖီးလ်) နည်းရောဂါ၊ (200-400 mg Daily Oral) (1,000-2,000 mg BD IV)
102.	Cefepime (Maxipime) 500 mg/kg
103.	Cefixime ဂနိုရီးယား၊ ရက်တို ဆိုင်းနပ်စ်၊ ဂနိုရီးယား ဆီးပြွန်အဝရောင်ခြင်း၊ တိုက်ဖွိုက်၊ နူမိုးနီးယား၊ လေပြွန်ရောင်ခြင်း၊ နားပြည်ယိုခြင်း၊ အာခေါင်ရောင်ခြင်း၊ (200-400 mg Daily) (4 mg/kg BD)
104.	Cefoperazone (Na) သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊ အရေပြား-ဆီးလမ်း-အရိုး-အဆစ် ပိုးဝင်ခြင်း၊ ဝမ်းတွင်းမြှေး-တင်ပါးဆုံ တွင်းအင်္ဂါများရောင်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်ပြီးနောက် သဲခြေအိပ် ရောင်ခြင်း၊ (1-2 gm BD IV) (62.5 mg/kg BD IM/IV)
105.	Cefotaxime (Cetriaxone, Ceftazidime or Ceftizoxime) (မနင်ရိုကောကပ်စ်) ပိုးအတွက်ဆေး။ လေပြွန်-အရေပြားရောင်၊ သွေးထဲ-ဆီးလမ်း-အမျိုးသမီးမွေးလမ်း-အသက်ရှူလမ်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ (1-2 gm BD IV/IM) (50 mg/kg TDS IM/IV); ဂနိုးရီးယားကြောင့် အဆစ်ရောင်ခြင်း၊ 1 Gm IV TDS ဝမ်းတွင်းမြှေး ရောင်ခြင်း၊2Gm IV BD/TDS ဦးနှောက်ထဲပြည်တည်နာ၊ (မင်နင်ဂျိုက်တစ်) 2-3 Gm IV QID or2Gm IV BD + Metronidazole 500 mg IV/Orally TDS OD; ခွဲစိတ်ပြီး နူမိုးနီးယားဖြစ်ခြင်း၊ Cefotaxime or Ceftriaxone or Cefipime2Gm IV TDS
106.	Cefotetan 20 mg/kg IV BD or Cefoxtin 1-2 Gm IV; The second-generation cephalosporins cefoxitin and cefotetan have expanded anaerobic activity and are superior to first-generation agents as prophylaxis for colorectal surgery or for hysterectomy. အသက်ရှူလမ်း-နား-နှာခေါင်း-လည်ချောင်း ရောင်ခြင်း၊ ဂနိုးရီယား၊ သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊ သွားပိုးဝင်းခြင်း၊ အရေပြားအနာ၊ ခွဲစိတ်လူနာများအား ရောဂါပိုး မဝင်စေရန် ကြိုတင်ပေးမည့်ဆေး၊ ဆီးလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊
107.	Cefoxitin (Mefoxin) 80 mg/kg ခွဲစိတ်လူနာ၊ အရိုး-အဆစ်-အသက်ရှူလမ်း-ဝမ်းတွင်းမြှေး ရောင်ခြင်း၊ သွေးထဲ ပိုးဝင်ခြင်း၊ HIV ဖြစ်ပြီး (နူထိုဖိးလ်) နည်းခြင်း၊ Cefoxitin2Gm IV/IM QID or Cefotertan2Gm IV BD + Doxycycline 100 mg IV or orally BD x 24 hours and followed by Doxycycline 100 mg BD x 14 days တင်ပါးဆုံတွင်းအင်္ဂါများရောင်ခြင်း၊ (1-2 gm IM) (22.5 mg/kg QID IM) ဆီးလမ်း ရောင်ခြင်း၊
108.	Cefpodoxime Proxetil, Cefdinir, Cefditoren pivoxil, Cefixime, and Ceftibuten Syrup/50-100-200 Tablets အသက်ရှူလမ်း အထက်ပိုင်း ရောင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊ = 100 mg BD x 5-10 days; နာတာရှည်လေပြွန်ရောင် ဆိုးခြင်း၊ လူစုလူဝေးမှ ရသော နူမိုးနီးယား 200 mg BD x 10-14 days; သာမန် ဂနိုရီးယား = 200 mg single dose; အရေပြားအနာ၊ = 400 mg BD x7to 14 days; ကလေး ရက်တို နားပြည်ယိုခြင်း = 10 mg/kg (max 400 mg/dose) OD or5mg/kg (max 200 mg/dose) BD x 10 days; အာသီးရောင်-လည်ချောင်းနာ5mg/kg/dose (max 100 mg/dose) BD x 5-10 days;
109.	Cefprozil (0.5 g) (Cefzil) 15 mg/kg; 250-500 mg BD အာခေါင်-အသက်ရှူလမ်း အောက်ပိုင်း- အထက်ပိုင်း? ဆီးလမ်းရောင်ခြင်း၊ အရေပြားအနာ၊ နားပြည်ယိုခြင်း၊ လူစုလူဝေးကရသည့် နူမိုးနီးယား၊
110.	Ceftazidime (Fortaz, others) 50 mg/kg Ceftazidime Pentahydrate သွေးထဲ-ဆီးလမ်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ-တင်ပါးဆုံတွင်းအင်္ဂါများ-အရေပြား-သဲခြေလမ်း-အသက်ရှူလမ်း-ဦးနှောက်အမြှေး-ဝမ်းတွင်း-နှလုံးအတွင်းသား-နား-နှာခေါင်း-လည်ချောင်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ အဆုပ်ပြည်တည်ခြင်း၊ (1-6 gm TDS IV/IM) (37.5 mg/kg TDS IV/IM); Ceftazidime has been used to treat meningitis due to Pseudomonas.
111.	Ceftiriaxone 1 Gm IV OD အဆစ်ရောင်ရောဂါ (ဂနိုရီးယား)၊
112.	Ceftizoxime (Na) 1 Gg Daily IM (50 mg/kg TDS IM/IV) အရေပြားအနာ၊ အသက်ရှူလမ်း အောက်ပိုင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ ဂနိုရီးယား၊ 1-2 Gm IV BD/TDS + Dexamethasone 4-10 mg stat and4mg IV QID လည်ပင်းနာ၊ 1-2 gm Daily IV/IM (50 mg/kg Daily IV/IM) နူမိုးနီယား၊ သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊ အရိုး-အဆစ် ပိုးဝင်ခြင်း၊ အသဲ-နှလုံး အစားထိုးခြင်း၊ တိုက်ဖွိုက်၊ ခွဲစိတ်လူနာ၊ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်၊ 1 Gm BD IV x3weeks ရှုပ်ထွေးသော ဂနိုရောဂါ၊ နှလုံးအတွင်းရောင်ခြင်း၊ 1 Gm IM + Erythromycin or Bacitracin မျက်စဉ်း E/o 1 Gm IM/IV OD x 14 days အရိုး-အဆစ်-အရေပြား ဂနိုပိုးဝင်ခြင်း၊ 1 Gm IV daily x5days ရှုပ်ထွေးသော ဂနိုရောဂါ၊ 1 Gm IV OD လူစုလူဝေးမှရသော နူမိုးနီးယား၊ 1-2 Gm IM x5days + Erythromycin or Bacitracin E/o ဂနိုပိုးကြောင့် မျက်ကြည်လွှာရောင်၊
113.	Ceftriaxone (Rocephin) 30 mg/kg ဗက်တီးရီးယားအတွက် (ဘီတာလက်တင်) အုပ်စုဝင်ဆေး၊ Ceftriaxone4Gm IV OD or2Gm IV BD သွေးထဲ ဗက်တီးရီးယားဝင်ခြင်း၊ အရေပြားအနာ၊ အသက်ရှူလမ်း အောက်ပိုင်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ အသဲ-နှလုံး အစားထိုးခြင်း၊ ခွဲစိတ်လူနာ၊ နူမိုးနီးယား၊ Ceftriaxone 1-2 Gm IV every 24 hours အဆစ်ထဲပြည်တည်၊ Ceftrixone2Gm IV BD + Vancomycin 10 mg/kg TDS ± Rifampin OD; ဗက်တီးရီးယားကြောင့် ဦးနှောက်မြှေးရောင်ခြင်း၊ Ceftrixone 250 mg IM/IV stat + Doxycycline 100 mg BD Orally x 10 days ကျား-ဆီးကြိတ် ရောင်ခြင်း၊ ရက်တို ကျားအကြော ရောင်ခြင်း၊ Ceftriaxone 125 Gm IM, Ciprofloxacin 500 mg orally, and Ofloxacin 400 mg orally ဂနိုကြောင့် အာခေါင်ရောင်ခြင်း၊ Ceftriaxone2Gm OD တိုက်ဖွိုက်၊ Ceftriaxone 250 mg IM once ဆီးသွားပြွန်ရောင်ခြင်း၊
114.	Cefuroxime (0.5 g) (Ceftin) 0.5 g twice daily; Cefuroxime (Zinacef, others) 60 mg/kg Cefuroxime 250-500 mg BD ရက်တို ဆိုင်းနပ်စ်၊ နားကိုက်ခြင်း၊ လူစုလူဝေးကရသော နူမိုးနီးယား၊ Cefuroxime 750-1500 mg IV TDS + Dexamethasone 4-10 mg stat and4mg IV QID
115.	Celebrex 100 mg BD အဆစ်နာခြင်းများ၊
116.	Cemetidine = Cimetidine (HCl) = Histamine H 2-receptor Antagonists Duodenal ulcers 800 mg HS, 300 mg QID PC and HS, or 400 mg BD x 4-6 weeks; Maintenance 400 mg HS; DU လေနာ၊ Active gastric ulcers 800 mg HS or 300 mg QID PC and HS x 8 weeks; GU အစာအိမ်နာ၊ Gastroesophageal reflux disease (GERD) 800 mg BD or 400 mg QID x 12 weeks; အစာခြေရည် အထက်တက်ခြင်း၊ Heartburn, indigestion and sour stomach 200 mg OD or BD ရင်ပူ၊ အစာမကျေခြင်း၊
117.	Cephalexin, Cephradine, and Cefadroxil (First-Generation Cephalosporins) (0.5 g) 30 mg/kg; Oral drugs are used for treatment of urinary tract infections, and they can be used for minor skin and soft tissue infections (eg, cellulitis, soft tissue abscess); Intravenous first-generation cephalosporins are the drugs of choice for most clean surgical prophylaxis; ပဋိဇီဝဆေး၊ အသက်ရှူလမ်း-အရိုး-အဆစ်-သွား-ရက်တို ဆီးအိမ်ရောင်ခြင်း၊ မွေးလမ်း-ကျား-ဆီးကြိတ်-ဝမ်းတွင်းမြှေး-ဦးနှောက်မြှေး-တင်ပါးဆုံတွင်း အင်္ဂါများ-သည်းခြေလမ်း-နား-နှာခေါင်း-လည်ချောင်း-နှလုံးအတွင်းသားရောင်၊ ရက်တို ဆိုင်းနပ်စ်၊ သွေးထဲပိုးရောက်၊ အဆုပ်ပြည်တည်၊ လိင်မှတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ၊ အသဲ-နှလုံး အစားထိုးခြင်း၊ တိုက်ဖွိုက်၊ အရေပြားရောင်၊ နို့နာ၊ 250-500 mg QID Orally x 1-3 days
118.	Cephalothin (Na) 120 mg/kg IV daily အရိုး-အဆစ်နာ၊ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်-မွေးလမ်း- ဆီးလမ်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊ အရေပြားရောင်ခြင်း၊
119.	Cetirizine (HCl) = (အင်တီဟစ်တမင်း) အုပ်စုဝင်ဆေး၊ အအေးမိခြင်း၊ ဆိုင်းနပ်စ်၊ နှာစေး ချောင်းဆိုး၊ ပျား-အင်းဆက်ကိုက်၊ (အလာဂျီ)၊ အရေပြားအယား၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ခေါင်းကိုက်၊ အာခေါင်ခြောက်၊ အိပ်ချင်၊ အစာအိမ်အောင့်၊ 2.5 to5mg OD or BD
120.	Chloramphenicol is for (1) meningococcal, H influenzae, or pneumococcal infections of the central nervous system; (2) anaerobic or mixed infections in the central nervous system, eg, brain abscess; (3) as an alternative to tetracyclines in rickettsial infections, especially in pregnant women, in whom tetracycline is contraindicated. Chloramphenicol Eye Ointment 1%w/w ပဋိဇီဝဆေး မျက်စဉ်း။ မျက်ကြည်လွှာရောင်ခြင်း၊ မျက်စိရောင်ခြင်း၊ 0.5%m/v2hourly Eye; 1% m/v6hourly Eye; နားပြည်ယိုခြင်း၊ Chloramphenicol ပဋိဇီဝဆေး၊ တိုက်ဖွိုက်၊ ဦးနှောက် ပြည်တည်နာ၊ ဦးနှောက်အမြှေး ရောင်ခြင်း၊ ပလိပ် ရောဂါ၊ မျက်ခွံရောင်ခြင်း၊ အစာဆိပ်သင့်ပြီး ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ပလိပ်ရောဂါ၊ အရေပြား-ဝမ်းတွင်းမြှေး-အာခေါင် ရောင်ခြင်း၊ သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊6Gm/day in4divided doses;2Gm daily x 30 days နူရိုဆစ်ဖလစ်၊ (500-1,000 mg QID Oral/IV) (18.75 mg/kg QID IV/Oral) ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ အစာအိမ်အောင့်၊ သွေးအားနည်း၊ ရေပြားနီ၊
121.	Chlordiazepoxide (Librium) 10-20 mg (Max 100 mg) စိတ်ပူပန်ခြင်း၊
122.	Chlorhexidine 0.2-4.0% Antiseptic ပိုးသန့်ဆေး၊ 5% (digluconate) ပါးစပ်ဆေးရန်သုံးသည်။ အရေပြားအား ဆေးမထိုးမီ၊ အခွဲစိတ်မီ သန့်ပေးခြင်း၊ ဆီးအိမ်သန့်ပေးခြင်း၊ အနာဆေးခြင်း၊
123.	Chlorine Tablet = Bleach ရေသန့်ဆေး၊ ၁ ကွာတထဲမှာ လက်ဘက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းနဲ့ ရေ (၁၀ ဆ ၁ ဆ) ဖျော်တာကို သွေး၊ အန်ဖတ်၊ ကိုယ်ကထွက်တဲ့ အရည်မှန်သမျှကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဘို့ သုံးပါ။
124.	Chlorocresol (ဖီနော) ပါတဲ့ Antiseptic ဖြစ်တယ်။
125.	Chloromycetin (Chloramphenicol) Eye/Ear drops မျက်စိနာ၊ မျက်ကြည်လွှာရောင်၊ နားပြည်ယို၊
126.	Chloroquine phosphate ငှက်ဖျားကုရန် ချက်ချင်း ၄ ပြား၊ ၆ နာရီခြားပြီး ၄ ပြား၊ နောက်နေ့ ၂ ပြား၊ စုစုပေါင်း ၁ဝ ပြား၊ (သို့မဟုတ်) ချက်ချင်း ၄ ပြား၊ ၆ နာရီခြားပြီး ၂ ပြား၊ နောက်နေ့ ၂ ပြား၊ နောက်နေ့ ၂ ပြား၊ စုစုပေါင်း ၁ဝ ပြား၊ Childern = 10 mg/kg, not to exceed 600 mg; then5mg/kg PO; not to exceed 300 mg at 6-hour, 24-hour, and 48-hour intervals (total 25 mg base/kg); ငှက်ဖျားဒေသသို့မသွားမီ တပါတ်လျင် ၂ ပြား။ (အမီးဘား)ဝမ်းကိုက်၊ = 500 mg OD x 14 days ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ခေါင်းကိုက်၊ ယား၊ အနီပြင်ထွက်၊ ဆံပင်ကြွတ်၊ အစားပျက်၊ အမြင်အားနည်း၊
127.	Chloroxylenol ပိုးသတ်ဆေး၊ solution 4.8%;
128.	Chlorpheniramine Maleate (အင်တီဟစ်တမင်း) အုပ်စုဝင်ဆေး၊ အအေးမိခြင်း၊ ဆိုင်းနပ်စ်၊ နှာစေး ချောင်းဆိုး၊ အင်းဆက်ကိုက်၊ (အလာဂျီ)၊ အရေပြားယားခြင်း၊ 10 mg IV/IM/SC or 15-25 mg daily Orally
129.	Chlorpromazine 100-400 mg (max 1 Gm) စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည့်ဆေး၊ စိတ်ရောဂါ (စကစ်ဇိုဖရီးနီးယား)၊ 100-400 mg Orally/IM (Max. 1 Gm/day) အအန်ရပ်ဆေး၊ = 25-50 mg IM QID or 10-25 mg QID ကြို့ထိုးခြင်း၊ = 25-50 mg Orally/IM အပူချိန်များခြင်း၊ မေးခိုင်ရောဂါတွင် တွဲပေးသည့်ဆေး၊ 25-50-75 mg TDS, QID or HS
130.	ChymOrally Forte, Chymotrypsin 100,000 IU QID အရောင်လျှော့ဆေး၊
131.	Cifran, Cipad, Ciplox, Ciprowin: Supraflox (Cipro 500 mg + Tinidazole 600 mg) BD x 5-10 days အသက်ရှူလမ်း-နား-နှာခေါင်း-မျက်စိ-အစောခြေလမ်း-အူအတက်ရောင်၊ ဂနိုရီးယား၊ ဝမ်းပျက်-ဝမ်းကိုက် ထိုးဆေး၊ စားဆေး၊ မျက်စဉ်း၊
132.	Ciplar Tablets = Propranolol HCl (ဘီတာ-ဘလော့ကား) အုပ်စု၊
133.	Ciploric Tablets = Allopurinol (ဂေါက်) ခေါ်အဆစ်နာအတွက်ဆေး၊ 200-600-800 mg/day; Children 150-300 mg/day (အောက်ဇဲလိတ်) ဆီးကျောက် တည်ခြင်း၊ 200-300 mg/day
134.	Ciprofloxacin (Cipro) 0.5–0.75 g BD; Ciprofloxacin (Cipro IV) 0.8 mg; (0.75 g) Ciprofloxacin (HCl), Cipro, Cipro XR, Ciplox ဂိုနိုကောကပ်စ် ပိုးအတွက် ထိုးဆေး၊ မျက်စဉ်း၊ လိင်မှတဆင့် ကူးစက်သည့်ရောဂါများ၊ မျက်စိနာ၊ ပိုးဝင်၍ဝမ်းပျက်၊ နားပြည်ယို၊ အရေပြားနာ၊ ခွဲစိတ်လူနာ၊ ဝမ်းတွင်းမြှေး-အရိုး-အဆစ်-ဆီးလမ်း-သည်းခြေအိတ်-ရိုးတွင်းခြင်ဆီ-တင်ပါးဆုံရိုးတွင်းအင်္ဂါများ ရောင်ခြင်း၊ (100-400 mg BD IV) (250-750 mg BD Oral) (3.75 mg/kg BD IV) (12.5 mg/kg TDS Oral) အစာအိမ် အက်စစ်ဓာတ် ပျယ်ဆေးကို ၂ နာရီအတွင်း မပေးရ၊
a.	Ciprofloxacin 500 mg stat ဂနိုရီးယားကြောင့် သားအိမ်ဝ-ဆီးပြွန်-အာခေါင်-ဆီးကြိတ် ရောင်ခြင်း၊
b.	Ciprofloxacin 500 mg BD x 3-5 days ရှန်ကာရွိုက်၊ ရက်တို ဆိုင်းနပ်စ်၊ ဆီးသွားပြွန်ရောင်ခြင်း၊ ဆာလ်မိုနဲလား ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ (GE) အစာလမ်း (အူ) ရောင်ခြင်း၊
c.	Ciprofloxacin 500 mg BD x 7-10 day ဂနိုးရီးယားပိုးကြောင့် အဆစ်နာခြင်း၊
d.	Ciprofloxacin 750 mg BD x 7-10 days (ရှီဂဲလား) ကြောင့် ဝမ်းပျက်ခြင်း-ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊
e.	Ciprofloxacin 250 mg IV BD သဲခြေအိပ်ရောင်ခြင်း၊
f.	Ciprofloxacin 250-500 mg BD Orally x 1-3 months နာတာရှည် ကျားဆီးကြိတ်ရောင်ခြင်း၊ ရက်တို ဆီးအောင်ခြင်း၊ ကျားဆီးကြိတ်ရောင်ခြင်း၊
g.	Ciprofloxacin 400 mg IV BD or 750 mg BD Orally ရက်တို ကျောက်ကပ်ပြွန် ရောင်ခြင်း၊
h.	Ciprofloxacin 500 mg BD IV ဒေါင့်သန်းနာ၊
i.	Ciprofloxacin 500 mg BD x 1-6 week ရက်ရှည်နားပြည်ယို၊
j.	Ciprofloxacin 500 mg stat followed by Doxycycline 100 mg BD x 10 days ကျား အကြော ရောင်ခြင်း၊
k.	Ciprofloxacin 500-750 mg BD Orally x 21 days ယုတ်တရက် ကျောက်ကပ်ပြွန် ရောင်ခြင်း၊
l.	Ciprofloxacin 750 mg BD + Metronidazole 500 mg TDS ဝမ်းဗိုက်တွင်း အမီးဘားပိုးဝင်ခြင်း၊
m.	Ciprofloxacin 750 mg BD x 6-8 weeks အရိုးတွင်း ပြည်တည်ခြင်း၊ တိုက်ဖွိုက်၊
n.	ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ ခေါင်းကိုက်၊ ဝမ်းပျက်၊ ဗိုက်နာ၊ ဂနာမငြိမ်၊ အနီပြင်ဖြစ်၊ ခေါင်းမူး၊ မျက်စိ အမြင်နည်း၊
135.	Ciptini (Cipro 125 mg, Tinidazole 150 mg) ဆေးရည်၊ ဝမ်းကိုက်၊ ဝမ်းလျှော၊ 5-10 ml BD
136.	Ciptofloxacin တိုက်ဖွိုက်၊2Gm BD Orally
137.	Citadep = Citalopram စိတ်ကျရောဂါ၊ အစာနှင့်ပေးရမည်၊ 20 mg OD စပေးပြီး 40-60 mg OD
138.	Clarithromycin နားပြည်ယိုခြင်း၊ နာတာရှည် လေပြွန်-အသက်ရှူလမ်းရောင်ခြင်း၊ အရေပြားနာ၊ အရေပြားနာများ၊ လူကြီး 250-500-1000 mg BD/TDS x 14 days; ကလေး = 15 mg/kg/day divided every 12 hours x 10 days လူစုလူဝေး မှရသော နူမိုးနီးယား၊ 500 mg BD x 10 days; အာသီးရောင်၊ လည်ချောင်းနာ၊ (250-500 mg OD) (7.5 mg/kg )
139.	Claritin, Clarinex, Loratadine အင်တီဟစ်စ်တမင်း၊5mg OD ၂ နှစ်အောက်ကလေး မပေးရ၊
140.	Clindamycin (0.3 g) (Cleocin, others) 15 mg/kg; Clindamycin (Cleocin, others) 2400 mg စားဆေး၊ ထိုးဆေး၊ Clindamycin: Adult 150-300 mg PO q8h; 300-600 mg IV q8h; Pediatric 25-40 mg/kg/d PO/IV divided tid အရေပြားနာ၊ အနာဒဏ်ရာများ၊ နှလုံးအတွင်းသားရောင်ခြင်း၊ နူမိုးနီးယား၊ အရိုးအတွင်းရောင်ခြင်း၊ အစာဆိပ်သင့်ခြင်း၊ သွားအတု-အရိုးတုရောင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းရောင်ခြင်း၊ အဆုပ် ပြည်တည်ခြင်း၊
a.	Clindamycin: 300-900 mg BD ဝက်ခြံ၊ ဝမ်းဗိုက်ထဲပိုးဝင်၊ ငှက်ဖျား၊ ရိုးတွင်းခြင်ဆီရောင်၊ နှလုံးရောင်၊ အဆုပ်ပိုးဝင်၊ သွားကိုက်၊ သွေးထဲပိုးရောက်၊
b.	Clindamycin: 300 mg BD/TDS x 7-10 days ကျား-မ ဆီးပြွန်ရောင်ခြင်း၊ မွေးလမ်း-သားအိမ် ရောင်ခြင်း၊ အန်ဖတ်ဝင်ပြီးဖြစ်သော နူမိုးနီးယား၊
c.	Clindamycin: 600 mg IV TDS followed by 300 mg QID Orally အဆုပ ပြည်တည်ခြင်း၊ နူမိုးနီးယား (လေမကြိုက်သည့်ပိုး)၊
d.	Clindamycin: 900 mg IV TDS + Gentamycin2mg/kg followed by 1.5 mg/kg TDS for 24 hours and followed by Clindamycin 450 mg QID x 14 days Orally တင်ပါးဆုံရိုးတွင်းအင်္ဂါများ ရောင်ခြင်း၊
e.	Clindamycin: 300-900 mg BD အသက်ရှူလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊ အဆုပ်ပြည်တည်နာ၊
tf	Clindamycin vaginal cream OD x7days မွေးလမ်းကြောင်းရောင်ခြင်း၊
141.	Clobetasol စတီရွိုက်ပါသည့် လိမ်းဆေး၊ အရောင်ကျရန်၊ နှင်းကူနာ၊ အယား၊ အင်းဆက်ကိုက်၊ Clobetasol Propionate Cream (ကော်တီဇုံး) ပါတဲ့ဆေး။ နာတာရှည် ပျောက်နိုင်ခဲတဲ့ နှင်းကူနာ Eczema လို အနာတွေ အတွက်ဆေး။ ရိုးရိုး အနာ-ဒဏ်ရာတွေကို မထည့်ရပါ။
142.	Clopidogrel (Clopact-75) သွေးမခဲစေသည့်ဆေး၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါအတွက်ပေးသည်။
143.	Clotrimazole (ဖန်းဂပ်စ်) ခေါ် မှို ရောဂါ၊ ပါးစပ်နာ၊ အရေပြားနာ၊ မှက်ခရု၊ ထည့်ဆေး၊ စားဆေး၊ 1% cream or 100-200-500 mg vaginal tablet x 3-6 days မွေးလမ်းကြောင်း မှိုဝင်ခြင်း၊ ယား-နီ-အဖြူဖတ် ဆင်းခြင်း၊ သားအိမ်ရောင်ခြင်း၊
a.	Vaginal suppositories 100 mg x6nights and 200 mg x3nights;
b.	Cream, 1% w/w 2% w/w vaginal gel Clotrimazole;
c.	Vaginal suppositories 100 mg x6nights and 200 mg x3nights;
d.	Cream, 1% w/w 2% w/w vaginal gel
e.	Clotrimazole taken orally in the form of 10-mg troches five times daily, can prevent and treat oral candidiasis.
f.	Vaginal azole tablets inserted daily for 1–7 days are effective for vaginal candidiasis.
g.	Topical preparations for treatment of cutaneous dermatophytes are also available.
144.	Cloxacillin, Cicloxacillin, Oxacillin, Nafcillin, Dicloxacilin ဗက်တီရီးယားအတွက် (ဘီတာလက်တင်) အုပ်စုဝင်ဆေး၊ အသက်ရှူလမ်း ရောင်ခြင်း၊ သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊ အရေပြားနာ၊ နှလုံးအတွင်းသား ရောင်ခြင်း၊ အရိုး-အဆစ်-ဦးနှောက်အမြှေး-ဝမ်းတွင်းမြှေး ရောင်ခြင်း၊ (250 mg QID IM) (500 mg QID IV/Orally) (500 mg Daily Intraperitoneal) (18.75 mg/kg QID Orally); 250 mg QID x 7-10 days နို့နာ၊ ပြည်တည်နာ။
145.	Clozapine Tablets (စကီဇိုဖရီးနီးယား) စိတ်ရောဂါ၊ Start with 25-75 mg/day in 1-3 doses Increments of 25-50 mg/day over 2-5 weeks. Then weekly/biweekly increases of not more than 100 mg/day up toamaximum of 900 mg/day in3divided doses
146.	Codeine with Aspirin or Acetaminophen 180-200 mg QID မူးယစ်ဆေးပါသည့် အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေး၊
147.	Cofdex Capsules/Syrup (Chlorpheniramine maleate2mg, Dextromethorphan hydrobromide 10 mg, Phenylpropanolamine hydrochloride 12.5 mg) သလိပ်မထွက် ချောင်းဆိုး ပျောက်ဆေး၊ 1 cap 2-3 times daily Syrup: 5-10 ml OD/BD
148.	Cold Tablets, Alerid, No-cold, M-cold (Cetirizine dihydrochloride5mg, Phenylpropanolamine 25 mg, Paracetamol 500 mg) အအေးမိ၊ ဆိုင်းနပ်စ်၊
149.	Colimex Drops (Dicyclomine HCl & Activate Dimethicone) 20 mg TDS = အစာလမ်း-မွေးလမ်း-ဆီးလမ်းများ နာခြင်း၊ လေထိုး-ဝမ်းကိုက်၍နာခြင်း၊ ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်း၊ 10-20 mg TDS/QID
150.	Colistin (Sulphate & Sulphomethate Na) ကျောက်ကပ်ရောဂါကြောင့် ကိုယ်ရောင်ခြင်း၊ ဆီးနည်း၊ အသက်ရှူလမ်းပိုးဝင်၊ (0.833 – 1.666 mg/kg TDS IM) (0.021 – 0.042 million units/kg TDS Orally) (0.037 mg/kg TDS Orally) အူမှပိုးများသေစေခြင်း၊ အစာအိမ်အနာ၊ အပေါ်ယံနှင့် အတွင်းပိုင်း (အင်ဖက်ရှင်)၊
151.	Contraceptives ပဋိသန္ဓေတားဆေးများ၊ သားဆက်ခြားနည်းများ၊
a.	The combined pill (Mala-D) ဆေးနှစ်မျိုးတွဲ စားဆေးများ၊ Estrogen and Progestogen ဟော်မုန်း နှစ်မျိုး ပူးတွဲပါဝင်သည်။ ၉၉% စိတ်ချရသည်။ လစဉ်ရာသီ စတင်လာသည့် နေ့မှ ၅ ရက်မြောက်နေ့က စ၍ စုစုပေါင်း ၂၁ ရက်ကြာ နေ့စဉ် ဆေး ၁ ပြား။ နောက်ဆုံးသောက်ရမည့် အရောင်မတူသည့် ဆေးပြား ရ ပြားမှာ အားဆေးသာ ဖြစ်သည်။ နားထားသော ရ ရက်အတွင်း သွေးပြန်ဆင်းမည်။ သွေးဆင်းနည်းမည်၊ ရက်လည်းတိုမည်။ သွေးဆင်းရက် မှန်စေသည်။ ရာသီ မလာမီဖြစ်တတ်သည့် လက္ခဏာများ နည်းစေသည်။ မကောင်းသောလက္ခဏာများ၊ ခေါင်းကိုက်၊ ပျို့-အန်၊ ကြားရက် သွေးဆင်းခြင်း၊ ရင်သားတင်းခြင်း၊ သွေးဖိအားတက်၊ သားအိမ်အဝ ကင်ဆာ။ အသက် ၃၅ ကျော်လျင်၊ အဝလွန်လျင်၊ သွေးခဲတတ်သည့်ရောဂါ၊ ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျင်၊ နှလုံးရောဂါ၊ ရင်သားကင်ဆာ၊ (မိုင်ဂရိန်း)၊ အသဲ-သဲခြေ-ဆီးချိုရောဂါများ ရှိနေလျင် မသုံးသင့်။
b.	Centchroman (Saheli) Tablets ပုံမှန်မမျိုးဥ ထွက်ခြင်းကို တားဆီးခြင်းမလုပ်ဘဲ၊ ကျားသုတ်ပိုး နှင့် ပေါင်းစပ်ပြီးနောက် သားအိမ်အတွင်းနံရံကို လာတွယ်သည့် ဖြစ်စဉ်ကို တားဆီးခြင်းဖြင့် သန္ဓေဆက် မတည် စေရန် ပြုလုပ်ပေးသည်။ ဆေးကပ်တခုတွင် 30 mg ဆေးပြား ၈ ပြားပါသည်။ ပဌမ ၃ လ အတွက် ၁ ပါတ် လျင် ၂ ပြား၊ နောက်လများမှစ၍ ၁ ပါတ် ၁ ပြားသောက်ရသည်။ ပျို့-အန်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်များခြင်း၊ သွေးခဲစေခြင်းများ မဖြစ်စေနိုင်။ သို့သော် ရာသီဆင်း များတတ်သည်။
c.	Depo-Provera (DMPA or Depot Medroxyprogesterone Acetate) Progestogen ဟော်မုန်း တမျိုး ပါသည့် ထိုးဆေး၊ ၃ လခံ၊ Noristerat ၂ လခံ၊ ၁ လခံ၊ အမျိုးအစားများရှိသည်။ ၉၉% ထိရောက်သည်။ လစဉ်ရာသီလာ အပြီး ၅ ရက်မြောက်နေ့မှ စထိုးပါက ချက်ချင်းထိရောက်သည်။ နို့တိုက်ခြင်းကို မထိခိုက်။ ရာသီမဆင်းမီ လက္ခဏာများ သက်သာစေသည်။ ရာသီလာသည့်ရက် ပြောင်းတတ်သည်။ မလာဘဲလည်း ရှိတတ်သည်။ ကိုယ်အလေးချိန် တိုးတတ်သည်။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျင်၊ နောက် ၁ နှစ်အကြာ ကလေး လိုချင်လျင်၊ သွေးကြောကျဉ်း ရောဂါ ရှိလျင်၊ ယခု သို့မဟုတ် လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်က ရင်သားကင်ဆာရှိလျင်၊ ဆီးချိုရောဂါ ရှိလျင်၊ (မိုင်ဂရင်း) ရောဂါရှိလျင် မသုံးသင့်။
d.	Abortion pill ကိုယ်ဝန်ဖျက်ဆေး = Mifegyne, Mifepristone 200 or 600 mg, Mifestone, RU486 (Mifepristone) တို့သည် ၆ဝ ရက် ကိုယ်ဝန်ကို ဖျက်နိုင်။ Mifeprex (200 mg x3= 600 mg) တခါတည်းသောက်။ တတိယ နေ့မှာ ပျက်မကျလျင် Misoprostol (200 μg x2= 400 μg) သောက်။ Mifepristone ကို Gemeprost နှင့် ရောပြီး ၁၃-၂၄ ပါတ် ကိုယ်ဝန်ကို ဖျက်ရာမှာ သုံးသည်။
e.	Intrauterine Contrceptive Devices (IUCDs), Copper T ကိုလဲ ရ ရက်အတွင်း အရေးပေါ်နည်း အဖြစ်သုံးနိုင်။ 99.9% ထိရောက်သည်။
f.	Spermicides ကျားသုတ်ပိုးသတ်ဆေး၊ (Nonoxynol-9) ပါသည့်ဆေးဖြစ်သည်။ Tablets, jelly (gel), films and foams အမျိုးမျိုးရှိသည်။ 71-82% ထိရောက်သည်။ နာရီဝက် ကြိုတင်ထည့်ထားပြီးမှ ဆက်ဆံရမည်။ ပျော်ဝင်မသွားသည့် အမျိုးအစားဖြစ်က ဆက်ဆံအပြီး ၈ နာရီကြာမှ ထုတ်ရမည်။
g.	Emergency contraception (EC) = Plan B = Morning after pill (T-Pill 72) ဟော်မုန်းပါသော ဆေး၊ လိင်ဆက်ဆံပြီး မြန်မြန် သုံးလေ စိတ်ချရလေ။ ၃ ရက် ရ၂ နာရီ အတွင်းသာလျင် အားကိုးနိုင်။ WHO က ၅ ရက်အထိကြာ သုံးနိုင်တယ်ဆို။ 75% to 89% ထိရောက်။ သားပျက်စေသည့် ဆေးမဟုတ်ဘဲ သန္ဓေမတည်အောင်သာ လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုးကျိုးများမှာ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ရင်သားတင်းခြင်း၊ မောပန်းခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ဖြစ်တတ်သည်။ Progestin/progesterone (Levonorgestrel) 1.5 mg တလုံး တကြိမ်တည်း သို့မဟုတ် 0.75 mg (၁၂ နာရီ ခြား) နှစ်ခါခွဲ သောက်နိုင်။ ၈၉% ထိရောက်။ Yuzpe regimen (Estrogen and Progestin) ၁၂ နာရီခြား ၂ ခါသောက်ပါ။
152.	Corticosteroids =(ကော်တီကို-စတီရွိုတ်) အရောင်လျှော့ဆေး၊ နီခြင်း၊ (အလာဂျီ)ရခြင်းကို သက်သာ စေသည်။ ရောဂါလက္ခဏာကို သက်သာစေသည့်ဆေးများ၊ (Betamethasone; Cortisone; Dexamethasone; Hydrocortisone; Methylprednisolone; Prednisolone; Prednisone; Triamcinolone) (အင်ဒိုခရိုင်း) ရောဂါများ၊ (ရူမက်တစ်) ရောဂါ၊ (ကိုလာဂျင်) ရောဂါ၊ အရေပြားနာများ၊ (အလာဂျီ)၊ မျက်စိရောဂါများ၊ အသက်ရှူလမ်းရောဂါ၊ သွေးရောဂါ၊ ကင်ဆာရောဂါများအတွက်ပေးသည်။ ကိုယ်ရောင်ခြင်း၊
153.	Co-trimoxazole = Septrin (TMP/SMZ) (Trimethoprim 160 mg + Sulfamethoxazole 800 mg) ဗက်တီးရီးယားများအတွက်ဆေး၊
154.	Cough medicines or Cough Syrups or Cough linctus ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးများ၊ အမျိုးမျိုး ပါဝင်သည်။ Dextromethorphan သည် အအေးမိ၍ချောင်းဆိုးခြင်းကို သက်သောစေသည်။ Codeine သည် အနာသက်သာ၍ အိပ်ချင်သည်။ Antihistamines (အင်တီဟစ်စတမင်း) (အလာဂျီ) ကိုသက်သာ၍ အိပ်ချင် သည်။ Mucolytic agent or Decongestants ချွဲနည်း၊ ချွဲပျော်စေသည်။ Ephrdrine ပါဝင်ပါက လေပြွန်ကို ကျယ်စေသည်။ သို့သော် ရင်တုံမည်။ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးများသည် အများအားဖြင့် Placebo ခေါ် လူနာ စိတ်သက်သာရာ ရစေသည့် ဆေးသာဖြစ်သည်။
155.	Cox Kit3ဆေး ၃ မျိုးရောထားသည့် တီဘီဆေး၊ (Rifampicin 450 mg + Ethambutol HCl 800 mg + Isoniazid 300 mg) အသဲမကောင်းသူ၊ ကျောက်ကပ်မကောင်းသူ၊ ငယ်လွန်းသူများ မပေးရ၊ အစာမစားမီ နာရီဝက်၊ စားပြီး ၂ နာရီသောက်ပါ၊
156.	Cox Kit4ဆေး ၄ မျိုးရောထားသည့်တီဘီဆေး၊ (Rifampicin 450 mg + Isoniazid 300 mg +2tabs of Pyrazinamide 750 mg each; 1 tablet of Ethambutol HCl 800 mg) အသဲ-ကျောက်ကပ် မကောင်းသူ၊ ငယ်လွန်းသူများမပေးရ၊ အစာမစားမီ နာရီဝက်၊ စားပြီး ၂ နာရီသောက်ပါ၊ အနည်းဆုံး ၂ လ ပေးပါ။
157.	Crocin = Paracetamol အနာ-အကိုက်-အဖျားသက်သာဆေး၊
158.	Cycloserine 15-20 mg/kg (Max. 1 Gm) တီဘီဆေး၊
159.	Cypon = Cyproheptadine အလာဂျီ၊ အစားမစားချင်၊ 4-8 mg TDS, 10-20 drops TDS
160.	Dapsone (လက်ပရိုစီ) ဆေး၊ 50-100 mg daily ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ ကိုယ်ပူ၊ အစားပျက်၊ ခေါင်းကိုက်၊ အိပ်မပျော်၊
161.	Deca-Durabolin သွေးအားနည်းခြင်း အရိုးအားနည်းခြင်း၊ အထွေထွေအားယုတ်ခြင်း၊
162.	Demeclocycline (HCl) ဝက်ခြံ၊ ဆီးလမ်း-မွေးလမ်း-အစာလမ်း-အသက်ရှူလမ်း ရောင်ခြင်း၊ နူမိုးနီးယား၊ (8.571 – 12.857 mg/kg TDS Orally x up to3days after cure)
163.	Desmopressin အိပ်ရာထဲဆီးသွားခြင်း၊ 0.1 to 0.2 mg TDS
164.	Dettol Antiseptic, Liquid Disinfectant ပိုးသန့်ဆေးရည်။
165.	Dexamethasone (စတီရွိုက်)၊ ထိုးဆေး၊ စားဆေး၊ ထည့်ဆေး၊ အရောင်-အယား လျှော့ဆေး၊ (အင်ဒိုခရိုင်း) ရောဂါများ၊ (ရူမက်တစ်) ရောဂါ၊ (ကိုလာဂျင်) ရောဂါ၊ အရေပြားနာများ၊ (အလာဂျီ) ဖြစ်ခြင်း၊ မျက်စိရောဂါများ၊ အသက်ရှူလမ်းရောဂါ၊ သွေးရောဂါ၊ ကင်ဆာရောဂါ။ (ရှော့ခ်)ဖြစ်ခြင်း၊ ပန်းနာ၊ အန်ခြင်း၊ 0.5 to 2.0 mg Daily IV/IM once in weeks; 0.25 to 0.5 mg BD; Orally 0.5 to 2.0 Mg IV/IM daily; 0.05 mg/kg QID IV; 0.15 mg/kg IV QID ဦးနှောက်မြှေးရောင်ပြီး သတိလစ်ခြင်း၊ Dexamethasone 0.15 mg/kg IV QID for coma cases; Brain abscess ဦးနှောက် ပြည်တည်ခြင်း၊ (1) Penicillin G4million units IV every4hours or Penicillin G2million units every2hours IV + Metronidazole 750 mg IV every6hours (or) + Chloramphenicol 1-2 Gm IV QID x 6-8 weeks plus Dexamethasone 4-25 mg QID + Surgery; မေ့ဆေးကြောင့် ပျို့-အန်ခြင်း၊ Serotonin antagonist နှင့် Phenothiazine or Dexamethasone ရောထားသည့် ဆေးသည် 90% ကောင်းသည်။ ရက်တို ဆိုင်းနပ်စ်၊ နားကိုက်ခြင်း၊ လူစုလူဝေးကရသော နူမိုးနီးယား၊ Cefuroxime 750-1500 mg IV TDS + Dexamethasone 4-10 mg stat and4mg IV QID ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး = ဆီးချို၊ မောပန်း၊ အားယုတ်၊
166.	Dextropropoxyphene + Ibuprofen (Ibu-Proxyvon, Ibuprofen, Ibugesic (NSAIDs) စတီရွိုက် မပါသောဆေးအုပ်စုဝင် အနာ-အကိုက်-အဖျားသက်သာစေသည့်ဆေး၊ စားဆေး-လိမ်းဆေး၊ 200-400 mg 4-6 hourly; 300-800 mg 3-4 hourly; Children 5-10 mg/Kg; အစာနှင့်သောက်ရမည်၊ Adults = 1.2-1.8 Gm daily in divided doses Children 20-30 mg/kg in divided doses 8-12 years = 600-800 mg; 3-7 years = 300-400 mg; 1-2 years = 150-200 mg; 6-12 months = 150 mg ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = အရေပြား အနီပြင်ထွက်၊ ဆေးစွဲ၊ အစာမကျေ၊ အစာလမ်းသွေးယို၊
167.	Diazepam = (Valium)
168.	Diclofenac (Na) 25-75 mg BD (စတီရွိုက်)မပါသည့် အနာ-အကိုက်-အဖျား-အရောင်ကျ NSAID စားဆေး-ထိုးဆေး၊ Voltaren = 50-75 mg BD/TDS; Voltaren-XR = 100-200 mg QID; Diclofenac Injection = 25-50-75 mg infusion in 5% Glucose QID; နာခြင်းအမျိုးမျိုး၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ ခေါင်းကိုက်၊ အစာအိမ်အောင့်၊ အနီပြင်ထွက်၊ ကိုယ်ရောင်၊ အသဲ-ကျောက်ကပ် ထိခိုက်၊ Diclofenic 3% = (အက်ဖ်သပ်စ်-အာလ်ဆာ) Aphthous ulcer လိမ်းဆေး၊
169.	Dicloxacillin 1 Gm QID အရိုးတွင်းပြည်တည်ခြင်း၊ Adult 500 mg PO q6h; Pediatric 25 mg/kg/d divided q6h အရေပြားနာ၊ အရေပြားရောင်ခြင်းအမျိုးမျိုး၊ အနာဒဏ်ရာများ၊ နှလုံးအတွင်းသား ရောင်ခြင်း၊ နူမိုးနီးယား၊ အရိုးအတွင်းရောင်ခြင်း၊ အစာဆိပ်သင့်ခြင်း၊ သွားအတု-အရိုးတုရောင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းရောင်ခြင်း၊
170.	Dicyclomine hydrochloride 20 mg TDS ဝမ်းပျက်၍ဗိုက်နာ၊ စိတ်-အလုပ်ရှုတ်၍ဝမ်းချုပ်၊ ဆီးမထိန်းနိုင်၊
171.	Diethylcarbamazine ဆင်ခြေထောက်ရောဂါဆေး၊
172.	Digene (Magnesium hydroxide) = အက်စစ်ဓာတ်ပျယ်ဆေး၊ ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ ဝမ်းချုပ်၊
173.	Digeplex Drops အစာခြေခြင်းနှင့် ဗီတာမင်၊
174.	Digoxin = Lanoxin နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ 250-750 mg daily နှလုံး အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့သည့်ရောဂါ၊ 50 micrograms/ml injection သွေးခုန်နှုန်းမမှန်ခြင်း၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = အန်၊ ဝမ်းပျက်၊ ဗိုက်နာ၊ ခေါင်းကိုက်၊ မျက်စိအားနည်း၊ မူးဝေ။
175.	Dihydroergotamine and Ergotamine မိုင်ဂရိန်းရောဂါ၊ ခေါင်းထိုး၍ ကိုက်ခြင်း၊ Adults: 1 mg,asecond 1-mg one hour later တပါတ်အတွင်း ၂ ကြိမ်ထက် ပိုမပေးရ၊
176.	Diltiazem (HCl) 30-60 mg TDS Oral နှလုံးရောဂါ Attack ရခြင်း၊ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း၊ သွေးတိုး၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း၍ ရင်ဘတ်နာခြင်း၊ Diltiazem 60-120-360 mg BD; Maximum dose: 480 mg/day
177.	Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors (DPP-4) ဆီးချိုစားဆေး၊
178.	Diphenoxylate (Lomotil)5mg TDS for adult; For children 0.166 mg/kg TDS ဝမ်းလျှောခြင်း၊
179.	Diprolene AF Cream 0.05% (Betamethasone dipropionate) စတီရွိုက်ပါသော လိမ်းဆေး၊
180.	Dipyrone (Analgin, Alalgesin) = NSAID စတီရွိုက်မပါသော အနာ-အကိုက်-အဖျားကျဆေး၊ 500-1000 mg QID Orally or 0.8 to 1.6 G IV/IM daily
181.	Disprin = Aspirin NSAID အနာ-အကိုက်-အဖျားကျဆေး၊ သွေးခဲခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်၊
182.	Ditropan (Oxybutynin chloride) Tablets is indicated for the relief of symptoms of bladder instability associated with voiding in patients with uninhibited neurogenic or reflex neurogenic bladder (i.e., urgency, frequency, urinary leakage, urge incontinence, dysuria). Adults: one 5-mg BD/TDS/QID.
183.	Dolco-Lax, Bisacodyl = 5-15 mg HS ဝမ်းနုတ်ဆေး၊
184.	Domperidone (Dompy), Domcolic, Domstal, Vomistop ပျို့-အန်ပျောက်ဆေး၊ နို့ထွက်များ စေရန်။ အစာခြေရည် အထက်တက်ခြင်း၊ အစာများအောက်ဆင်းနှေးခြင်း၊ အစာမစားမီ ၁၅-၃ဝ မိနစ် စောပေးပါ၊ ညမအိပ်မီထပ်ပေးပါ၊ Adults 20 mg TDS/QID; Children5to 12 years 10 mg3to4TDS/QID
185.	Dopamine = နှလုံး အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ခြင်းအတွက် ထိုးဆေး၊ = 40 mg in 5-ml vial;
186.	Doxycycline (HCl), Achromycin, Vibramycin = Tetracycline ပိုးများစွာကိုနိုင်သည့် ပဋိဇီဝဆေး၊
a.	Gonococcal infections 100 mg BD x5days or 300 mg stat followed in one hour; byasecond 300 mg Primary and secondary syphilis 100 mg TDS x 10 days;
b.	Tertiary syphilis 200 mg BD x 21 days + Ceftriaxone 1 Gm daily x 14 days Urethral, Endocervical, or Rectal infection 100 mg BD x 7-14 days;
c.	Anthras Doxycycline 100 mg BD IV or Orally ဒေါင့်သန်းနာ၊
d.	Doxycycline 100 mg IV or Orally BD + Cefotaxime2Gm IV TDS လူစုလူဝေးမှရသည့် နူမိုးနီးယား၊
e.	Doxycycline 100-200 mg BD x 10 days သို့မဟုတ် 100 mg IV or Orally BD + Cefotaxime 1-2 Gm IV TDS နူမိုးနီးယား၊
f.	Doxycycline 300 mg stat and followed by 100 mg OD x2weeks + Sulfonamide 10% Eye drop x 2-3 days ဗက်တီးရီးယား မျက်စိနာ၊
187.	Dramamine (Dimenhydrinate) = (အင်တီဟစ်တမင်း) ခရီးသွားစဉ် မူး-အန်ခြင်း၊ နာရီဝက်ကြို သောက်၊ ၄-၆ နာရီတခါသောက်၊ အလာဂျီဖြစ်ခြင်း၊ 25-50-100 mg QID
188.	Drotin = Drotaverine which is an anti-spasmodic. It is used to relieve pain during labor and accelerate labor. အနာသက်သာဆေး။ အထဲအင်္ဂါများညှစ်၍နာခြင်းမျိုးအတွက်ပေးသည်။ ရာသီနာစဉ်နာခြင်း၊ မွေးလူနာ၊
189.	Dulcolax, Bisacodyl = Suppositories 10 mg CM, Tablets 5-10 mg HS ဝမ်းနုတ်ဆေး၊
190.	Duvadilan (Isoxsuprine) သည် smooth muscle relaxant ကြွက်သားနုများအား ပျော့စေသည့်ဆေးဖြစ်သည်။ ရာသီလာစဉ်နာခြင်း၊ ကလေး စောမမွေးစေရန်တို့အတွက် ပေးသည်။
191.	Dyazide (Hydrochlorothiazide 25 mg and Triamterene 37.5 mg) (75 to 125 mg BD) = ပိုတက်စီယံ အလျှော့နည်းစေသော ဆီးသွားစေသည့်ဆေး၊ ကိုယ်ရောင်၊ သွေးတိုးရောဂါဆေး၊
192.	Dytide (Triamterene and Benzthiazide) ပိုတက်စီယံ မလျှော့နည်းစေသော ဆီးသွားစေသည့် ဆေး၊ ကိုယ်ရောင်၊ သွေးတိုးရောဂါဆေး၊
193.	Easylax Suspension = Milk of magnesia 11.25 ml ဝမ်းပြော့ဆေးရည်၊
194.	ECEE2 (Levonorgestrel 750mcg) အရေးပေါ်ပဋိသန္ဓေတားဆေး၊ Progestin (Levonorgestrel) 1.5 mg တလုံးတကြိမ်တည်း သို့မဟုတ် 750 μg ၁၂ နာရီခြား နှစ်ခါခွဲသောက်နိုင်။ ဆိုးကျိုး = ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ရင်သားတင်းခြင်း။
195.	Elocon (mometasone furoate) Lotion, 0.1% အရေပြားနာ၊ နှင်းကူနာ၊ ကြာရှည် အလာဂျီရခြင်း၊
196.	Embee = Albendazole သန်ချဆေး၊
197.	Emflam = Diclofenac 75-150 mg in divided doses NSAID
198.	Emidoxyn, Stemetil မူး-အန်-ပျို့သက်သောဆေး၊ 12.5 mg IM/Orally QID
199.	Enalapril (Maleate) = ACE inhibitor သွေးတိုးကျဆေး၊5mg OD and 5-40 mg in 1-2 doses နှလုံးအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ခြင်း၊ Initially 2-5 mg gradually increased to maintenance dose of 10-20 mg once or in divided doses ရေများများသောက်ပါ။
200.	Encephabol ဦးနှောက်အားနည်းခြင်း၊
201.	Enoxacin (200-400 mg BD Oral) အသက်ရှူလမ်း-ဆီးပြွန်-အစာခြေလမ်း- အရေပြားနာ၊
202.	Enzyme Plus = (Diastase + Papain) Digestive Enzyme အစာခြေအင်ဇိုင်း၊
203.	Ephedrine (Adrenaline) = 25-50 mg IM/SC/IV slow 25-50 mg Orally QID လေပြွန်ကျဉ်း၊ ရုတ်တရက်ပန်းနာကျပ်ခြင်း၊ အင်းဆက်ကိုက်၊ အလာဂျီဖြစ်၊ (ရှော့ခ်)အား ကုသနိုင်သည့်ဆေး၊
204.	Eptoin, Dilantin (Phenytoin Sodium) = အတက်ပျောက်ဆေး၊ Epilepsy ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ၊ 100-mg TDS/OD; Children Initially,5mg/kg/day in2or3equally divided doses, with subsequent dosage toamaximum of 300 mg daily. A recommended daily maintenance dosage is usually4to 8 mg/kg. Children over6years old and adolescents may require the minimum adult dose (300 mg/day)
205.	Ergotamine, Migranil 1-2 mg IM; 1-2 mg Orally QID (မိုင်ဂရင်း) အမူးရောဂါဆေး၊ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး = အန်-ပျို့၊ ခြေလက်အေးစက်၊ ဗိုက်နာ၊
206.	Erometrine သားအိမ်ကြုံ့ဆေး၊ = 200 micrograms (hydrogen maleate) in 1-ml ampoule;
207.	Erythromycin, Azithromycin, Clarithromycin, Erythrocin, Tyhromycin, E-mycin (0.5 g); 30 mg/kg;
a.	Erythromycin 250-500 mg QID (ကလာမိုင်ဒီးယား) ကြောင့် ဆီးပြွန်အဝရောင်ခြင်း၊ သားအိမ်အဝ ရောင်ခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ပိုးကြောင့် ဝမ်းလျှောခြင်း၊
b.	Erythromycin 50 mg/kg/day + Sulfonamide 150 mg/kg/day x 10 days နားကိုက်၊
c.	Erythromycin 500 mg IV QID နူမိုးနီးယား၊
d.	Erythromycin 500 mg Orally လူစုလူဝေးမှရသော နူမိုးနီးယား၊ အာသီးရောင်၊ လည်ချောင်းနာ၊
e.	Erythromycin 500 mg QID x2weeks ဆစ်ဖလစ် ပဌမဆင့်၊ ဒုတိယဆင့်၊ တတိယဆင့်၊
f.	Erythromycin 500 mg QID x 21 days ကျား-မ ဆီးပြွန်-မွေးလမ်းကြောင်း-သားအိမ် ရောင်ခြင်း၊
g.	Erythromycin, 500 mg QID x7days ရှန်ကာရွိုက်၊
h.	Erythromycin: Adults: 250-500 mg QID and total amount not to exceed4Gm ina24-hour; Children: 15-25 mg/kg. Orally Suspension: ½ -2teaspoon QID x 10 days; 500 mg QID x 10 days (18.75 mg/kg QID Orally) နားပြည်ယိုခြင်း၊ အရေပြားနာ၊ လိင်မှတဆင့် ကူးစက် ရောဂါများ၊ အသက်ရှူလမ်းအထက်ပိုင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ နှလုံးအတွင်းသားရောင်ခြင်း၊ အရိုးအဆစ်ရောင်ခြင်း၊ ဂနိုရီးယား၊ အစာခြေလမ်းရောင်ခြင်း၊ မျက်စိပိုးဝင်ခြင်း၊ မွေးစကလေးငယ်များ နှလုံးအလုပ်မနိုင်ခြင်း၊
i.	ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ဝမ်းပျက်၊ ဗိုက်နာ၊ အနီပြင်ထွက်၊ ကိုယ်ပူ၊ အသားဝါ၊ ပျို့၊
208.	Estrogen အမျိုးသမီး ဟော်မုန်း၊ ၎င်းဟော်မုန်း နည်းပါက မျက်နှာနီမြန်းခြင်း၊ ချွေးထွက်များခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်သည်။ လိင်စိတ်နည်းပြီး အရိုး အားနည်းလာကာ အရိူးကျိုးလွယ်လာသည်။ အချို့မှာ စိတ်ဓာတ်လည်း ကျတတ်သည်။ သွေးဆုံးချိန် ဖြစ်တတ်သည့် လက္ခဏာများဖြစ်သည်။ တနေ့လျင် 2.5 mg ပေးရသည်။ နေ့စဉ် သောက်ချိန် မှန်သင့်သည်။ ဥပမာ နံနက် ၁ဝ နာရီဆိုက နေ့စဉ် နံနက် ၁ဝ နာရီ သောက်ပါ။ ဆေးသောက်ရန် မေ့သွားပါက ၁၂ နာရီ မကွာခြားသေးက မှတ်မိချိန်မှာ ဆေးသောက်ပါ။ သက်သာလာသည်ကို ရက်သတ္တပါတ် အနည်းငယ်အတွင်း သိသာလာမည်။ ၃ လ လောက်ရှိမှ ပိုသိသာမည်။ သွေးဆုံးချိန်နောက် ၁ နှစ်လောက်ကြာမှ ပေးတာ ပိုကောင်းသည်။ သို့မဟုတ်ပါက ရာသီမမှန်ဖြစ်တတ်သည်။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေချိန်-ကလေးနို့တိုက်ချိန် မပေးရ။ သွေးခဲပိတ်ရောဂါရှိဘူးလျင် မပေးရ။ ဆိုးသည့် အသဲရောဂါရှိလျင် မပေးရ။
209.	Ethambutol (HCl) (Ulticox-800) 15-25 mg/kg daily for 60 days တီဘီဆေး အခြားဆေးများနှင့် တွဲပေးရသည်၊ (လူကီးမီးယား)ခေါ် သွေးအားနည်းရောဂါ၊ 100 mg-400 mg;
210.	Ethionamide တီဘီ၊ အခြားဆေးများနှင့်တွဲပေးပါ၊ 250-500 mg BD; 15-20 mg/kg (Max. 1 Gm)
211.	Ethosuximide capsule အတက်ရောဂါ၊ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ၊ 250 mg; syrup, 250 mg/5ml
212.	Etofyline and Theophyline = ပန်းနာ၊ 250-500 mg (4-5 mg/kg) IV slowly, 100-300 mg TDS/QID Orally (5 mg/kg)
213.	Etoricoxib 60, 90 mg/day for chronic pain and 120 mg/day for acute pain
214.	Etronidazole2Gm stat x7days မွေးလမ်းကြောင်းရောင်ခြင်း၊
215.	Famciclovir (0.5 g) (Famvir) 500 mg three times daily
216.	Famotidine လေနာအတွက်ဆေး၊ 20-40 mg Orally DU လေနာ၊ သာမန်ဖြစ်သော အစာမြိုပြွန် ရောင်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်ပူခြင်း၊ အစာခြေရည် အထက်တက်ခြင်း၊ စိတ်-အလုပ်ရှုပ်၍ အစာအိမ်ရောင်ခြင်း၊
217.	Fasigyn = Tinidazole (ထရွိုင်ကိုမိုးနပ်) ပိုး၊ (ဂိုင်ယားဒီးယား) ပိုး၊
a.	ခွဲစိတ်လူနာကို ပိုးကာကွယ်ရန်၊ မခွဲမီ ၁၂ နာရီကြိုပေးပါ။2Gm; Adult 1.6 Gm IV infusion;
b.	မွေးလမ်းကြောင်းရောင်၊ လေမကြိုက်သည့်ပိုး၊ Orally2Gm stat x2days;2Gm stat followed by 1 Gm OD or 500 mg BD x 5-6 days;
c.	အမီးဘား ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊ အသဲပြည်တည်ခြင်း။ Tinidazole 800 mg TDS x 3-5 days + Diiodohydroxyquin 650 mg TDS x 21 days
d.	(ဂိုင်ယာဒီးယား)ပိုးဝင်၍ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊2Gm Stat followed by 1 g/day for 5-7 days
e.	သွားဖုံးရောင်၊ 1 Gm followed by 1 Gm x 5-6 days
f.	ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ အရသာပျက်၊ အနီပြင်ထွက်၊ ခေါင်းမူး၊ ဆီးနီ။
218.	Fericip (Iron 100 mg and Folic acid 550 mg) သံဓာတ်နှင့် ဖေါလစ်အက်စစ်၊ 1-3 OD; 150-300 mg BD ရက်အနည်းငယ်မှ ၃-၆ လအထိ ပေးသင့်၊ အစာမစားမီပေးပါ၊
219.	Flagyl = Metronidazole
220.	Flucloxacillin ပဋိဇီဝဆေး၊ အရေပြားနာ၊ ကြွက်သားနာ၊ အသက်ရှူလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊ နားပြည်ယိုခြင်း၊ 250 mg QID Orally; 250-500 mg QID IV
221.	Fluconazole (ဖန်းဂပ်စ်)ခေါ် မှို ရောဂါဆေး၊ အာခေါင်မှို၊ အစာမြိုပြွန်မှို၊ မွေးလမ်းကြောင်းမှို၊ ဦးနှောက်မြှေးမှို၊ Children PO / IV6to 12 mg/kg/day; C. meningitis 12 mg/kg on first day, followed by6mg/kg/day (or 12 mg/kg/day based on medical judgment of patient's response) Fluconazole (0.1 g) 0.1–0.2 g daily; Fluconazole (0.2 g) (Diflucan); Fluconazole (Diflucan IV) 0.2–0.4 g မှိုကြောင့် ဦးနှောက်မြှေးရောင်ခြင်း၊ Adults PO / IV 400 mg first day, followed by 200 mg every day (400 mg may be used) for 10 to 12 wk; မှိုကြောင့် အစာမြိုပြွန်ရောင်ခြင်း၊ Adults PO / IV 200 mg first day, followed by 100 mg every day thereafter for minimum of2wk; Children PO / IV6mg/kg on first day, followed by3mg/kg every day thereafter for minimum of2wk မှိုကြောင့် ဆီးလမ်း-ဝမ်းတွင်းရောင်ခြင်း၊ Adults Daily doses of 50 to 200 mg; မွေးလမ်းကြောင်း မှိုဝင်ခြင်း၊ Vaginal Candidiasis Adults PO 150 mg single dose;
222.	Flucytosine inhibits some strains of Candida, Cryptococcus, Aspergillus, and other fungi. Dosages of 3–8 g daily (75–150 mg/kg/d) orally produce therapeutic levels in serum, urine, and cerebrospinal fluid. When used as monotherapy, development of resistance is common; thus, flucytosine is not used asasingle drug therapy except in candiduria. Flucytosine (0.5 g) (Ancobon) 150 mg/kg
223.	Fluocinolone, Triamcinolone, Mometasone Cream 0.125% BD အရေပြားနာ၊ နှင်းကူနာ၊ Fluocinonide ointment 0.05% (အက်ဖ်သပ်စ်-အာလ်ဆာ) Aphthous ulcer
224.	Fluoride သွားပုတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ဖလိုရိုက်ဓာတ်ဆား၊ 0.05 mg/kg daily
225.	Fluoroquinolone (Levofloacin) 500 mg OD နူမိုးနီးယား၊ Pneumonia
226.	Fluoxetine (HCl) 20-80 mg Daily စိတ်ကျရောဂါဆေး၊ (Prozac) 5-40 mg (max 80 mg) စိတ်ကျရောဂါ၊ Depression and Mania 227.	Fluphenazine (Stemetil) စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည့်ဆေး၊
228.	Fluvoxamine (Luvox) 100-300 mg (max 300 mg) စိတ်ကျရောဂါ၊ Depression and Mania
229.	Folic Acid = Vitamin B9= 0.5 – 1.0 mg/daily Orally/IV/IM
230.	Foscarnet (Foscavir) 180 mg/kg (induction) 90–120 mg/kg (maintenance)
231.	Fosfomycin ဆီးလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊ 1 gm TDS IM (1 gm TDS IM) (1-4 gm TDS IV) (500 mg QID Oral) (25 mg/kg QID Oral)
232.	Fourderm 10 mg = Betamethasone (Valerate) စတီရွိုက်ပါသော နားထည့်ဆေး-စားဆေး၊ 0.1%4hourly Ear drop, 0.05-0.1%; 0.027 mg/kg BD Orally; 0.2 mg/kg TDS IV
233.	Framycetin (Sulphate) = ပဋိဇီဝဆေး၊ အရေပြားနာ၊ ဆီးအိမ်နာ၊ အစာလမ်းကြောင်းနာ၊ မီးလောင်နာ၊ နား-နှာခေါင်း-လည်ချောင်းနာ၊ မျက်စိနာ၊ ခွဲစိတ်နာ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ၊
234.	Fruitobin ပရိုတင်း-သံဓာတ်-ဗီတာမင်-ဓာတ်ဆားများ ပါသည့်ဆေး၊
235.	Fungicip (Clotrimazole), မွေးလမ်းကြောင်းမှိုဝင်ခြင်း၊ Vaginal suppositories 100 mg x6nights and 200 mg x3nights; Fungicip-100-200 Tablets, Cream, 1% w/w 2% w/w vaginal gel
236.	Furazolidone လူကြီး 100-mg QID; ကလေး = (¼ to ½ tablet) QID; Furazole-M (Furazolidone 100mg + Metronidazole 300 mg) Furazolidone 100 mg QID x 7-10 days (ဂိုင်ယာဒီးယား) ပိုးဝင်၍ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ Furazolidone 25-50 mg QID (ဗက်ဆလရီ) ဝမ်းကိုက်၊ ခရီးသွားဝမ်းပျက်ခြင်း-ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ ဗိုက်နာ၊ မူးဝေ၊ ဆီးနီ၊ ခေါင်းကိုက်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ အတက်ရောဂါ ရှိသူများ မပေးသင့်၊
237.	Furosemide or Frusemide (Lasix) = ဆီးသွားစေသည့်ဆေး၊ ကိုယ်ရောင်၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ (20 mg BD and 40-320 mg in 2-3 doses); 40 mg OD followed by 20 mg OD; အရေးပေါ်သွေးတိုးကျရန် = 10-80 mg IV ယုတ်တရက် အဆုပ်ရောင်ခြင်း၊ Acute pulmonary edema IV ½ or 1 ampoule stat ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ ရေ-ဆားနည်း၊ အစာအိမ်အောင့်၊ အစားပျက်၊ အားယုတ်၊ ကြွက်သားနာ၊ ကျောက်ကပ်မကောင်းသူ၊ အသဲမကောင်းသူ၊ (ဂေါတ်)ရှိသူ၊ (လူးပတ်စ်)ရောဂါရှိသူ၊ ဆီးချိုးရှိသူတို့အား မပေးရ၊
238.	Gabapentin (Gabata-300) အတက်ပျောက်ဆေး။ 300 TDS (Max. 1800 mg/day)
239.	Ganciclovir (Cytovene IV) 10 mg/kg
240.	Gasnil Tablets = Simethicone 80 mg လေဆေး၊ အစာမကျေ၊ ဗိုက်နာ၊ 1 TDS
241.	Gatifloxacin 400 mg OD လူစုလူဝေးမှရသော နူမိုးနီးယား၊
242.	Gemcal (Alkem) = Calcetriol + Calcium Carbonate + Zinc ကယ်လ်စီယံနည်းခြင်း၊ အရိုးပြော့ ရောဂါ၊ အမျိုးသမီးများတွင်ဖြစ်တတ်သည့် အရိုးအားနည်းရောဂါ၊
243.	Gemifloxacin (.32 g) (Factiv) 320 mg
244.	Gentamicin ပဋိဇီဝဆေး၊ သဲခြေလမ်းရောင်ခြင်း၊ အတွင်းလူနာများ နူမိုးနီးယား၊ အစာဆိပ်သင့်ခြင်း၊ သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်း-အသက်ရှူလမ်း-သည်းခြေလမ်း-အရိုး-အဆစ်ပိုးဝင်ခြင်း၊ နား-နှာခေါင်း-လည်ချောင်း ရောင်ခြင်း၊ အရေပြားနာ၊ ဗက်တီးရီးယားကြောင့် ဝမ်းပျက်၊ ခွဲစိတ်လူနာ၊ မှတ်ချက်။ ကျောက်ကပ်-အသဲ မကောင်းလျင် သတိဖြင့်ပေးပါ၊
a.	Gentamicin5mg/kg Gentamicin (1.0 – 2.5 mg/kg TDS IV/IM) (2.5 mg/kg TDS IV/IM) ပြင်းထံသော ဗက်တီးရီးယား ဝင်ခြင်း၊ ဦးနှောက်မြှေးရောင်၊ နှလုံးအတွင်းသားရောင်၊
b.	Gentamicin2mg/kg TDS + Ampicillin 1-2 Gm QID ဝမ်းဗိုက်ထဲ ပိုးဝင်ခြင်း၊ ရောဂါပြင်းလျင်
c.	Gentamicin 1.7 mg/kg6or 8 hourly ကလေးများ 2.5 mg/kg BD မွေးစမှ ၆ လ၊ 2.5 mg/kg TDS ၆ လ မှ ၁ဝ နှစ် 2-2.5 mg/kg TDS ၁ဝ နှစ်အထက် 1.5 mg/kg TDS; (1.0 – 2.5 mg/kg TDS IV/IM) (2.5 mg/kg TDS IV/IM)
d.	Gentamycin 1 mg/kg TDS မွေးစကလေး ပိုးဝင်ခြင်း၊ Neonatal infections Gentamycin2mg/kg IV loading dose followed by 1.5 mg/kg TDS သဲခြေအိပ်ရောင်ခြင်း၊
e.	Gentamicin Sulfate Cream 0.1%w/w Folliculitis, Furunculosis အနာ၊ Paronychia ခြေစွယ်ငုတ်၊ အရေပြားနာတွေအတွက် လိမ်းဆေး။
245.	Gentian violet = Methylrosanilinium chloride ဖန်းဂတ်စ် နှင့် ဗက်တီးရီးယား (အင်ဖက်ရှင်) အတွက်လိမ်းဆေး၊ ပါးစပ်နာ၊ မှက်ခရုနာ၊ မီးလောင်နာ၊ အားကစားသမားခြေထောက်၊ ပွေး၊ မှိုရောဂါ။
246.	Glibenclamide, Glimepiride = ဆီးချိုအတွက်ဆေး။
247.	Glucosamine and Chondroitin = can help the pain of osteoarthritis
248.	Glutaraldehyde = ကြွက်နို ့အတွက်လိမ်းဆေး၊ 10% BD x2months
249.	Glyceryl Trinitrate 0.5 to 1.0 mg နှလုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ (sublingual) 500 micrograms;
250.	Gripe Water ကလေးများဗိုက်နာ၊ ကြို့ထိုး၊ လေတက်၊ ဝမ်းစိမ်း၊
251.	Griseofulvin, Grisactin forte (ဖန်းဂပ်စ်)ခေါ် မှို၊ ပွေး ရောဂါဆေး၊ = capsule or tablet, 125 mg, 250 mg; 500 to 1000 mg daily; Children 10 mg/kg daily အရေပြားဖြစ်လျင် ၁-၆ ပါတ်၊ လက်သည်း- ဆံပင်ဖြစ်လျင် ၆ လကြာ ပေးရမည်။
252.	Gyne-Lotrimin = Clotrimazole Vaginal Cream မွေးလမ်းကြောင်း ဖန်းဂတ်စ်ရောဂါ၊
253.	Hansaplast, Handyplast ဆိုတဲ့ တခါသုံး အနာကပ်ပလာစတာတွေက ဆေးမပါဘူး။ သူတို့ဟာသူတို့ သန့်နေတာ သက်သက်ဖြစ်တယ်။ အနာကို ဖုံးပေးထားနိုင်တယ်။ အနောပါ်ဖုံးရတဲ့ ပတ္တီး-ပိတ်ကျုစ နဲ့ တိပ်-ပလာစတာ နှစ်မျိုးကို တခါတည်း ပါနေတဲ့သဘောသာ ဖြစ်တယ်။ ထိ-ရှတဲ့အခါ ချက်ချင်းသူ့ကိုသုံးနိုင်တယ်။ ခဏဆိုသလို ကြာမယ်၊ ထိခိုက်ရာမှာ မသန့်တာ ဝင်မယ်ဆိုရင် ဒဏ်ရာကို ပိုးသန့်ပေးဘို့ပါ လိုသေးတယ်။
254.	HbRich = Vitamin B12, Ferric Ammonium Citrate, Folic acid 10-20 ml OD/BD သွေးအား ကောင်းစေသည့်ဆေး၊
255.	Heparin (Na) and Heparin (Cl) 5,000 IU IV, 20,000-30,000 IU IV Infusion, 5,000 IU TDS S/C နှလုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ နှလုံး (Attack, Stroke)ရခြင်း၊
256.	Hermin Injection (Essential Amino acids for parentral nutrition) မိခင်များအတွက် မရှိမဖြစ် သော (အမိုင်နိုအက်စစ်) ခေါ် ပရိုတင်းများ၊
257.	Hydralazine သွေးတိုး၊ အစာအိမ်နာ၊ 25 mg BD and 50-300 mg in 2-4 doses PET အရေးပေါ် သွေးတိုးခြင်း၊ = 5-20 mg IV may repeat after 20 minutes
258.	Hydrazide, Hydrochlorothiazide, Aquazide = ဆီးသွားစေသည့်ဆေး၊ ကိုယ်ရောင်၊ သွေးတိုး၊ ကျောက်ကပ်မကောင်း၍ရောင်ခြင်း၊ စတီရွိုက်ကြောင့်ရောင်ခြင်း၊ နှလုံးမကောင်း၍ ရောင်ခြင်း၊ အသည်းခြောက်၍ ရောင်ခြင်း၊ = 12.5-25-50 mg OD or BD; 50-200 mg Daily; ကလေး 1-2-3 mg/kg OD/BD, not to exceed 37.5 mg/day in two divided doses
259.	Hydrite = NaCl 350 mg, Na bicarbonate 250 mg, KCl 150 mg, anhydrous glucose2g. Per sachet NaCl 520 mg, trisodium citrate dihydrate 580 mg, KCl 300 mg, anhydrous glucose 2.7 g ဓာတ်ဆား 1 tab/200 mL;2tab/200 mL
260.	Hydrochlorothiazide ဆီးသွားစေသည့်ဆေး၊ = 25 mg နှလုံးအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့သည့်ရောဂါ၊
261.	Hydrocortisone Sodium Succinate, Solu-Cortef (ကော်တီကို-စတီရွိုက်)ဆေး၊ (ရှော့ခ်) ဖြစ်လျင် အရေးပေါ်ပေးရသည်။ ၁ဝဝ မီလီဂရမ်ကို သွေးပြန်ကြောထဲထိုးပေးရသည်၊
262.	Hydrogen Peroxide 3-6% = Disinfectant, Antiseptic ပိုးသတ်ဆေး၊ အနာကို သန့်ရှင်းရန်၊ ပါးစပ် ဆေးရန်၊ ဆီးအိမ်သန့်ပေးခြင်း၊ ပျက်စီးနေသော တစ်ရှူး၊ သို့သော် ကောင်းနေသည့် အရေပြားအားမသုံးရ။
263.	Hydroxyquinoline sulphate = အနာဆေးရန်၊ ပါးစပ်ငုံရန်၊ အရေပြားသန့်ရန်။
264.	Hydroxyzine = Antihistamine ယားတာအတွက်ပေးရင် 25 mg တနေ့ ၃-၄ ကြိမ်ပေးနိုင်တယ်။ စိတ်ငြိမ်စေချင်ရင်၊ အိပ်စေချင်ရင် 50 to 100 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်အထိ ပေးတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ = ခေါင်မူး၊ အိပ်ချင်၊ မျက်စိဝါး၊ အာခေါင်ခြောက်၊ ခေါင်းကိုက်၊ မျက်လုံး-မေး-လျှာ-လည်ပင်း ကြွက်သားတွေ လှုတ်ခြင်း၊ လက်တုံ၊ စိတ်မရှင်း၊ တက်ခြင်း။
265.	Hyoscine (Butylbromide) အစာအိမ်-အူ-သားအိမ်-ဆီးလမ်းကြောင်း-သည်းခြေလမ်းတို့နာခြင်း။ ရာသီဆင်းချိန်နာခြင်း၊ အိပ်ရာထဲ ဆီးသွားခြင်း။ ခရီးသွားစဉ်အန်ခြင်း၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = မျက်စိအမြင်ထိနိုင်၊ အာခေါင်ခြောက်မည်၊ ဆီးအိမ်တင်းနိုင်၊ Oral 10-20 mg 3-5 times daily. IM/IV 20-40 mg 3-5 times daily
266.	Iazepam (Valium) 5-15 mg (Max 30 mg) စိုးရိမ်စိတ်များခြင်း၊
267.	Ibuprofen, Ibugesic (NSAIDs) ဆေးအုပ်စု။ 200-400-800 mg TDS/QID လစဉ်ရာသီလာစဉ် နာခြင်း၊ နာခြင်းအမျိုးမျိုး၊ သာမန်အကိုက်၊ အဖျား၊ ကလေး၊ ၆လ မှ ၁၂ နှစ်၊ ၅-၁ဝ မီလီဂရမ်/ကေဂျီ၊ အများဆုံး ၃.၂ ဂရမ်၊ ၁ဝ ရက်ထက်မကျော်စေရ၊ အစာနှင့်တွဲပေးပါ။ ဆိုးကျိုးများ၊ အနီရောင်အင်ပြင်၊ ခေါင်းကိုက်၊ ခေါင်းမူး၊ နားထဲကအသံထွက်၊ အိပ်ချင်၊ ဗိုက်နာ၊ ပျိူ့၊ ဝမ်းပျက်၊ အစာအိမ်နှင့် အူအနာ။
268.	Idoquinol 650 mg TDS x 21 days followed by Chloroquine 500 mg daily x 14 days အမီးဘားပိုးကြောင့် အသဲပြည်တည်ခြင်း၊
269.	Imferon Injection (50mg of elemental iron/ml) သံဓာတ်တိုးစေရန် ထိုးဆေး၊
270.	Imipenem (Primaxin IV) 50 mg/kg
271.	Imipenem နူမိုနီးယား၊ နှလုံးအတွင်းသား-အသက်ရှူလမ်းရောင်ခြင်း၊ အရေပြားနာ၊ သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊ ဦးနှောက်ပြည်တည်နာ၊ မေ့ဆေးပေးစဉ် အစာခြေအရည် နည်းစေရန်၊ အရိုးအဆစ် ပိုးဝင်ခြင်း၊ ဝမ်းတွင်းမြှေး ရောင်ခြင်း၊ ယောက်ျားဆီးကြိတ်ရောင်ခြင်း၊ (125-500 mg DB-TDS IM/IV) (15 mg/kg TDS IV Infusion)
272.	Imipramine 10-150 mg ခေါင်းကိုက်ခြင်း အမျိုးမျိုး၊ 50-100 mg HS ညအချိန် ဆီးသွားခြင်း၊
273.	Indapamide = Natrilix SR 2.5 mg OD and 2.5-5 mg OD အရောင်လျှော့စေသည့် သွေးတိုးကျ ဆေး၊ 0.25 mg once as single dose in morning
274.	Inderal = Propranolol (ဘီတာ-ဘလော့ကား) အလိုအလျှောက်တုံ့ပြန်သည့် အာရုံကြောစနစ်တွင် အရေးပါသော Adrinaline (Epinephrine) ကို တားဆီးမှုလုပ်သည့်ဆေး။
a.	သွေးတိုး 40 mg BD လိုအပ်လျင် တိုးပေးပါ။ 120 mg to 240 mg per day နှင့်ထိန်းထားပါ။ တချို့က 640 mg အထိလိုတတ်သည်။
b.	Angina pecetoris ခေါ် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ 80 mg to 320 mg BD/TDS/QID
c.	Myocardial Infarction နှလုံးသွေးကြောပိတ်ရောဂါ 40 mg TDS with titration after 1 month to 60 mg to 80 mg TDS မှ 180 mg to 240 mg/day ကိုခွဲပေးပါ။
d.	Cardiac arrhythmias, Tachycardias နှလုံးခုံနှုန်းမြန်-မမှန်သည့်ရောဂါ 10 mg to 30 mg TDS/QID before meals and HS Migraine (မိုင်ဂရင်း) ခေါင်းကိုက်-ခေါင်းမူးရောဂါ၊
80-160-240 mg daily in divided doses Stage fright (Social phobia) ခြေလက်တုံ အကြောက်ရောဂါ၊ 40 mg BD/TDS လိုအပ်လျင် 240 mg to 320 mg per day
e.	Side-effects ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = သွေးဖိအားကျ၊ နှလုံးခုန်နှေး၊ လက်ဖျားအေးစက်၊ အိပ်မပျော်၊ အားယုတ်၊ စိတ်ကျ၊ အန်-ပျို့၊ ဝမ်းချုပ်၊
275.	Indomethacin (Indocin) = 25-50 mg BD/TDS/QID အနာ-အကိုက်-အရောင်ဆေး၊ နာခြင်း အမျိုးမျိုး၊ Trauma, Rheumatic, TB, Gout; 75-150 mg daily ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မိုင်ဂရင်း၊
276.	Insulin, Sulfonylurea injection and Suspension ဆီးချိုအတွက်ဆေး၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ဆေးထိုးသည့်နေရာနီ-ရောင်-ယား၊ ကိုယ်ရောင်၊ အလာဂျီရ၊
277.	Intraconazole မှိုရောဂါအတွက်ဆေး။ Vaginal Yeast infections (Thrush) 200 mg BD; Shin fungus infeaction = 200 mg OD x7days; Infections of nails – 200 mg OD x3months; Candidia infections of mouth, throat and oesophagus = 100 mg OD x 15 days; Itraconazole (0.1 g) (Sporanox) 200–400 mg
278.	Iodine = rapidly bactericidal, fungicidal, tuberculocidal, virucidal, and sporicidal; Iodine ကို Alcohol နှင့်ရော၍ 2% ကို ခွဲစိတ်ခြင်း မပြုမီ သုံးသည်။ Povidine သည် ရေနှင့်စပ်ထားသော Iodine 10% ဖြစ်ပြီး ပိုကောင်းသည်။
279.	Iodochlorhydroxyquinoline မှို Fungus ကို နိုင်တဲ့ဆေး။
280.	Ipratropium bromide ပန်းနာနှင့် အသက်ရှူလမ်းပိတ်ရောဂါဆေး၊ = inhalation (aerosol)
281.	Isoniazid (INH) = တီဘီဆေး၊ အခြားဆေးနှင့်တွဲပေးရသည်၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = အန်-ပျို့၊ အလာဂျီရ၊ မျက်စိအားနည်း၊ အသံထိခိုက်၊ သွေးထိခိုက်၊ Fixed-dose Combinations of Drugs for TB by WHO = တီဘီ ကုသရန် ဆေးအတွဲများ၊
a.	INH + Rifampicin 150 mg + 300 mg OD, 75 mg + 150 Mg OD, 30 mg + 60 mg OD;
b.	INH + Rifampicin 150 mg + 150 mg3times weekly;
c.	INH + Rifampicin 60 mg + 60 mg3times weekly;
d.	INH + Ethambutol 150 mg + 400 mg OD;
e.	INH + Thioacetazone 100 mg + 50 mg OD;
f.	INH + Thioacetazone 300 mg + 150 mg OD;
g.	INH + Rifampicin + Pyrazinamide 75 mg + 150 mg + 400 mg OD;
h.	INH + Rifampicin + Pyrazinamide 30 mg + 60 mg + 150 mg OD;
i.	INH + Rifampicin + Pyrazinamide 150 mg + 150 mg + 500 mg3times weekly;
j.	INH + Rifampicin + Pyrazinamide + Ethambutol 75 mg + 150 mg + 400 mg + 275 mg OD;
282.	Isopropanol Antiseptic ကို ဆေးရုံ-ဆေးခန်းသုံး Surgical alcohol ဟု ခေါ်သည်။ ဆေးမထိုးမီ အရေပြားကို သန့်ရှင်း ပေးနိုင်သည်။
283.	Isosorbide (Dinitrate) နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ။ 20-40 mg BD/TDS Orally/Sunlingual ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = အသားနီ၊ မူးဝေ၊ ခေါင်းကိုက်၊
284.	Itrabene (Itraconazole) = Fungal Infections (Candida Infections, Dermatophytosis, Fingernail, Toenail, Oral Thrush, Vaginal Yeast Infections) 1 BD မှိုရောဂါဆေး၊
285.	Ivermectin 200 μg/kg stat and repeat after6months Filariasis ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ၊ = scored tablet,3mg,6mg;
286.	Kanamycin (Sulphate) သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊ အူရောင်ခြင်း၊ ဦးနှောက်မြှေး ရောင်ခြင်း၊ အသဲကြောင့် ဦးနှောက်ထိခိုက်ခြင်း၊ 500 mg TDS IV/IM; 1 Gm QID; 7.5 mg/kg TDS IV/IM; ဆီးလမ်း-မွေးလမ်း- အသက်ရှူလမ်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ = 3-4 Gm weekly and 15-30 mg/kg IM/IV ဂနိုရီးယား၊ =2Gm stat ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ အနီပြင်ထွက်၊ ခေါင်းကိုက်၊
287.	Kaypen 125-250, Phenoxymethyl Penicillin Potassium = Penicillin V ပဋိဇီဝဆေး၊ နား အလည်ပိုင်း-အာသီး-လည်ပင်းရောင်၊ ဆုံဆို့နာ၊ လေပြွန်-အသံပြွန်ရောင်၊ (နူမိုးနီးယား)၊ အသက်ရှူလမ်း-ဆီးလမ်း-အရေပြားရောင်၊ (ဆိုင်းနပ်စ်)၊ ဆစ်ဖလစ်၊ (ဂနိုရီးယာ)၊ သွေးထဲပိုးဝင်၊ ဦးနှောက်အမြှေး-နှလုံး အတွင်းသား-အရိုး-အဆစ်ရောင်၊ လေးဘက်နာ၊ ဒေါင့်သန်းရောဂါ၊ 250-500 mg QID; 12.5 mg/kg QID
288.	Kemestin (Clotrimazole Vaginal) မွေးလမ်းကြောင်းမှိုဝင်ခြင်း။ ပါးစပ်နာ၊ အရေပြားနာ၊ မှက်ခရု၊ ဖန်းဂတ်စ်ရောဂါ၊ ထည့်ဆေး၊ စားဆေး၊
289.	Ketalar, Ketamine = မေ့ဆေးထိုးဆေး၊ Anaesthetic Dose = 450-1000 mg IM, 50-350 mg IV; Onset = 3-5 minutes; Duration = 1.5 –2hours; Back to baseline = 4-6 hours; Children =5mg/kg IM 1.25 mg/kg IV ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ အစားပျက်၊ အိပ်မက်မက်၊ အသက်ရှူခက်၊ နှလုံးခုန်မမှန်၊
290.	Ketoconazole 200-400 mg with breakfast ဖန်းဂတ်စ် မှိုဆေး၊
291.	Lamivir (Lamivudine 100 mg), Lamidac, Lamivir HBV အသဲရောင်(ဘီ) ကုသရန်ဆေး၊ ခုခံအား ကျရောဂါဆေး၊ 100 mg daily ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ကြွက်သားနာ၊ ချောင်းဆိုး၊ အအိပ်ပျက်၊ သရက်ရွက်ရောင်၊ သွေးနီဥနည်း၊
292.	Lansoprazole = အူသိမ်အစပိုင်းလေနာ၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများကြောင့်ဖြစ်ရသည့်လေနာ၊ အစာလမ်းမှသွေးယို၊ 15-30-40 mg OD အစာမြိုပြွန်ရောင်၊ ရင်ဘတ်ပူ၊ အစာခြေရည်အထက်တက်၊
293.	Larpose (Lorazepam) = Adults: 1-4 mg daily in divided doses စိတ်ငြိမ်ဆေး၊ အိပ်ဆေး၊ စိုးရိမ်စိတ်များခြင်း၊ Adults: 1-2-3 mg HS; Children: 0.5-2.5 mg at 0.05 mg/kg
294.	Lasix (Furosemide or Frusemide) = ဆီးသွားစေသည့်ဆေး၊ ကိုယ်ရောင်-သွေးတိုးရောဂါဆေး၊ (20 mg BD and 40-320 mg in 2-3 doses); 40 mg OD followed by 20 mg OD; အရေးပေါ်သွေးတိုး ကျရန် = 10-80 mg IV ယုတ်တရက် အရေးပေါ်အဆုပ်ရောင်ခြင်း၊ Acute pulmonary edema IV ½ or 1 ampoule stat ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ ရေ-ဆားနည်း၊ အစာအိမ်အောင့်၊ အစားပျက်၊ အားယုတ်၊ ကြွက်သားနာ၊ ကျောက်ကပ် မကောင်းသူ၊ အသဲမကောင်းသူ၊ (ဂေါတ်)ရောဂါရှိသူ၊ (လူးပတ်စ်) ရောဂါရှိသူ၊ ဆီးချို ရှိသူတို့အား မပေးရ၊
295.	Levocetirizine (Lezen-Cold) = Antihistamine
296.	Levofloxacin: 250 mg = ဂနိုရီးယား၊ 500 mg IV OD = ရက်တို ကျောက်ကပ်ပြွန်ရောင်ခြင်း၊ 500 mg OD x5days = ရှုပ်ထွေးသော ဂနိုးရီးယား၊ 250 mg BD Orally, 500 mg IV BD x 14 days = လေပြွန် ရောင်ခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်း-ကျောက်ကပ်-အဆုပ်-ဆီးလမ်း ပိုးဝင်ခြင်းများ၊ နားပြည်ယိုခြင်း၊ တီဘီ၊ အရေပြားနာ၊ နားပြည်ယိုခြင်း၊ နူမိုးနီးယား၊ နားအပြင်ပိုင်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ Levofloxacin (0.5 g) (Levaquin) 0.5 g daily
297.	Librium (Chlordiazepoxide) 5-10 mg TDS/QID to20-25 mg QID စိတ်ငြိမ်ဆေး၊
298.	Liquid Paraffin ဝမ်းနုပ်ဆေးအဆီ၊ Adults: 7.5-15 ml; Children5to 12: 5-10 ml; Children2to 5: 2.5-5 ml HS with water and if necessary, again in the morning or as required
299.	Lithium carbonate, Valproic acid ကြောက်စိတ် bipolar disorders အတွက်ဆေး၊
300.	Logi-Cal 200 ml = ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်ဖြည့်ရန်ဆေး၊
301.	Lomefloxacin (HCl) (400 mg Daily Oral) ဆီးလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊ နာတာရှည်လေပြွန်ရောင်ခြင်း၊ ဆီးအိမ်ရောင်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း၊
302.	Lomotil = (Diphenoxylate HCl + Atropine Sulphate) အူ၏လှုပ်ရှားမှု နှေးစေရန်သည့် ဝမ်းပိတ်ဆေး၊ Adult5mg TDS; Children 0.166 mg/kg
303.	Loperamide (HCl), (Imodium) Adult =4to 16 mg 24 hourly followed by 2mg/dose after each stool upto max dose of 16mg/day; Paedriatic = (20 kg) 0.05 mg/kg QID အူ၏လှုပ်ရှားမှု နှေးစေသည့်ဝမ်းပိတ်ဆေး၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = အရေပြားနီ၊ ပျို့-အန်၊
304.	Loracarbef (0.4 mg) (Lorabid) 800 mg
305.	Lorazepam = စိတ်ပူပင်ခြင်းအတွက်ဆေး၊ (1-10 mg Daily)
306.	Lornoxicam = (NSAID)
307.	Losartan (K), Cozaar (Angiotensin II blocker) သွေတိုး၊ နှလုံးအလုပ်မလုပ်ခြင်းအတွက်ဆေး၊ 2.5 to 100 mg daily = 50 mg OD and 25-100 mg in 1-2 doses
308.	Lotrisone cream or lotion (Clotrimazole and Betamethasone) ဖန်းဂတ်စ်ရောဂါ၊ မွေးလမ်း ကြောင်း ထည့်ဆေး၊
309.	Lugol's solution (Lugol's iodine) Antiseptic and Disinfectant ပိုးသန့်ဆေး၊ 10 parts of Potassium iodide,5parts of iodine, in 85 parts of water
310.	Lysol = disinfection of floors, bathrooms, washbasins, organic waste such as sputum, faeces, urine etc. သလိပ်၊ ဝမ်း၊ ဆီး၊ စသည်တို့ စွန့်ပြစ်ခြင်းကို သန့်ရှင်းရန်။
311.	Magnesium Carbonate လေနာရောဂါအတွက်ဆေး 1,250 - 1,500 mg
312.	Magnesium hydroxide (and oxide) = အစာအိမ်အက်စစ်ဓာတ်ပျယ်ဆေး၊ ဝမ်းချုပ်လျင်လည်း ပေးနိုင်၊ 200 to 400 mg TDS
313.	Magnesium sulfate injection ဆားခါး၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သွေးဆိပ်တက်ခြင်း၊ မက်ဂနီဆီယမ် နည်းခြင်း၊ Initially 1 to2g in 25% or 50% solution is given IM. Subsequently, 1 g is given every 30 minutes 1 to5g (2 to 10 mL of 50% solution) daily in divided doses, Children = IM 20 to 40 mg per kg of body weight ina20% solution အတက်ရောဂါ-ဝက်ရူးပြန်ရောဂါကုဆေး၊ injection, 500 mg/ml in 2-ml ampoule; 500mg/ml in 10-ml ampoule;
314.	Mannitol ဆီးသွားစေသည့်ဆေး၊ = injectable solution, 10%, 20% ဦးနှောက်ထိခိုက်ပြီး ရောင်ခြင်း၊
315.	Mebendazole = Albendazole
316.	Mefenamic Acid & Diclomine HCl = (စတီရွိုက်) မပါသည့် အနာ-အကိုက်-အဖျား-အရောင် ကျဆေး၊ အစာလမ်း-ဆီးလမ်းအလုပ်ကို နှေးစေသည်၊ ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်း၊ ကလေးများ ဗိုက်နာခြင်း၊ Trauma, Rheumatic, Pyogenic Gout, Dysmenorrhea = 250-500 mg TDS/QID;
317.	Mefliam = Mefloquine 250 mg ငှက်ဖျားကာကွယ်ဆေး၊ Adults 1250 mg asasingle dose or 750 mg as one dose, thena500 mg dose 8 hours later; Children 20 to 25 mg/kg asasingle dose or two doses; Mefloquine 250 mg salt (228 mg base) stat and weekly3weeks before Malaria Prevention
318.	Meglitinides (Glinides) ဆီးချိုစားဆေး၊
319.	Menosan = သွေးဆုံးချိန် Menopause လက္ခဏာများအတွက်ဆေး၊ 1 BD x 12-18 months
320.	Meropenem (500 mg TDS IV) (30 mg/kg BD-TDS IV) ဝမ်းတွင်း-သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊ အဆုပ်ထဲ ပိုးဝင်ခြင်း၊ မျိုးပွားလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊ ဦးနှောက်မြှေးရောင်ခြင်း၊ Meropenem (Merrem IV) 50 mg/kg
321.	Metformin ဆီးချိုထိန်းဆေး၊ 500 mg BD There is no fixed dosage regimen for the management of hyperglycemia in patients with type2diabetes. The maximum recommended daily dose of metformin is 2550 mg in adults and 2000 mg in pediatric patients (10-16 years of age).
322.	Methadone မူးယစ်ဆေးပါသည့် အနာ-အကိုက်ပျောက်ဆေး၊ 20 mg QID
323.	Methotrexate ကင်ဆာအတွက်ဆေး၊ (ရူမတွိုက်) အဆစ်နာပျောက်ဆေး၊ = tablet, 2.5 mg
324.	Methscopolamine (Scopolamine) အစာအိမ်လေနာဆေး၊ တခြားဆေးများနှင့်တွဲပေးသည်။ အစာမရှိချိန်ပေးပါ။
325.	Methyl Salicylate ဆေးက wintergreen အပင်ကထုတ်ထားတဲ့ အဆီ။ Aspirin နဲ့ဆင်တဲ့ နာတာ သက်သာဆေး။ များသွားရင် မကောင်းဘူး။
326.	Methyldopa ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်သွေးတိုးခြင်း၊ 250 mg BD and 500-2000 mg in2doses ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး = ခေါင်းကိုက်၊ အားယုတ်၊ စိတ်ကျ၊ နှာခေါင်းပိတ်၊ အာခေါင်ခြောက်၊ ဝမ်းပျက်၊
327.	Metoclopramide (HCl) 10-15 mg QID အအန်ပျောက်ဆေး၊
328.	Metoprolol = 50 mg OD or 25 mg BD; 100-200 mg BD (ဘီတာ-ဘလော့ကား) နှလုံးသွေး ကြောကျဉ်းရောဂါ၊ နှလုံးခုံနှုန်းမမှန်သည့်ရောဂါ။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ။ သွေးတိုး ကျစေသည်။ (မိုင်ဂရင်း) ခေါင်းကိုက်-ခေါင်းမူးရောဂါ၊ ခြေလက်တုံအကြောက်ရောဂါ၊
329.	Metronidazole is an antiprotozoal drug also active against most anaerobic gram-negative bacilli (ie, Bacteroides, Prevotella, Fusobacterium) as well as Clostridium species but has minimal activity against many anaerobic gram-positive and microaerophilic organisms.
a.	Vaginitis caused by Trichomonas vaginalis responds to eitherasingle dose (2 g) or to 250 mg orally three times daily for 7–10 days. Bacterial vaginosis responds toasingle 2-g dose or to 500 mg twice daily for7days. Metronidazole vaginal cream (0.75%) applied twice daily for5days is also effective.
b.	In anaerobic infections, metronidazole can be given orally or intravenously, 500 mg three times daily (30 mg/kg/d). In contrast to clindamycin or second-generation cephalosporins, metronidazole is active against virtually 100% of B fragilis isolates.
c.	Metronidazole is equally as efficacious as oral vancomycin for the therapy of C difficile colitis and is the drug of choice for mild to moderate disease. A dosage of 500 mg orally three times daily is recommended. If oral medication cannot be administered, intravenous metronidazole can be tried at the same dose; however, the efficacy associated with this route is unproven and usually less effective than the oral one. Because of the emergence of vancomycin-resistant enterococci asamajor pathogen and the role of oral vancomycin in selecting for these resistant organisms, metronidazole should be used as first-line therapy for C difficile disease. While metronidazole and vancomycin are equally effective in the treatment of mild to moderate C difficile disease, oral vancomycin is superior to metronidazole in the treatment of severe disease.
d.	Preparation of the colon before bowel surgery.
e.	Therapy of brain abscess, often in combination with penicillin orathird-generation cephalosporin.
f.	In combination with clarithromycin and omeprazole for therapy of H pylori infections.
g.	Adverse effects include stomatitis, nausea, and diarrhea. Ingestion of alcohol while taking metronidazole occasionally results inadisulfiram reaction. With prolonged use at high doses, reversible peripheral neuropathy can develop. Metronidazole can decrease the metabolism of warfarin, necessitating dosage adjustment of warfarin. Metronidazole is carcinogenic in certain animal models and mutagenic for certain bacteria, but to date an increased incidence of malignancy has not been confirmed in humans. Metronidazole (Flagyl) (0.5 g) 20 mg/kg; 1500 mg
h.	Traveler's diarrhea ခရီးသွားဝမ်းလျှောခြင်း၊ Metronidazole 250 mg TDS x 5-7 days
i.	(ဂိုင်ယာဒီးယား) ပိုးဝင်၍ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ Metronidazole 750 mg TDS x 5-10 days followed by Diiodohydroxyquin 600 mg TDS x3weeks
j.	E histolytica (GE) အစာလမ်း (အူ) ရောင်ခြင်း၊ (အမီးဘား) ဝမ်းကိုက်၊ 400-800 mg TDS x 5-10 days; Children = 100-400 mg TDS
k.	Amebic liver abscess: (အမီးဘား) အသဲပြည်တည်ခြင်း၊ 500–750 mg TDS x 5–10 days. Children: 35 to 50 mg/kg/24 hours, divided into three doses, orally for 10 days.
l.	Anaerobic Bacterial Infections လေမကြိုက်သည့်ပိုး အူမကြီးရောင်ခြင်း၊ 500 mg TDS (30 mg/kg/dose) IV; Adult oral dosage is 7.5 mg/kg every six hours x7to 10 days;
m.	(ထရွိုင်ကိုမိုးနပ်စ်) နှင့် (ရိုင်ယာဒီယား) ပိုးများကြောင့် မွေးလမ်းကြောင်း-သားအိမ်ရောင်ခြင်း၊ 250-500 mg TDS;2Gm stat or 500 mg BD x7days; Metronidazole gel BD x5days
n.	PID တင်ပါးဆုံတွင်းအင်္ဂါများပိုးဝင်ခြင်း၊ 500 mg orally BD x 14 days အခြားဆေးနှင့် တွဲပေးရသည်၊
o.	(ဂိုင်ယာဒီးယား)ပိုးဝင်၍ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ 250 mg TDS x5days ကျား-မ ဆီးပြွန်ရောင်ခြင်း၊ 500 mg BD x7days
p.	(အမီးဘား) သွားဖုံးရောင်၊ 400 mg TDS x 5-7 days
q.	ဦးနှောက်ပြည်တည်ခြင်း၊ 7.5 mg/kg orally QID not to exceed4grams daily + Penicillin or (Cefixime, Cefdinir, Cefoperazone, Cefotaxime, Cefpodoxime, Ceftazidime, Ceftizoxime, Ceftriaxone)
330.	Mexiletine (HCl) 2.857-5.714 mg/kg TDS Oral နှလုံးရောဂါ (Attack, Stroke) ရခြင်း၊
331.	Micafungin (Mycamine) 100 mg
332.	Miconazole (ဖန်းဂပ်စ်)ခေါ် မှိုရောဂါလိမ်းဆေး၊ = ointment or cream, 2% (nitrate); Miconazole 2% cream or 100-200 mg suppository OD x3days မွေးလမ်းကြောင်းထဲထည့်ရန်၊ မှို Fungus အားကစားသမားခြေထောက်၊ ပွေး Ringworm အတွက်ဆေး။
333.	Mifeprex = RU 486 = Mifepristone Tablets, 200 mg သည် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ဆေးဖြစ်သည်။ ကိုယ်ဝန်တည်စေရန် လိုအပ်သည့် progesterone ဟော်မုန်းအား တားဆီးသည်။ Mifepristone ကို တခါတည်း သောက်ရသည်။ ၄၉ ရက် အထိရှိနေသည့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ရန်အတွက် သုံးသည်။ Day One: Mifeprex 200 mg3tablets (600 mg)asingle oral dose Day Three: Misoprostol 200 μg2tablets (400 μg) orally Day 14: Post-Treatment Examination
334.	Migarid Tablets = မိုင်ဂရင်းအမူးရောဂါ၊ 5-10 mg daily for adults5mg daily for children အခြား အမူးရောဂါ၊ = 10 mg/day in adults and5mg/day in children အတက်ရောဂါ၊ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ၊ =5to 20 mg/day in adults and5to 10 mg/day in children
335.	Milk of magnesia = Magnesium hydroxide အစာအိမ်အက်စစ်ဓာတ်ပျယ်ဆေး၊ Adults & children over 12 years = 7.5-15 ml, Children =2to5ml ဝမ်းပျော့ဆေး၊ လိပ်ခေါင်း၊
336.	Minocycline: Adult 100 mg PO/IV q12-24h; Pediatric 2-4 mg/kg/d divided bid အရေပြားနာ၊ အနာဒဏ်ရာများ၊ နှလုံးအတွင်းသားရောင်ခြင်း၊ နူမိုးနီးယား၊ အရိုးအတွင်းရောင်ခြင်း၊ အစာဆိပ်သင့်ခြင်း၊ သွားအတု-အရိုးတု စသည်တို့ ရောင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းရောင်ခြင်း၊
337.	Mipramine (Tofranil) 150-200 mg (max 300 mg) စိတ်ကျရောဂါ၊ Depression and Mania
338.	Misoprostol သည် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ဆေးဖြစ်သည်။
a.	Missed abortion (0-12 weeks) = Misoprostol 800mcg vaginal 3-hrly or sublingual 600mcg 3-hourly
b.	Incomplete abortion (0-12 weeks) = Misoprostol 600mcg orally single dose
c.	Induce abortion (13-22 weeks) = = Misoprostol 400mcg vaginally 3-hrly x 5
d.	Intrauterine fetal death = 13-17 wks: 200mcg pv 6-hrly; 18-26 wks: 100mcg pv 6-hrly; 27+ wks: 25-50mcg pv 4-hrly
e.	Induction of labor = 25mcg vaginally 4-hrly or 50 mcg orally 4-hrly PPH prophylaxis = 600mcg orally or sublingually stat
339.	Morphine (မော်ဖိန်း) ပြင်းထံသောအနာ-အကိုက်ပျောက်ဆေး၊ 5-15 mg4hourly IM နှလုံးရောဂါ (Attack, Stroke) ရခြင်း၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ ဝမ်းချုပ်၊ မူး၊ ဆေးစွဲ၊
340.	Moxifloxacin လူစုလူဝေးမှရသော နူမိုးနီးယား၊ 400 mg OD x 10-14 days Moxifloxacin (0.4 g) (Avelox) 400 mg
341.	Muscle relaxants = Carisoprodol (Soma) 250 mg to 350 mg TDS and HS, Chlorzoxazone (Parafon Forte DSC) 500 mg TDS/QID, Cyclobenzaprine (Flexeril)5mg TDS, Methocarbamol (Robaxin) 500 mg3QID and2QID ကြွက်သားပြော့ဆေး၊ အနာသက်သာစေရန်ပေးသည်။
342.	Nafcillin အရိုးတွင်း ပြည်တည်ခြင်း၊ အရေပြားနာ၊ အနာဒဏ်ရာများ၊ နှလုံးအတွင်းသားရောင်ခြင်း၊ နူမိုးနီးယား၊ အရိုးအတွင်းရောင်ခြင်း၊ အစာဆိပ်သင့်ခြင်း၊ သွားအတု-အရိုးတု ရောင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းရောင်ခြင်း၊ Adult 1-2 g IV q4h; Pediatric 100-200 mg/kg/d IV divided q4h; Nafcillin 100 mg/kg
343.	Natrilix = Indapamide = 2.5 mg OD သွေးတိုးကျဆေး၊
344.	Nefzodone 300-600 mg (max 600 mg) စိတ်ကျရောဂါ၊
345.	NeoMercazole tablets (Carbimazole) = Anti-thyroid substance 10 mg to 60 mg daily according to the severity of the disorder လည်ပင်းကြီးဟော်မုန်း များသည့် ရောဂါအတွက်ဆေး
346.	Neomycin (Sulphate) အစာလမ်းကြောင်းအားပိုးသန့်စေရန်၊ အသဲကြောင့် ဦးနှောက်ထိခိုက်ခြင်း၊ = 1 Gm QID x 1-2 days အနာဒဏ်ရာများ၊ ဆီးအိမ်ရောင်ခြင်း၊ အရေပြားအနာများ၊ အသဲအလုပ်မလုပ်၍ သတိမေ့ခြင်း၊ (ကိုလက်စတီရော) များခြင်း၊ 4-12 gm Daily Orally Neomycin + Erythromycin 1 Gm Orally ခွဲစိတ်လူနာများအား ရောဂါပိုးမဝင်စေရန် ကြိုတင်ပေးပါ၊ Neomycin sulfate + Bacitracin (အင်ဖက်ရှင်) အတွက်လိမ်းဆေး၊ = Ointment,5mg; Neomycin sulfate + 500 IU Bacitracin; (0.5% Topical) ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၊ နား-ကျောက်ကပ်တို့အား ထိခိုက်စေသည်။
347.	Netilmicin Sulphate (3-4 mg/kg IV/IM TDS) (2.142 mg/kg BD IM/IV) နောက်ကျသော ရင်သားကင်ဆာ၊ ဗက်တီးရီးယားဝင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်းရောင်ခြင်း၊ ဂနိုးရီးယား၊ နှလုံးအလုပ်မလုပ်တော့ခြင်း၊ သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်စဉ် (အင်ဖက်ရှင်)ဝင်ခြင်း၊ အဆစ်ထဲပိုးဝင်ခြင်း၊
348.	Neurobion (Vitamin B1 100 mg + Vitamin B6 200 mg + Vitamin B12 200 micrograms)
349.	Niclosamide အူနေသန်ကောင်များ၊ = chewable tablet, 500 mg;
350.	Nimesulide = NSAID (စတီရွိုက်) မပါသော အနာ-အဖျား-အရောင်ကျဆေး၊ Adults: 100 mg BD Children: 5mg/kg of body weight in2or3divided doses
351.	Nitrazepam (Valium) = အတက်ရောဂါများ၊ မေးခိုင်၊ ဝက်ရူးပြန်၊ အအိပ်ပျက်ခြင်း၊
352.	Nitrofurantoin = (0.714 – 1.428 mg/kg QID) 100 mg BD-QID PC x7days ဆီးအောင့်ခြင်း၊ ဆီးကြိတ်ရောင်ခြင်း၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ မူးဝေ၊ ခေါင်းကိုက်၊ ဝမ်းပျက်၊ ကိုယ်ပူ၊ အသားဝါ၊
353.	Nizatidine = အူသိမ်အစပိုင်းရှိ လေနာဆေး၊ 150 mg OD or BD
354.	Nocold (5 ml = Phenylpropanolamine HCl 12.5 mg, Chlorpheniramine maleate2mg) Adults: 1 to2teaspoonfuls 3-4 times/day; Children: 6-12 years – ½ to 1 teaspoonful 3-4 times/day အအေးမိ၊ နှာစေး၊
355.	Norbactin, Norflox, Normax Eye drops မျက်စိနာ၊ မျက်ကြည်လွှာရောင်၊
356.	Norethisterone (Acetate, Heptanoate) ရာသီဆင်းများခြင်း၊ ရာသီလာစဉ်နာခြင်း၊ 2.5 to 10 mg
357.	Norfloxacin, Norflox, Noroxin ပဋိဇီဝဆေး၊ အစာမစားမီ ၁ နာရီ၊ စားပြီး ၂ နာရီ ခြားပေးပါ၊ အက်စစ် ဓာတ်ပျယ်ဆေးနှင့် တွဲမပေးရ၊ ရေ-အရည်များများ သောက်ရမည်၊ Norfloxacin 400 mg BD Traveler's diarrhea ခရီးသွားဝမ်းလျှော၊ ဆီးလမ်းပိုးဝင်၊ ဆီးပြွန်ရောင်၊ သားအိမ်အဝရောင်ခြင်း၊ နာတာရှည် ကျားဆီးကြိတ် ရောင်ခြင်း၊ အူရောင်ခြင်း၊ 400 mg BD သားအိမ်အဝရောင်ခြင်း၊ = 800 mg stat ဆီးကြိတ် နာတာရှည်ရောင်၊ ဂနိုရီးယားကြောင့် ဆီးပြွန်အဝရောင်ခြင်း၊ 400 mg BD x 3-21 days ရုတ်တရက် အူရောင်ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ = 400 mg BD x5days ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ ဗိုက်နာ၊ အရေပြားနီ၊ စိတ်ကျ၊ စိုးရိမ်၊
358.	Novalgin (Analgin) = Dipyrone = NSAID (စတီရွိုက်) မပါသော အနာ-အဖျား-အရောင် ကျဆေး 500-1000 mg QID
359.	Nystatin (ဖန်းဂပ်စ်) ခေါ် မှို ရောဂါ၊ မှက်ခရု ခေါ် ကလေးလျှာနာခြင်း၊ မွေးလမ်းကြောင်းမှို၊ Nystatin 5-10 lac IU 3-4 times daily မွွေးလမ်းထဲထည့်ရန်ဆေး၊ Nystatin 100,000 units vaginal tablets x 14 days မွေးလမ်းကြောင်း-သားအိမ်ရောင်ခြင်း၊ Nystatin Oral Suspension Children and Adults: 4-6 mL (400,000 to 600,000 units) QID For oral candidiasis, 500,000 units of suspension repeated four timesaday for at least2days after resolution of the infection. Infections of skin are treated with cream or ointment, 100,000 units applied to the affected area twice daily until resolution of the infection.
360.	Ofloxacin (ကွီနိုလုံး အုပ်စု) ပဋိဇီဝဆေး၊ Ofloxacin (0.4 g) (Floxin) 400 mg twice daily 300-400 mg BD Oral/IV or 400 mg OD in the morning အသက်ရှူလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊ နူမိုးနီးယား၊ အရေပြားနာ၊ တင်ပါးဆုံရိုးတွင်းအင်္ဂါများ ရောင်ခြင်း၊ လိင်မှတဆင့် ကူးစက်ရောဂါများ၊ ကျားဆီးကြိတ် ရောင်၊ လေပြွန်ရောင်၊ ဆီးလမ်းပိုးဝင်၊ သံဓာတ်နည်း သွေးအားနည်းရောဂါ၊ အနာ-အကိုက်ပျောက်ဆေး ကြောင့်ဖြစ်သည့် အစာအိမ်နာ၊ ဆီချိုနာ၊ သွေးထဲပိုးဝင်၊ ဗက်တီးရီးယားကြောင့် ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ တိုက်ဖွိုက်၊ နားပြည်ယို၊ သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊ 400 mg stat လိင်မှတဆင့် ကူးစက်ရောဂါများ၊ သာမန်ဂနိုးရီးယား၊ တင်ပါးဆုံရိုးတွင်း အင်္ဂါများ ရောင်ခြင်း၊ ကျားဆီးအကြိတ်ရောင်ခြင်း၊ 200-300 mg BD x 21 days (300-400 mg BD Oral/IV) ရုတ်တရက် ကျောက်ကပ်ပြွန် ရောင်ခြင်း၊ 200 mg BD x 1-3 days ရက်တို ဆီးအိမ်ရောင်ခြင်း၊ ဆီးကြိတ်ရောင်ခြင်း၊ 200-400 mg BD Orally x 1-3 months နာတာရှည် ဆီးကြိတ်ရောင်ခြင်း၊ 300 mg BD x7days သားအိမ်ဝရောင်ခြင်း၊ ဆီးသွားပြွန်ရောင်ခြင်း၊ 400 mg BD x 14 days + Clindamycin 450 mg orally QID x 14 days or Metronidazole 500 mg BD x 14 days တင်ပါးဆုံရိုးတွင်း အင်္ဂါများ ရောင်ခြင်း၊ 400 mg BD ပိုးကြောင့် ဝမ်းလျှောခြင်း၊ 400 mg stat followed by Doxycycline 100 mg BD x 10 days ကျား အကြောရောင်၊ (0.3% QID Eye) မျက်စိအကြည်လွှာ ရောင်ခြင်း၊ မျက်စိပိုးဝင်ခြင်း၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ အစာအိမ်အောင့်၊ အနီပြင်ထွက်၊ ကြွက်သားနာ၊
361.	Omeprazole or Rabeprazole = Proton pump inhibitor အစာမြိုပြွန်ရောင်၊ ရင်ဘတ်ပူ၊ အစာခြေရည် အထက်တက်ခြင်း၊ DU အနာ၊ အစာလမ်းမှ သွေးယိုခြင်း၊ 20 mg OD for 4-8 weeks, in sever cases increase to 40 mg OD; အချို့အစာအိမ်နာအတွက် Amoxicillin, Clarithromycin နှင့် တွဲပေးရသည်။ ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ ဝမ်းမမှန်၊ အနီပြင်ထွက်၊ ခေါင်းကိုက်၊ လေတက်၊ အအိပ်ပျက်၊
362.	Omnacortil = Prednisolone
363.	Otrivin Nasal Drop = Desloratadine = (အလာဂျိီ) ကြောင့်ဖြစ်သည့် နှာခေါင်းပိတ်ခြင်း၊
364.	Oxacillin 9-12 Gm/day in6divided doses အရိုးတွင်းပြည်တည်ခြင်း၊
365.	Oxytocin, Pitocin, Syntocinon သားအိမ်ညှစ်အားပေးသည့် ထိုးဆေး၊
366.	Paludrine (Proguanil HCl) (Avloclor)5mg/kg Daily ငှက်ဖျားဆေး၊
367.	Pantoprazole or Esomeprazole, Lansoprazole, Omeprazole, Rabeprazole အစာအိမ်မှ အက်စစ်ဓာတ်ထွက် နည်းစေသည့်ဆေး၊ ဆိုးဝါးသော အစာမြိုပြွန်ရောင်-ရင်ဘတ်ပူ-အစာခြေရည်အထက် တက်ခြင်း၊ လူကြီး 40 mg OD or BD for 4-8 weeks
368.	Paracetamol, Acetaminophen, Crocin, Paracin = NSAID (စတီရွိုက်) မပါသော အနာ-အဖျား ကျဆေး၊ အစာအိမ်နာ ရှိသူများအတွက် စိတ်ချရသည်၊ Adult 500 mg QID; Children 12 mg/kg QID ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ ဗိုက်အောင့်၊ အနီပြင်ထွက်၊ သရက်ရွက်ကြီး၊
369.	Paromomycin 25-30 mg/kg (max.3Gm) in divided doses x7days အမီးဘားဝမ်းကိုက်၊
370.	Paroxetine 20-30 mg (max 50 mg) စိတ်ကျရောဂါ၊
371.	PAS P-aminosalicylic tablet, 500 mg; granules,4g in sachet တီဘီဆေး၊
372.	Paspertin (Metoclopramide Hydrochloride Drops) ပျို့-အန် သက်သာဆေး။
373.	Penicillamine = (ရူမတွိုက်) အဆစ်နာအတွက်ဆေး၊ 250-500 mg daily;5mg/kg TDS
374.	Penicillins ပနယ်စလင်များ။ (Benzylpenicillin Na or K injection, Penicillin G Procaine injection) Penicillin V, Phenoxymethyl Penicillin Potassium, Penicillin VK
a.	ဖြစ်ခါစ ဆစ်ဖလစ် ရောဂါ၊ Penicillin G 1.2 million units IV QID + Metronidazole 500 mg IV or Orally
b.	နူမိုးနီးယား၊ Penicillin G 10 million units IV daily x5days
c.	သာမန်မဟုတ်သော ဂနိုးရီးယား၊ Penicillin G2million units4hourly IV
d.	ဒေါင့်သန်းနာ၊ Anthrax Penicillin G2Million units every3hours IV
e.	(ဂက်စ်-ဂင်ဂရင်း) ခေါ် အနာပုတ်ခြင်း၊ Penicillin G2million units IV every4hours followed by Amoxacillin 500 mg TDS Orally
f.	အဆုပ်ရောင်ခြင်း၊ Penicillin G4million units IV every4hours or Penicillin G2million units every2hours IV + Metronidazole 750 mg IV every6hours (or) + Chloramphenicol 1-2 Gm IV every6hours x 6-8 weeks plus Dexamethasone 4-25 mg QID
g.	ဦးနှောက်ပြည်တည်နာ၊ Penicillin G 85.71 to 171.42 mg IV/IM Daily; 37.5 mg/kg IV/IM QID
h.	မင်နင်ဂျိုက်တစ်၊ နူမိုးနီးယား၊ ပြည်တည်နာ၊ နားကိုက်၊ လေးဘက်နာ၊ အရေပြားအနာ၊ (ရူမက်တစ်) အဖျား၊ လည်ချောင်းနာ၊ နားပြည်ယိုခြင်း၊ ဆုံဆို့နာ၊ အာသီးရောင်၊ ဆစ်ဖလစ်၊ ဂနိုရီးယား၊ နှလုံး အတွင်းသားရောင်ခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ အရိုး-အဆစ် ပိုးဝင်ခြင်း၊ ဦးနှောက်မြှေးရောင်ခြင်း၊ သွားဖုံးနာ၊ အာသီးရောင်၊ 250-500 mg TDS/QID x 10-14 days; (12.5 mg/kg QID)
i.	မကောင်းသောသတ္တိများ။ အသက်သေစေနိုင်သည်အထိ ဆိုးသည့် ဆေးမတည့် ဖြစ်ခြင်း၊
375.	Pepcid = histamine-2 blockers အစာအိမ်မှထွက်သော အက်စစ်ဓာတ်နည်းစေသည့်ဆေး၊ Adults 20-40 mg BD for up to6weeks; Children 1 to 16 0.5 mg/kg BD, up toamaximum of 40 mg BD
376.	Permethrin cream 5% for scabies ဝဲဆေး။ 1% = သန်းပျောက်ဆေး၊
377.	Phenergan (Promethazine), Avomine အအန်-ကားမူး၊ အယား-အလာဂျီ သက်သာဆေး၊ 10 -25 mg4hourly; 0.75 mg/kg BD
378.	Pheniramine Maleate, Avil (Aventis) (အင်တီ-ဟစ်တမင်း) ဆေး၊ အအေးမိ၊ အလာဂျီ၊ နှာစေး၊ ယားခြင်း၊ နှင်းကူနာ၊ Vertigo အမူးရောဂါတမျိုး၊ 0.75mg/kg TDS; 15-30-50 mg OD/BD/TDS ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး = အိပ်ချင်း၊ မူး၊ ဗိုက်နာ၊
379.	Phenobarbitone, Phenobarbital အတက်ရောဂါ-ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ၊ အိပ်ဆေး၊ 60-180 mg daily
380.	Phenol (carbolic acid) သည် germicidal ဖြစ်သည်။ ကြမ်းပြင်၊ ဆေးခန်းသုံးပစ္စည်းများ သန့်ရန်၊ ဖန်းဂတ်စ်ပိုးများကို နိုင်သည့်ဆေး၊ ပြင်းပါက လောင်တတ်သည်။
381.	Phenylbutazone အနာ-အကိုက်သက်သာဆေး၊ ဂေါက်-ကင်ဆာဖြစ်ပြီးနာ၊ 100-200 mg TDS
382.	Phenytoin 200-400 mg , Carbamazepine 600-1200 mg, Phenobarbital 100-200 mg အတက်ရောဂါ၊ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ၊ အတက်ရောဂါ-ဝက်ရူးပြန်ရောဂါကုဆေး၊ Dilantin, Epilentin, Eptoin
383.	Pilex Ointment & Tablet 30 mg = လိပ်ခေါင်းအတွက်စားဆေး၊ ထည့်ဆေး၊
384.	Pilocarpine (eye drops), 2%, 4% 1 drop 3-4 times daily ရေတိမ်ရောဂါအတွက်မျက်စဉ်း၊
385.	Piperacillin (Na): (4.0 mg QID IV) (50 mg/kg QID IV) နှလုံးအတွင်းသားရောင်ခြင်း၊ လေးဘက်နာ၊ အာသီးရောင်၊ နားပြည်ယိုခြင်း၊ ဂနိုးရီးယား၊ အသက်ရှူလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊ အရိုး-အဆစ် ပိုးဝင်ခြင်း၊ ဦးနှောက်မြှေးရောင်ခြင်း၊ ဆစ်ဖလစ်၊ Piperacillin plus tazobactam (Zosyn) 3.75 g q6–8h
386.	Piperacillin-Tazobactam 4-5 Gm IV QID ခွဲစိတ်ပြီးနောက်ဖြစ်သည့် နူမိုးနီးယား၊
387.	Piperazine 3.5 Gm x 2-4 days သန်လုံးကောင်၊ Ascariasis
388.	Polybion (B complex) ဗီတာမင် ဘီ-စီ ပါသည့် စားဆေး၊ ထိုးဆေး၊ သောက်ဆေး၊
389.	Potassium Citrate (Potrate 5) = Renal Tubular Acidosis ခေါ် ဆီး အက်စစ်ဓာတ်များနေခြင်း အတွက်ပေးသည်။ ဆေးပြာကို ဝါးခြေမစားရ။ (20 mEq three times/day or 10-15-30 mEq 3-4 times/day with meals or within 30 minutes after meals or bedtime snack)
390.	Potassium permanganate Disinfectant ရေသန့်၊ အမှိုက်ပုံ၊ ရေကူးကန်၊ ခြေ-လက်၊ ပိုးသန့်ရန်၊ (အင်ဖက်ရှင်) အတွက် လိမ်းဆေး။
391.	Povidone Iodine Antiseptic Cream, Solution, Ointment အနာဆေးထည့်ရာတွင်သုံးသည့် ပိုးသတ်ဆေးရည်။ Bacteria, Yeasts, Molds, Fungi, Viruses, Protozoans တွေကို နိုင်တယ်။ Povidone (9.0% to 12.0% iodine) ပေါ်လာမှ တကယ် အသုံးဝင်လာခဲ့တယ်။ အနာထဲဝင်လည်း ရတယ်။
392.	Powergyl (Metronidazole 200 mg + Norfloxacin 200 mg) = ဝမ်းကိုက်-ဝမ်းပျက်၊ Adults: 1-2 tablets TDS; Children: 5ml (Norfloxacin 100 mg + Metronidazole 100 mg) BD; not for infants
393.	Prednisolone (ကော်တီကိုစတီရွိုတ်) အရောင်လျှော့စေသည်၊ နီခြင်းကိုသက်သာစေသည်။ (အလာဂျီ) ဖြစ်ခြင်းကို သက်သာစေသည်၊ ရောဂါလက္ခဏာကို သက်သာစေသည်၊ = 5-60 mg Daily Orally as single dose or double dose on alternate days or 5-60 mg Daily Prednisolone 40 mg/day + Amoxacillin 250 mg TDS x7days နားအရည်ယိုခြင်း၊ Prednisolone 40-60 mg Orally daily with tapering over2weeks ရက်တို ရူမက်တစ်အဖျား၊ Prednisolone 60-80 mg daily in divided doses x 4-5 days followed by tapering of dose x next 7-10 days မျက်နှာတခြမ်း လေဖြတ်ခြင်း၊ Bell’s Palsy ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ကိုယ်ရောင်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ မပေးသင့်၊ ကလေးငယ်များ မပေးသင့်၊
394.	Pre-Hist-D Tablets အအေးမိ၊ နှာစေး၊ အယားသက်သာဆေး၊
395.	Primaquine 26.3 mg salt (15 mg base) OD x 14 days only after returning home iSufzsm;/ Malaria Prevention; Primaquine, Primacip, Rimacip (ဗိုင်းဗက်စ်) ငှက်ဖျားပျောက်ဆေး၊ 7.5 mg BD x 14 days Children over 1 yr; 0.25 mg/kg x 14 days ငှက်ဖျားကာကွယ်ဆေး၊ 15 mg/day during the last2weeks of Chloroquine prophylaxis ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ အနီပြင်ထွက်၊ အားယုတ်၊ ဗိုက်နာ၊
396.	Procainamide: Adult = 100 mg/ml in 10-ml ampoule; tablet 500 mg QID Orally; Children = 0.5 mg/kg/hr IV; 8 mg/kg QID Orally သွေးခုန်နှုန်း မမှန်ခြင်းအတွက် ထိုးဆေး-စားဆေး၊
397.	Procaine Benzylpenicillin, Penicillin G (ဘီတာလက်တင်) အုပ်စုဝင် ပဋိဇီဝ ထိုးဆေး၊ Procaine Penicillin 2.4 million units IM OD + Probenacid 500 mg QID x 10-14 days အာရုံကြော ဆစ်ဖလစ်၊ Procaine penicillin 2-4 million units IM 10-14 days ဆစ်ဖလစ် ပဌမဆင့်၊ Procaine Penicillin Inj. 600,000 units IM x 5-10 days အာသီးရောင်၊ လည်ချောင်းနာ၊
398.	Proguanil (Tablet 100 Mg for only in combination with Chloroquine) ငှက်ဖျားဆေး၊
399.	Promethazine (HCl) (အင်တီဟစ်တမင်း) ဆေး၊ အအန်-အယားသက်သာ၊ အင်းဆက် ကိုက်ခြင်း။ ခရီးသွားစဉ်ခေါင်းမူး၊ 10 -25 mg4hourly; 0.75 mg/kg BD ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = မူးဝေ။ စိတ်လှုပ်ရှား၊ ဗိုက်နာ၊ အာခြောက်၊ မျက်စိအားနည်း၊ ရင်တုံ၊
400.	Propranolol = Inderal, Betabloc Forte, Betacap, Ciplar, Manprolol (ဘီတာ-ဘလော့ကား) Adrinaline ကို တားဆီးမှုလုပ်သည့်အုပ်စုဆေး၊ သွေးတိုး၊ လည်ပင်ကြီးဟော်မုန်းများခြင်း၊ နှလုံးခုန် မမှန်ခြင်း၊ စိတ်ပူပန်ခြင်း၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါ၊ (မိုင်ဂရင်း) အမူးရောဂါ၊ အကြောက်ရောဂါ၊
a.	Hypertension သွေးတိုး 40 mg BD လိုအပ်လျင် တိုးပေးပါ။ 120 mg to 240 mg per day နှင့် ထိန်းထားပါ။ တချို့က 640 mg အထိ လိုတတ်သည်။
b.	Angina pecetoris ခေါ် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ 80 mg to 320 mg BD/TDS/QID,
d.	Cardiac arrhythmias, Tachycardias နှလုံးခုံနှုန်းမြန်-မမှန်သည့်ရောဂါ 10 mg to 30 mg TDS/QID before meals and HS
e.	Migraine (မိုင်ဂရင်း) ခေါင်းကိုက်-ခေါင်းမူးရောဂါ၊ 80-160-240 mg daily in divided doses
f.	Stage fright (Social phobia) ခြေလက်တုံ အကြောက်ရောဂါ၊ 40 mg BD/TDS လိုအပ်လျင် 240 mg to 320 mg per day
g.	ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = သွေးဖိအားကျ၊ နှလုံးခုန်နှေး၊ လက်ဖျားအေးစက်၊ အိပ်မပျော်၊ အားယုတ်၊ စိတ်ကျ၊ အန်-ပျို့၊ ဝမ်းချုပ်၊
401.	Proxyvon, Spazmo-proxyvon အနာသက်သာစေသည်အပြင်းစားဆေး၊ အအန်သက်သာစေသည်၊ 0.930 to 1.430 mg/kg4hourly
402.	Pseudoephedrine 30-120 mg + Nasal Oxymetazoline 0.5% ရက်တို ဆိုင်းနက်စ်၊
403.	Pyrazinamide တီဘီဆေး၊ တခြားဆေးနှင့်တွဲပေးရသည်၊ 15-30 mg/kg/day Maximum 2.5 Gm/dose တီဘီကုသရန် ပဌမ ၂ လအတွင်း ပေးသည်။ (လူကီးမီးယား) ခေါ် သွေးအားနည်း ရောဂါ၊ ဆီးလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊
404.	Quinidine သွေးခုန်နှုန်း မမှန်ခြင်းအတွက်၊ 200 mg (sulfate) ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ခေါင်းကိုက်၊ ဝမ်းပျက်၊ အရေပြားနီ၊ စိတ်ရူတ်၊
405.	Quinine ငှက်ဖျား အပြင်းစားများအား ကုသခြင်း၊ အရေးပေါ်ဖြစ်သည်။
a.	ကလိုရိုကွင်းပြီးသော ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိသည့် ငှက်ဖျား = Quinine sulfate 600-650 mg PO x 5-7 days (Children = 8-10 mg/kg PO TDS x 5-7 days) + Doxycycline 100 mg PO BD x7days
b.	ကလိုရိုကွင်းပြီးသော ရှုပ်ထွေးသည့် ငှက်ဖျား = အမြန်နုန်းထိန်းသည့် Quinine Glucose IV drip 10 mg/kg load over2hours, then 0.02 mg/kg/min continous till patient can take orally + Doxycycline 100 mg IV BD သွင်းမရမှသာ IM ထိုးရမည်။ ပဌမအကြိမ်ကို 10 mg/kg ပေါင်တဖက်စီ ခွဲ ထိုးပေးနိုင်သည်။ Quinine 300 mg/ml IM ထိုးဆေးသည် နာလွန်းသဖြင့် မိုးရေဖြင့် ရောကာ 60–100 mg/ml အားပြော့စေပြီးမှ ထိုးသင့်သည်။ လူနာခံနိုင်၊ သောက်နိုင်လာသည်နှင့် ပါးစပ်ကတိုက်နည်း သို့ ပြောင်းပါ။ အစာနှင့်တွဲပေးပါ၊
c.	ညအခါ ကြွက်သားနာခြင်း အတွက်လည်း ပေးနိုင်။
d.	ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ အစာအိမ်အောင့်၊ အရေပြားနီ၊ မူးဝေ၊ မျက်စိအားနည်း၊ သွေးဖိအားကျ၊
406.	Ramipril (Ramistar 5) = (ACE) inhibitor သွေးတိုးကျဆေး၊ 2.5 mg OD and 2.5-20 mg in 1-2 doses. Cardiac Failure နှလုံးအလုပ်မလုပ်တော့ခြင်း၊ 1.25mg-2.5mg OD; Maximum 10mg/day
407.	Ranitidine and Nizatidine သည် Histamine-2 blockers ဆေးအုပ်စုဝင်ဖြစ်သည်။ အစာအိမ်မှ အက်စစ်ဓာတ်ထွက်နည်းစေသည်။ စိတ်-အလုပ်ရှုပ်၍ အစာအိမ်ရောင်ခြင်း၊ အစာမြိုပြွန်ရောင် ရင်ဘတ်ပူ၊ အစာခြေရည် အထက်တက်ခြင်း အပြော့စား နှင့် အသင့်အတင့်ဆိုးခြင်း၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများကြောင့် ဖြစ်သည့်လေနာ၊ Adult Dosage = 150 mg, OD/BD/TDS/QID Orally, IM, IV; Paedriatic dosage (20 kg) = 0.75 mg/kg QID IM 150 mg. TDS PO/IM/IV
408.	Rennie =2TDS/QID အက်စစ်ဓာတ်ပျယ်ဆေး၊
409.	Reserpine 0.05 mg OD and 0.05-0.25 mg QID သွေးတိုးကျဆေး၊
410.	Rifampicin, Rifacon, Rifacilin, Rifamycin, Rimactane တီဘီဆေး၊ Ethambutol, Isoniazide, Streptomycin တခုခုနှင့် တွဲပေးရသည်။ လက်ပရိုစီ၊ သံဓာတ်နည်း သွေးအားနည်းရောဂါ၊ ဂနိုးရီးယား၊ ဦးနှောက် မြှေးရောင်၊ ဝက်ရူးပြန်၊ ဆီးလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊ နှလုံးအတွင်းလွှာရောင်၊ Rifampin 600 mg BD x2days (adults) or 10 mg/kg BD (children) ကိုယ်ဝန်မပေးရ။ အစာမစားမီးပေးပါ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = အရေပြားနီ၊ ပျို့၊ အန်၊ ဝမ်းပျက်၊ ဆီး-အရေပြား-ချွေးနီခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်၊ Take this medicine on an empty stomach, either 1 hour before or2hours after food. For daily use: 150 mg INH + 300 mg Rifampicin; 75 mg INH + 150 mg Rifampicin; For paediatric use: 30 mg INH + 60 mg Rifampicin; For intermittent use (3 times weekly): 150 mg INH + 150 mg Rifampicin; For paediatric use: 60 mg INH + 60 mg Rifampicin; Rifampin 300 mg BD ထပ်ဖြစ်သော အရိုးအတွင်းပြည်တည်ခြင်း၊ Rifampin, INH, Pyrazinamide + Dexamethasone 0.15 mg/kg QID x 1-2 weeks တီဘီကြောင့် ဦးနှောက်မြှေးရောင်ခြင်း၊
411.	Salbutamol = Albuterol (Ventolin) ပန်းနာနှင့် အသက်ရှူလမ်းပိတ် ရောဂါဆေး၊ ရှူဆေး-သောက်ဆေး၊ 2-4 mg TDS/QID ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ခေါင်းကိုက်၊ လက်တုံ၊ နှလုံးခုန်မြန်၊
412.	Salicylic acid ဝက်ခြံ၊ အရေပြားနာ၊ မှက်ခရုနာ၊ လိမ်းဆေး၊ အနာသက်သာစေသည်။
413.	Savlon = Antispetic Liqud, Cream ပိုးသန့်ဆေး၊
414.	Scabine, Scabecide, Ascabiol သန်း-ဝဲ ပျောက်ဆေး၊
415.	Selenium sulfide (ဖန်းဂပ်စ်)ခေါ် မှိုရောဂါလိမ်းဆေး၊ = deterent-based suspension 2%
416.	Senna = ပွေးကိုင်းဝမ်းနုတ်ဆေး၊ ညမအိပ်မီ လူကြီး ၂ ပြား၊
417.	Sensorcaine, Bupivan (Bupivacaine) ခါးထဲထိုးရသည့်ထုံဆေး၊ Epidural 0.25%, 0.5% and 0.75% (non-Obstetrical); Most experience to date is with single doses of Sensorcaine up to 225 mg with Epinephrine 1:200,000 and 175 mg without Epinephrine
418.	Septrin = (Trimethoprim 160 mg and Sulfamethoxazole 800 mg) = (TMP-SMZ) ၂ နှစ် အောက်ကလေး မပေးသင့်၊
a.	(TMP-SMZ) 160/800 mg stat ရက်တို ဆီးအိမ်-ဆီးကြိတ်ရောင်ခြင်း၊
b.	(TMP-SMZ) 160/800 mg BD x 21 days ရက်တို ကျောက်ကပ်ပြွန်ရောင်ခြင်း၊
c.	(TMP-SMZ) 160/800 mg BD x 1-3 months နာတာရှည် ကျားဆီးကြိတ် ရောင်ခြင်း၊
d.	(TMP-SMZ) 160/800 mg BD x 10 days ရက်တို ဆိုင်းနပ်စ်၊ ရက်တို နားကိုက်ခြင်း၊
e.	(TMP-SMZ) 160/800 mg BD x 7-10 days x 7-10 days ရှီဂဲလား ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊
f.	(TMP-SMZ) double strength BD x5days (ဆာလ်မိုနည်းလား) ဝမ်းပျက်ခြင်း၊
g.	(TMP-SMZ) 160/800 mg BD ပိုးကြောင့်ဝမ်းလျှောခြင်း၊
419.	Sertraline 50-200 mg ခေါင်းကိုက်ခြင်းအမျိုးမျိုး၊
420.	Sibutramine ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆေး၊ ပိန်ဆေး။
421.	Silver sulfadiazine (အင်ဖက်ရှင်) အတွက်လိမ်းဆေး၊ = cream, 1%, in 500-g container; မီးလောင်နာဆေး၊ (ဗက်တီးရီးယား) နဲ့ (ရိစ်) တွေကို သတ်နိုင်တယ်။ အနာကျက်တာ ကြာလို့ သိပ်မသုံးချင်ကြတော့ဘူး။
422.	Singulair ပန်းနာ နှင့် အလာဂျိ အတွက်ဆေး၊ လူကြီး 10 mgaday
423.	Sodium Nitroprusside 20-400 ug/min IV Infusion နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုးကျဆေး၊
424.	Sodium thiosulfate (ဖန်းဂပ်စ်)ခေါ် မှိုရောဂါလိမ်းဆေး၊ 15%;
425.	Spasmocip Capsules (Paracetamol 325 mg and Dextropropoxyphene 65 mg) 1 capsule 2-3 times daily ဖျား-နာခြင်း၊ အစာလမ်း-ဆီးလမ်း-မွေးလမ်း-သည်းခြေလမ်းနာခြင်း၊ ရာသီလာစဉ် နာခြင်း။
426.	Spasmonil (Dicyclomine 10-20-40 mg, Paracetamol 500 mg) 3-4 times daily အစာလမ်း-ဆီးလမ်း-မွေးလမ်း-သည်းခြေလမ်းနာခြင်း၊ ရာသီလာစဉ်နာခြင်း၊ ၆ လအောက် မပေးရ။
427.	Spasmo-Proxyvon = Dicyclomine (HCl) + Propoxyphene + Acetaminophen အစာလမ်း-ဆီးလမ်း-မွေးလမ်း-သည်းခြေလမ်းနာခြင်း၊ ရာသီလာစဉ်နာခြင်း၊ တနေ့ ၄ ကြိမ်ပေးသည်။ မကောင်းသော သတ္တိများ။ ဘိန်း အနည်းငယ်ပါသည်။ ရင်တုံသည်၊ ဆီးတင်းသည်၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်သည်၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးသည်။ Chances of becoming addict to this medicine since it induces sleep
428.	Spectinomycin (HCl), Trobicin သားအိမ်အဝရောင်ခြင်း၊ ဂနိုးရီးယား၊ ဆီးလမ်းရောင်ခြင်း၊ (2,000-4,000 mg IM Daily Single dose); Spectinomycin2Gm IM BD x 24-48 hours and followed by Orally Cefixime 400 mg BD ဂနိုးရီးယားပိုးကြောင့် အဆစ်နာခြင်း၊ 1 Gm IM stat ဂနိုးရီးယား။
429.	Spironolactone, Aldactone (Spironolactone + Frusemide = Lasilactone, Spiromide) ဆီးသွားစေသည့်ဆေး၊ 25-100 mg daily ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = အရေပြားအနီပြင်ထွက်၊ ရာသီမမှန်၊ မူးဝေ၊ ခေါင်းကိုက်၊ စိတ်ရှုတ်၊ ယောက်ျားများရင်သားထွက်။
430.	Stemetil (Phenothiazine), Emidoxyn မူး-အန်-ပျို့သက်သောဆေး၊ 12.5 mg IM/Orally QID စိတ်ရောဂါများ၊ ပျို့-အန်ခြင်း၊ (Vertigo) ခေါင်းမူးခြင်း။
431.	Streptokinase 250,000 IU IV or 1.0 mlU/hour IV Infusion နှလုံးရောဂါ (Attack, Stroke) ရခြင်း၊ သွေးခဲခြင်းကို ကုသရန်ဆေး။
432.	Streptomycin = (အမိုင်နိုဂလိုင်ကိုဆိုက်) အုပ်စု၊ ပဋိဇီဝဆေး၊ တီဘီ၊ ပလိပ်၊ (ဂနိုးရီးယား)၊ နှလုံး အတွင်းသား-သားအိမ်အဝ-ဆီးလမ်းအဝရောင်ခြင်း၊ 1 Gm/dose TB; 2,000-4,000 mg IM Daily; 15 mg/kg OD-BD ဆေးတမျိုးထဲမပေးရ၊ ဆေးပြီးသည့်အတွက်သိပ်မသုံးတော့၊ ဆိုးကျိုး = ကျောက်ကပ်ထိခိုက်။
433.	Sucralfate is used to treat and prevent duodenal ulcers and Gastric ulcers 1 QID
434.	Sulfadoxine-pyrimethamine ငှက်ဖျားကုသရန်-ကာကွယ်ရန်ဆေး၊
435.	Sulfonylureas ဆီးချိုစားဆေး၊
a.	1st Generation: Orinase (tolbutamide) = 500 - 3000 mg; Tolinase (tolazamide) = 100 - 1000 mg; Diabinese (chlorpropamide) = 100 - 500 mg
b.	2nd Generation: Glucotrol (glipizide) 2.5 - 40 mg; Glucotrol XL (ext. rel. glipizide) 2.5 - 20 mg; Micronase, Diabeta (glyburide) 1.25 - 2.0 mg; Glynase (micronized gly.)3- 12 mg
c.	3rd Generation: Amaryl (glimepiride) 1 - 8 mg
d.	Side Effects: low blood sugar, bloating, nausea, heartburn, anemia, weight gain, sun sensitivity, metallic or change in taste in 1% to 3%
436.	Sulphacetamide (10-30% QID) မျက်စိပိုးဝင်ခြင်း မျက်စဉ်း။
437.	Sulphamethoxazole (SMZ) 800 mg BD ဆီးလမ်း-အသက်ရှူလမ်း ဗက်တီးရီးယားနိုင်သည့်ဆေး။
438.	Telavancin: Adult 10 mg/kg IV q24h for 7-14 d; infuse over 1 h; CrCl 30-50 mL/min: 7.5 mg/kg/d CrCl 10-29 mL/min: 10 mg/kg q48h အရေပြားနာ၊ အနာဒဏ်ရာများ၊ နှလုံးအတွင်းသား ရောင်ခြင်း၊ နူမိုးနီးယား၊ အရိုးအတွင်းရောင်ခြင်း၊ အစာဆိပ်သင့်ခြင်း၊ သွားအတု-အရိုးတု-ဆီးလမ်းရောင်ခြင်း၊
439.	Telithromycin (Ketec) 800 mg
440.	Tenovate = Clobetasol Propionate နာတာရှည် အရေပြားအနာများအတွက် လိမ်းဆေး။
441.	Terconazole မွေးလမ်းကြောင်း-သားအိမ်ရောင်ခြင်း၊ 0.4% cream OD x7days, 0.8% cream or 80 mg suppository မွေးလမ်းကြောင်း-သားအိမ်ရောင်ခြင်း။
442.	Terfed-D Tablets (Terfenadine USP 60 mg + Pseudoephedrine Hydrochloride BP 120 mg) = 1 tablet BD အလာဂျီအတွက်ဆေး။
443.	Tetracycline (HCl), Achromycin ပဋိဇီဝဆေး၊
a.	Doxycycline for 7–14 days လိင်မှတဆင့် ကူးစက်သည့် (ကလာမိုင်ဒီးယား) အင်ဖက်ရှင်၊ ကျား-မ ဆီးပြွန်-သားအိမ်ရောင်ခြင်း၊ ကျား-ဆီးကြိတ်-အစေ့ရောင်၊ Pelvic inflammatory disease is often treated with doxycycline plus cefoxitin or cefotetan. Other chlamydial infections (psittacosis, lymphogranuloma venereum, trachoma) and sexually transmitted diseases (granuloma inguinale) also respond to doxycycline.
b.	ဝက်ခြံ၊ အသက်ရှူလမ်းရောင်၊ (လိုင်းမ်) ရောဂါ၊ ဆစ်ဖလစ်ရောဂါ၊ နူမိုးနီးယား၊ နှလုံးအတွင်းသား ရောင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်း-မျက်စိ- မွေးလမ်း-အနာ၊ အမီးဘားပိုးဝင်ခြင်း၊ ဂနိုရီးယား၊ ဆစ်ဖလစ်၊ ဝက်ခြံ၊ မျက်စိနာ၊ အစာလမ်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ တိုက်ဖတ်စ်၊ မျက်ခမ်းစပ်၊ ပလိပ်၊ ကာလဝမ်း၊ အစာဆိပ်သင့်ခြင်း၊ (ဖယ်လ်စီပဲရန်) ငှက်ဖျား၊ မီးလောင်နာ၊ ခရီးသွားစဉ် ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ဝမ်းပျက်၊ မွေးလမ်း-စအိုယား၊ ဆီးနီ၊ အရေပြား-မျက်စိ အရောင်ပြောင်း၊ ခေါင်းကိုက်၊ အစားပျက်၊ ဝမ်းအရောင် ပြော့၊ ကိုယ်ပူ၊ ဗိုက်နာ၊ ကိုယ်ဝန်မပေးရ။
c.	Tetracycline 250 mg BD or Doxycycline 100 mg daily or Erythromycin 250 mg TDS + Prednisolone 0.125% BD မျက်ခွံရောင်ခြင်း၊ Blepharitis
d.	Tetracycline 250-500 mg QID + Sulfonamide 10% Eye drop x 2-3 days ဗက်တီးရီးယားကြောင့် မျက်စိနာခြင်း။
e.	Tetracycline 500 mg QID x2weeks ဆစ်ဖလစ် ပဌမဆင့်၊ ဒုတိယအဆင့်၊ တတိယအဆင့်၊
444.	Thiazolidinediones ဆီးချိုစားဆေး၊
445.	Tibolone သည် Estrogen ခေါ် အမျိုးသမီး ဟော်မုန်းဓာတ်ဖြစ်သည်။
446.	Ticarcillin (71.43 – 95.24 mg/kg TDS Slow IV) (62.5 mg/kg Slow QID IV/IM) ဗက်တိီရီးယားအမျိုးမျိုး၊ လေမကြိုက်သော ဗက်တီးရီးယားဝင်ခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊ သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊
447.	Tigecycline,atetracycline derivative, Tigecycline (Tygacil) 50 mg q12h
448.	Tincture of Iodine (2-7% Potassium iodide or Sodium iodide) Antiseptic ပိုးသန့်ဆေး၊
449.	Tinidazole (Fasigyn) (ထရွိုင်ကိုမိုးနပ်) ပိုး၊ (ဂိုင်ယားဒီးယား) ပိုး၊ မွေးလမ်းကြောင်းရောင်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်လူနာကို ပိုးကာကွယ်ရန်၊ မခွဲမီ ၁၂ နာရီကြိုပေးပါ။2Gm; Adult 1.6 Gm IV infusion; မွေးလမ်းကြောင်းရောင်၊ လေမကြိုက်သည့်ပိုး၊ Orally2Gm stat x2days;2Gm stat followed by 1 Gm OD or 500 mg BD x 5-6 days; အမီးဘား ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊ အသဲပြည်တည်ခြင်း။ Tinidazole 800 mg TDS x 3-5 days + Diiodohydroxyquin 650 mg TDS x 21 days (ဂိုင်ယာဒီးယား) ပိုးဝင်၍ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊2Gm Stat followed by 1 g/day for 5-7 days သွားဖုံးရောင်၊ 1 Gm followed by 1 Gm x 5-6 days ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ အရသာပျက်၊ အနီပြင်ထွက်၊ ခေါင်းမူး၊ ဆီးနီ။
450.	Tobamycin သွေးပြန်ကြောပိတ်ပြီးရောင်ခြင်း၊ သဲခြေအိပ်ရောင်ခြင်း၊ နာတာရှည် အဆုပ်ရောင်၊ နှလုံး အတွင်းသားရောင်ခြင်း၊ မျက်စိပိုးဝင်ခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်းရောင်ခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ၊ အနာ-အကိုက် ဆေးများ ကြောင့်ဖြစ်သည့် အစာအိမ်အနာ၊ ကျောက်ကပ်မကောင်း၍ ဆီးနည်းသည့်ရောဂါ၊ နှလုံးအလုပ် မလုပ်တော့ခြင်း၊ (3-5 mg/kg IM/slow IV) (2.25 mg/kg TDS IM/IV)
451.	Tolnaftate က မှို Fungus ကို နိုင်တဲ့ဆေး။
452.	Tramadol HCl မူးယစ်ပါသည့် အနာ-အကိုက်ပျောက်ဆေး၊ 1 tablet every 4-6 hours အစာနှင့် ဝေးလဲရသည်။
453.	Trazodone 100-300 mg (max 400 mg) စိတ်ကျရောဂါ၊ Depression and Mania
454.	Triamcinolone (Tricort 40) injection isasteroid. It is an anti-inflammatory glucocorticoid used topically in the treatment of various skin disorders. Intra-lesional, intramuscular, and intra-articular injections are also administered under certain conditions. Triamcinolone acetate 0.1% ointment (အက်ဖ်သပ်စ်) အနာ၊ Aphthous ulcer
455.	Triamterene ပိုတက်စီယံလျှော့ခြင်း နည်းစေသည့် ဆီးသွားစေသည့်ဆေး၊ ကိုယ်ရောင်-သွေးတိုး-နှလုံး-ကျောက်ကပ်ရောဂါများ။ ရေဖန်ခွက်အပြည့် အစာစားပြီးသောက်ပါ။ တမျိုးထဲပေးရပါက 100 mg BD တခြားဆေးများနှင့် တွဲပေးပါက ၎င်းထက် လျှော့ပေးပါ။ တနေ့လျင် 300 mg ထက်မပိုရ။ Dytide = (Triamterene and Benzthiazide)
456.	Trimethoprim-Sulfamethoxazol (TMP-SMZ) = Septrin ဗက်တီးရီးယားများအတွက်ဆေး၊
a.	Urinary Tract Infections = Short-course therapy (3 days) with oral double-strength trimethoprim-sulfamethoxazole (160 mg trimethoprim + 800 mg sulfamethoxazole) given twice daily is effective therapy for lower urinary tract infections in women who are symptomatic for less than 1 week.
b.	Trimethoprim-Sulfamethoxazole, one double-strength tablet twice daily for 14–21 days, is effective in acute prostatitis.
c.	In chronic prostatitis, treatment for 6–12 weeks is indicated.
d.	Trimethoprim-sulfamethoxazole is effective for prophylaxis and treatment of Pneumocystis pneumonia, Cyclospora infection, and Isospora belli infection. For therapy of Pneumocystis pneumonia, 15–20 mg/kg/d of trimethoprim and 75–100 mg/kg/d of sulfamethoxazole in three or four divided doses is administered intravenously or orally—depending on the severity of disease—for3weeks. The dose for prophylaxis is 160 mg trimethoprim + 800 mg sulfamethoxazole daily or three times per week. (When given daily, it is also effective prophylaxis against toxoplasmal encephalitis.)
e.	I belli infection in HIV/AIDS has been successfully treated with 160 mg trimethoprim + 800 mg sulfamethoxazole orally four times daily for 10 days followed by twice-daily administration for3weeks.
f.	Cyclosporiasis is successfully treated with 160 mg trimethoprim and 800 mg sulfamethoxazole twice daily for 7–10 days.
g.	Sulfadiazine with pyrimethamine is also used to treat and prevent recurrence of toxoplasmosis.
h.	Sulfonamides are the drugs of choice for Nocardia infections. Trimethoprim-sulfamethoxazole is widely distributed in tissues, penetrates into the cerebrospinal fluid, and has been used to treat meningitis caused by gram-negative rods, though third-generation cephalosporins are now preferred. While it is occasionally used for outpatient respiratory tract infections, the increasing pattern of resistance associated with S pneumoniae has decreased its utility.
i.	Trimethoprim-sulfamethoxazole is effective also for infections with Enterobacter, B pseudomallei (melioidosis), S maltophilia, or B cepacia; in combination with rifampin, for eradication of nasopharyngeal carriage of staphylococci; for prophylaxis against meningococcal disease when susceptible strains predominate; for antibacterial prophylaxis in organ transplant recipients or patients with chronic granulomatous disease; for treatment of L monocytogenes meningitis; and perhaps also for management of pulmonary Wegener granulomatosis.
457.	Trypsin (Protease) သရက်ရွက်ရောင်ခြင်း၊ အစာမချက်နိုင်ခြင်း၊
458.	Tylenol (Acetaminophen 500 mg) အနာသက်သာဆေး၊ အက်စပရင်ကဲ့သို့အရောင်မကျစေနိုင်၊
459.	Ulcimax (Famotidine) = လေနာဆေး၊ 40 mg HS or 20 mg BD x 4-8 weeks Maintenance: 20 mg HS အစာခြေရည်အထက်တက်ခြင်း၊
460.	Valacylovir 1 Gm BD or Famciclovir 250 mg TDS + 5% Acyclovir ointment ပါးစပ်-လိင်လမ်း တို့၌ ဖြစ်သောရေယုံ၊ Valacyclovir (0.5 g) (Valtrex) 0.5–1 g three times daily
461.	Valganciclovir 450 mg (Valcyte) 0.9 g twice daily
462.	Valium (Diazepam) = 2-10 mg BD IV/IM/Oral အတက်ကျဆေး၊ စိတ်ငြိမ်ဆေး၊ အရက်ဖြတ်ခြင်း၊ မွေးဖွါးစဉ်နာခြင်း၊ ဝက်ရူးပြန်၊ မေးခိုင်၊ မခွဲစိတ်မီ စိတ်ငြိမ်စေရန်၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ (ကလိုရိုကွင်း) များသွားခြင်း၊ Orally 2-10 mg BD/TDS/QID; maximum 30 mg daily; ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = စိတ်မကြည်လင်း၊ မူးဝေ။ Cimetidine, Omeprazole တို့နှင့်တွဲမပေးရ။ အရက်ဖြတ်လျင် 10 mg,3or4times during the first 24 hours, reducing to5mg,3or4times daily as needed
463.	Vancomycin (HCl) လူကီးမီးယား၊ ဦးနှောက်ပြည်တည်နာ၊ အူမကြီးရောင်၊ နှလုံး အတွင်းသားရောင်၊ ဝမ်းတွင်းမြှေးရောင်၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = အနီပြင်ထွက်၊ ဖျား၊ သွေးဖိအားကျ၊ ပျို့-အန်၊ Vancomycin (Vancocin) 125 mg three times daily; Vancomycin 20–30 mg/kg; Voriconazole (VFend) 200 mg q12h Vancomycin 15 mg/kg BD (500 mg QID IV Infusion) (0.25 mg/kg.min TDS IV Infusion) (မင်နင်ဂျိုက်တစ်)၊ အခြားပဋိဇီဝဆေးများပြီးသော ပြင်းသည့်ပိုးဝင်ခြင်း၊ Vancomycin 1 Gm BD အရိုးတွင်း ပြည်တည်ခြင်း၊ Vancomycin 10 mg/kg TDS + Ceftazidime3Gm IV TDS ခွဲစိတ်ပြီး ဦးနှောက်မြှေးရောင်၊ Vancomycin 15 mg/kg BD + Gentamycin2mg/kg TDS သွေးပြန်ကြောရောင်၊ ရက်တို နှလုံးအတွင်းသား ရောင်၊
464.	Varogel hasastrong antacid capacity, selective protective action of Gastric mucosa skin, activity control action of pepsin and gas ellimination in stomach. And helps to recover the function of demaged stomach. Each 100ml contains Aluminium hydroxide gel 45.96g + Magnesium hydroxide 30% paste 26.68g + Simethicone 30% emulsion 2.66g. Indications = Hyperacidity, sour stomach, gastric discomfort, stomach heaviness, nausea, vomiting, gastralgia, sour vomiting, elimination of gas. Shake-well, 10ml four times daily
465.	Ventolin (Nebules) 2.5 mg = Salbutamol = ပန်းနာရင်ကြပ်နေစဉ် ရှူရသည့်ဆေး။
466.	Verapamil နှလုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ သွေးခုန်နှုန်းမမှန်ခြင်း၊ = tablet, 40 mg, 80 mg; injection, 2.5 mg /ml in 2-ml ampoule;
467.	Vitamin A (Retinol) Adult = 15,000-500,000 daily Orally and Children = 20,000 IU/Kg ကြက်မျက်သင့် ခေါ် အလင်းရောင်နည်းချိန် မျက်စိအားနည်းသည့်ရောဂါအတွက်ပေးသည်၊ ခုခံအားကောင်း စေရန်၊ ဆဲလ်များအသစ်ဖြစ်စေရန်၊
468.	Vitamin B 1 (Thiamine) ထုံနာ-ကျင်နာ၊ အာရုံကြောကောင်းစေရန်၊ (ရိစ်)၊ ဥ၊ အသဲ၊ အစေ့အဆံ၊ အသားတို့၌ဝါဝင်သည်။ ထုံနာကျင်နာ၊ အာရုံကြောအလုပ်ကောင်းစေရန်၊ ချို့တဲ့ပါက (ဗယ်ရီဗယ်ရီ) ရောဂါ ရစေသည်။ အားယုတ်စေသည်။ အစားမစားချင်ဖြစ်မည်။
469.	Vitamin B 12 (Cobalamin) ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားစေရန်၊ ဆဲလ်တည်ဆောက်ရန်၊ သွေး-အာရုံကြောများ အလုပ်ကောင်းစေရန်အတွက်ပေးရသည်၊ အသဲ၊ အသား၊ နို့ထွက်အစာ၊ ငါး၊ ခန္ဓာကိုယ် ကြီးထွားရန်၊ ချို့တဲ့ပါက Pernicious Anaemia သွေးအားနည်းရောဂါ ရစေသည်။
470.	Vitamin B2(Riboflavin) အသဲ၊ နို့ထွက်အစာ၊ အသီးအရွက်၊ ဥ၊ ဆန်၊ ဂျုံ၊ (ရိစ်) တို့၌ ပါဝင်သည်။ ချို့တဲ့ပါက ကျီးကန်းပါးစပ်နာဖြစ်စေသည်။
471.	Vitamin B6(Pyridoxine) အချို့ဆေးများကြောင့် ၎င်းဓာတ်နည်းရခြင်းအတွက် ပေးရသည်၊ ဥပမာ တီဘီဆေး၊ သွေးအားနည်းရောဂါတမျိုး၊ B-Natal TheraPops နှင့် B-Natal Lozenges တို့သည် ဗီတာမင် ဘီ-၆ ပါသည့် ဆေးများဖြစ်သည်။
472.	Vitamin B9(Folic Acid) 1 mg OD ဖေါလစ်-အက်စစ်ဓာတ်၊ သွေးနီဥ သန်စွမ်းစေရန်၊
473.	Vitamin B Complex ဗီတာမင် ဘီအုပ်စု၊ ပုံမှန်ဇီဝဖြစ်စဉ်များ လုပ်နိုင်စေရန် အားပေးသည်၊ အရက် သောက်သူ၊ ကိုယ်ဝန်ရှိသူ၊ မီးလောင်နာကြီးသူ၊ ခွဲစိတ်ထားသူများပေးရန်၊
474.	Vitamin C (Ascorbic Acid) အနာကျင်စေရန်အားပေး၊ နာတာရှည်ရောဂါ၊ အရိုး၊ သွား၊ သွားဖုံး၊ အရွတ်၊ သွေးကြောများ ကောင်းစေသည်။ ခုခံအားအတွက်အသုံးကျ။ ချို့တဲ့ပါက (စကာဗီ) ရောဂါရ၊ မီးလောင်နာ၊ 100-500 mg daily စိမ်းသည့်အသီးအရွက်၊ အသီးအနှံများ၌ပါသည်။
475.	Vitamin D = အရိုးတည်ဆောက်ရန်အသုံးဝင်၊ အသက် ၁၃ နှစ်အောက်5mcg (200 IU) မှစ၍ အသက်ကြီးသူများအား 10 mcg (400 IU) နှင့် ရဝ ကျော်များအား 15 mcg (600 IU) ပေးသင့်၊ နေရောင်မရသူများအား တနေ့လျင် 25 μg (1000 IU) ပေးသင့်သည်။ ငါးကြီးဆီ၊ နို့ထွက်အစာတို့၌ပါသည်။ နေရောင်ကြောင့် ဗီတာမင်အေမှ ဒီဖြစ်လာသည်။ အရိုးတည်ဆောက်ရန်၊ ချို့တဲ့ပါက အရိုးပြော့ရောဂါရစေသည်။ Alfacalcidiol (Calciferol) 1.4 ug/kg daily
476.	Vitamin E အသီးအရွက်ကရသော ဆီ၊ ဂျုံ၊ ဆန်၊ ပေါင်မုံ့၊ ဥ၊ အစေ့အဆံတို့၌ပါသည်။ သွေးဥ၊ အာရုံကြော၊ ကြွက်သားများ အလုပ်ကောင်းစွာလုပ်စေရန်၊
477.	Vitamin K သွေးထွက်ရောဂါအတွက်ပေးသည်၊ မုံလာရွက်၊ မုံလာထုပ်၊ ဟင်းနုနွယ်ရွက်၊
478.	Vometil အအန်သက်သာဆေး၊= 5-10-30 mg BD or TDS; Vomistop = အအန်သက်သာဆေး၊
479.	Voriconazole (VFend) 200 mg twice daily
480.	Xylocaine (Lignocaine) ထုံဆေး၊ 0.5-1.0%; Xylocaine 5% (Lidocaine) ointment အထုံ-အယား-အနာ သက်သာစေရန်လိမ်းဆေး၊ နှလုံးခုန် မမှန်ခြင်းအတွက် သွေးပြန်ကြောထဲ ထိုးပေးနိုင်သည်။ Xylocaine 10% Pump Spray အနာဒဏ်ရာများအား ချက်ချင်းအနာသက်သာစေသည့် ပန်းရသောထုံဆေး။
481.	Xylometazoline 0.05-0.1% sprays TDS/QID ရက်တို ဆိုင်းနပ်စ်၊
482.	Zincovit = Vitamin A + E + B 1 + B2+ B6စသည့် ဗီတာမင်များပါသည့်ဆေး၊
Contributed by Dr. Tint Swe, MBBS (Mandalay), Sama 4272
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆေးဝါးဗေဒ&oldid=494017" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၉:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။